Accounts ကို Rebooting: Page3- Porn of Your Brain of 3
အကောင့်များပြန်လည်ဖွင့်ခြင်းစာမျက်နှာ ၃ တွင်သင်၏ Brain on Porn မှစုဆောင်းထားသောနောက်ဆုံးပေါ်ဇာတ်လမ်းများပါဝင်သည်။ ငါတို့ကြည့်ပါ မူရင်းပြန်ဖွင့် Accounts ကိုစာမျက်နှာ နှင့် Accounts ကိုပြန်ဖွင့်: စာမျက်နှာ 2, အရာ 4,000 ပိုပြီးပြန်လည်နာလန်ထူပုံပြင်များကျော်ဆံ့။ ED (erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု) သို့မဟုတ် DE (နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်) ဖြေရှင်းသောကို restart အကောင့်အသစ်များ၏အများစုကခေါင်းစဉ်မှာသူတို့ကိုဖော်ပြထားခြင်း။
ဤစာမျက်နှာကို porn စွဲသူများပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဖြင့်ရေးသားထားသော "အကြံဥာဏ်ကော်လံ" ပါရှိသည်
ဤစာမျက်နှာကိုမှလင့်များပါရှိသည် ကွန်ရက်စာမျက်နှာပြင်ပဘလော့ဂ်များနှင့်အကြောင်းအရာများ porn စွဲများနှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကနေပြန်လည်နာလန်ထူ chronicling ။
အနည်းငယ် 90-နေ့ + အစီရင်ခံစာများ reddit.com NoFap ထံမှ
porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကနေပြန်လည်နာလန်ထူဖော်ပြတိုတောင်းပုံပြင်များ၏ 8 စာမျက်နှာများ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
အဆိုပါအခြား Porn စမ်းသပ်မှု - ဆောင်းပါး၏အောက်ဖေါ်ပြပါအကြောင်းအရာ ၁၀၀၀ ကျော်ကိုဖတ်ပြီး“ rebooting သက်သာခွင့်”
ထို့ပြင်များစွာသော Mini-အကောင့်ထဲမှာရှိပါတယ် သူတို့ reboot အဖြစ်လူတွေဘယ်လိုအကျိုးရှိမြင်သနည်း
ပညာရေး = Erectile အလုပ်မဖြစ်
PIED = Porn-သွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ်
DE = နှောင့်နှေးသုက်
PE = အချိန်မတန်မီသုက်
PMO = Porn, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, orgasm
MO = တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း & Orgasm
HOCD = ငိုကြွေးနေသောကောင်ကလေး obsessive compulsive Disorder
SOCD = လိင် obsessive compulsive Disorder
gf - ရည်းစား
SO = သိသိသာသာအခြား
FAP သို့မဟုတ် fapping = တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ
'ငါကျေနပ်မိတယ်' ငါ ၁၀ နှစ်အရွယ်မှာစွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲသွားတယ်၊ ဒါကငါ့ဘဝပျက်စီးသွားစေတယ်
"ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ" ထို့နောက်ပြန်လာသော။ အခုငါ့အရေပြားတောက်ပနေသည်။ စွမ်းအင်အများကြီးတိုးတက်ခဲ့သည်။ နောက်ကျတာတွေအများကြီးမေးလာပြီ။
“ Los Efectos de la Pornografía en tu Cerebro” (၁၄ မိနစ်ဗီဒီယို)
၁ နှစ် - မိန်းကလေးများသည် ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ ပို၍ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ အသေးစားအရာများသည်ကျွန်ုပ်ကိုမထိခိုက်စေပါ၊ ကျွန်ုပ် ပို၍ အသက်ရှင်သည်၊ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအသံ
၁ နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်အရာရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပိုမို၍ စွမ်းအင်၊ တက်ကြွသောနှင့်အသည်းအသန်ခံစားသည်။ မိန်းကလေးတွေကပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်
၁ နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်စူပါအင်အားကြီးကိုမှမတွေ့ပါ။ အသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိသောစိတ်ထက် ပို၍ တန်ဖိုးရှိသောအရာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
၁ နှစ် - ကျွန်ုပ်သည် ၂၅ နှစ်ကြာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါဒီ Streak လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဖြစ်ပျက်အလိုရှိ၏
၁ နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်မည်သူမျှမဟုတ်ပါ။ ယခုကျွန်ုပ်သည်ဥပဒေကျောင်းတွင်အတန်းတက်နေပြီးတက္ကသိုလ်ကိုယ်စားလှယ်၊ အတွင်းရေးမှူးကျောင်းသားကောင်စီဖြစ်သည်
၁ နှစ် - ငါအလုပ်များဆုံးညများမဟုတ်သည့်လင်ယောက်ျားဖြစ်ခြင်းမှသည်ဇယားများမှလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။
၁ နှစ် - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုရှိလာတယ်၊ မိန်းမနဲ့စကားပြောဖို့ကိစ္စနည်းတယ်။
၁ နှစ် - ယုံကြည်မှုတိုးလာသည်။ စွမ်းအင်မြင့်တက်။ တိုးမြှင့်လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှု။ ဘဝ၌သေးငယ်သောအရာများ၏ပျော်ရွှင်မှု။
၁ နှစ် - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိထားမိလာခြင်း၊ အမျိုးသမီးများကိုကန့်ကွက်ခြင်းများရပ်တန့်ခြင်း၊ ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်း၊ ကျွန်ုပ်မည်သူမဆိုအားယုံကြည်စိတ်ချစွာပြောဆိုနိုင်ခြင်း၊
၁ နှစ် - ပစ္စည်းတွေကိုလုပ်ဖို့ငါ့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကများပြားလာတယ်။
၁ နှစ် - ကျွန်ုပ်၏မိန်းကလေးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ပိုမိုပေါ့ပါးသည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းရန်အချိန်ပိုရှိသည်၊ တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်၌ ပို၍ ဆန္ဒရှိသည်။
၁ နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ရောဂါလက္ခဏာများသည်လုံးဝသက်သာသွားပြီ၊ စိုက်ထူပြီးပြီ၊ လိင်ဆက်ဆံချင်သည်၊
၁ နှစ် - အကျိုးခံစားခွင့်
၁ နှစ် - ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးနှစ်လအကြာမှာစိုးရိမ်စိတ်ဝင်လာတယ်။ အခုပိုကောင်းတယ်
NoFap ၏တစ်နှစ် - ဘဝပြောင်းလဲခြင်း!
NoFap တွင် ၁ နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ drive သည်ဆယ်ဆတိုးလာခဲ့သည်
၁ နှစ်ညစ်ညမ်း - ကျွန်ုပ်၏အတွေးများ
လွန်ခဲ့သော ၁.၅ နှစ်ကကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ပင်စိုက်ကြည့်ခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ PIED ကိုပြန်လည် စတင်၍ ကုသပေးခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ငါ့အဟောင်းများကိုနည်းလမ်းတွေသို့ပြန်သွား၏။
100 ရက် - အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အချို့သော Advanced Advice (Long Post)
ရက် ၁၀၀ - အသားအရေ၊ မှတ်ဉာဏ်၊ အစာစားချင်စိတ်၊ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်း၊
ရက် ၁၀၀ - ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောအခြေခံကျသောပျော်ရွှင်မှုပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိသည်။ ဝေးလူမှုရေး, လိင်တက်ကြွ
100 ရက် - ငါ့ဇနီးကိုရန်လိုမုန်းတီးမှုနည်းတယ်၊ စိတ်ပျက်ဖို့ပိုပြီးဒဏ်ခံ; အွန်လိုင်းတာ ၀ န်ခံမှုအဖွဲ့ကကူညီသည်
ရက်ပေါင်း ၁၀၀ - ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ဘဝပန်းတိုင်များ၌ငါ့ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများမည်မျှစောင့်ကြည့်နေသည်ကိုသတိပြုမိနိုင်ခဲ့သည်။
ရက်ပေါင်း ၁၀၀ (tapering ပြီးနောက်) - PED - သွေးဆောင် ED သည်ပျောက်ကင်းသွားသည်
ရက်ပေါင်း ၁၀၀ ကတော်တော်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ငါမှာစွဲလမ်းမှုမရှိဘူးလို့စပြောမယ်
ရက်ပေါင်း 100 အစီရင်ခံစာ။ PMO ကောင်းသောအဘို့သွားပြီ။ ဘဝသစ်
အကျိုးခံစားခွင့်ကအရမ်းမြန်ဆန်စွာဆိုင်တွေမှာနေကြသည် Nofap ၏ 1000 + နေ့ရက်များ,
၁၀၁ ရက် - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေမှုပိုမိုခိုင်မာလာတော့အဆိပ်အတောက်ကိုငါခွဲခြားသိနိုင်တယ်
၁၀၇ ရက် - ဘ ၀ သစ်တစ်ခုနှင့်တူသည်။ ငါသင်ယူသောအရာကို။
၁၂ နှစ်လုံးလုံးအငြင်းပွားဖွယ်ကောင်းသောသရုပ်ဆောင်များနှင့် Viagra ကိုတောင်မှကျွန်တော်ဘာမျှမခံစားခဲ့ပါ၊
ရက်ပေါင်း ၁၂၀ - စိုးရိမ်စိတ်ကိုမှတ်မိနိုင်စွမ်းမရှိသေးသော်လည်းလူကမူကွဲပြားခြားနားသည်
130+ နေ့ရက်များ - ငါလစဉ်နီးပါးဖျားနာခဲ့သည်, ယခု5လနီးပါးသွားပြီနှင့်ငါကျန်းမာတယ်
14 လ - ငါကပိုပျော်ရွှင်တယ်။ စိတ်ကျရောဂါနီးပါးသွားပြီ။ ငါသိသိသာသာလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်သိသိသာသာလျော့နည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိသည်။
PMO စွဲ၏ 14 နှစ်ပေါင်း။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်။
သွားပြီဦးနှောက်မြူ၏ 15 နှစ်ပုံသဏ္ဍာန်အတွင်းအမျိုးသမီးများပိုမိုယုံကြည်မှုနှင့်ရိုသေလေးစားမှုတယ်
ရက်ပေါင်း ၁၈၀ - ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးရှိကြောင်းခံစားသိမြင်သည်
၂ လကြာညစ်ညမ်းမှုမရှိ - ကျွန်တော်ဟာလူမှုရေးကိုစတင်ခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါဟာလူတွေ၊ အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပိုမိုနက်ရှိုင်းတဲ့အဆင့်ကိုစတင်ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်။
2 nofap လနဲ့ကျွန်မဗြိတိသျှကြည်းတပ်ပူးပေါင်းငါ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်
၂ နှစ်ညစ်ညမ်းမဟုတ် - ငါ“ ဟုတ်တယ်! ဘဝ
၂ နှစ်ပြန်လည်နာလန်ထူ - ကျွန်ုပ်၏အကြီးမားဆုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုအောင်မြင်ခြင်း
၂ နှစ် porn free - စွဲလမ်းမှုမရှိသောဘဝသည်အရောင်အဆင်းနှင့်ပြည့်သောဘဝဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှပြန်မသွားပါဘူး
ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ2နှစ်ပေါင်း
porn မပါဘဲ2နှစ်။ ဒီနေရာမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
200 Day Success Story - ပထမဆုံးဆုတောင်းခြင်းနှင့်တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း
ရက်ပေါင်း ၂၀၀ - ကျွန်ုပ်ဘဝပြောင်းလဲခြင်း၊ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်သိရှိခဲ့ရာများ
21 နှစ်အရွယ်ကောင်လေး porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု beats
ရက်ပေါင်း ၂၅၀ -“ အကန့်အသတ်မဲ့” သည်ကျွန်ုပ်ယခုခံစားနေရသောခံစားမှုဖြစ်သည်
“ အားထုတ်မှု” NoFap ၏ရက်ပေါင်း ၂၅၀ (GoldJacketLuke မှဗွီဒီယို)
၃ လသန့်ရှင်း - မနေ့ညကလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ် - Pornfree ကငါ့ PIED
၃ နှစ်ကြာပြီးနောက် - ငါဟာအခုပိုပြီးပျော်ရွှင်လာတယ်။ ငါစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိတော့ဘူး။
၃ နှစ် NoFap - ဒီမှာကျွန်တော့်ခံစားခွင့်များစာရင်း
PIED ၏3နှစ်ပေါင်းညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲနှစ်လအတွင်းသွားပြီ
30 ရက်ပေါင်းမျှ PMO မရှိ, porn-သွေးဆောင် ED! ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်အတူအောင်မြင်မှု။
ရက်ပေါင်း ၃၀၀ - သင်ခံစားရမည့်အကျိုးကျေးဇူးအချို့
ရက်ပေါင်း ၃၀၀ nofap - ပြောင်းလဲသွားတာ
329 နေ့ရက်ကာလ, ငါ့ PIED အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေ, ပြီးတော့ ...
ရက်ပေါင်း ၃၃၀ - မနေ့ကလောက်ဖြစ်ပုံရတယ်၊ ကျွန်တော့်ဇနီးကသူမ၊ ငါ BS နှင့်အတူလုပ်ခဲ့တာ၊ ငါတို့အိမ်ထောင်ရေးပြီးသွားပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။
ရက်ပေါင်း ၃၆၅ ရက် - စူပါအင်အားကြီးများမရှိသော်လည်းအလွန်အမင်းအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည့်အပြုအမူကိုကျွန်ုပ်အစားထိုးလိုက်သည်၊ ပိုမိုကျန်းမာသောအလေ့အထများကိုမွေးထုတ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ပိုမိုကြီးမားသောဘဝကိုရရှိခဲ့သည်။
365 နေ့ရက်များ - PMO ရန်သူလမ်းညွှန်
၃၆၅ ရက်အောင်မြင်မှု - ကျွန်တော်တို့ဟာအမှန်တရားကိုသိတဲ့လူနည်းစုဖြစ်ရမယ်
390 Days no PMO - ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများဆက်လက်ရယူပါ
မျိုးစုံစွဲလမ်းရာမှ4လအတွင်းစင်ကြယ်သော
4 နှစ် NoFap အစီရင်ခံစာ, ဆက်ဆံရေးဟာပုံပြင်
နောက်လငါ့အစာတမ်းခုခံ 400 ရက်ပေါင်းခက်ခဲ mode ကို,
ရက်ပေါင်း ၄၀၀ ရက် Hardmode - ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်းမရှိတော့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်ဘဝ၏သေးငယ်သောအရာများကိုပင်ပျော်ရွှင်သည်။
ရက်ပေါင်း ၄၅၀ - ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုမြင့်တက်လာသည်။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိတော့ပါ ငါမိန်းကလေးတွေနဲ့စကားပြောရတာပျော်တယ်
ဒါဟာခုနှစ်တွင် 476 နေ့ရက်များဖြစ်သွား: ငါ 30 မှာကျမရဲ့အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံး
ရက်ပေါင်း ၄၉၀ - သင်ကြားသမျှဇာတ်လမ်းသည်မှန်၏။ စွမ်းအင်တွေ၊ ခွန်အားတွေ၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ အမြင်အာရုံကငါထိန်းချုပ်ထားတဲ့လုံးတစ်လုံးအဖြစ်သို့ပြန်ရောက်သွားသည်။
ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းအတွေးအခေါ် (၅) ခု - သင်၌ 'ဘာကြောင့်' မရှိဘူးဆိုရင် 'ဘာကြောင့်လဲ' လို့စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အားနည်းတဲ့အချိန်လေးမှာ
၅ လ - ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကိုမေ့သွားသောစကားဝှက်ဖြင့်ကန့်သတ်ထားရပါမည်။ အခုတော့လူတွေနဲ့ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေဖြစ်လာပြီ၊ လိင်ဟာသူလိုခံစားလာရပြီ၊
5 နှစ် - ပြင်းထန်သော ED ရှိခဲ့ပါတယ်။ NoFap ဟာပျောက်ကင်းသွားတယ်။ လိင်ယခုပြင်းထန်သည်။
ရက်ပေါင်း ၅၀ - ကြာရှည်စွာသုတ်သင်ရှင်းလင်းခြင်းကိုကုသခဲ့သည်
ရက်ပေါင်း ၅၀၀ - မျက်နှာနှင့်မေးစေ့ကိုကျယ်လာစေခြင်း၊ ပို၍ မြင်နိုင်သောမေးရိုးများ၊ ပုံမှန်ကြည့်ခြင်း၊ မျက်နှာအသားအရေနှင့်ဆံပင်ပုံသဏ္,ာန်၊ ပိုပါးသောကြွက်သားများစသည်တို့ဖြစ်သည်။
၆ လ - PIED နှင့် DE ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ကျွန်တော့်ဘဝဟာ ၁၈၀ လုံးလုံးလုပ်ခဲ့တယ်။
၆ လ - ဤခရီးသည်ကျွန်ုပ်ကိုတကယ်ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
၆ လလုံး ၀ လုံး ၀ မရှိ (ဘာကြောင့်ငါစွန့်လွှတ်ခဲ့ရတာလဲ) - Video by BigNoKnow
6 နှစ်ပေါင်း! အကြှနျုပျ၏စွမ်းအင်သစ်ငါ့အကြောင်းကိုအရာအားလုံးမှတဆင့် bleeds
၇ လ - ED & Delayed သုက်လွှတ်မှုသည်ရှုံးနိမ့်နေပုံရသည်
၈ လ - ကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေး။ ငါ၏အ 8 နှစ်အရွယ်နှင့်အများကြီးပိုကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုး။ လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်တိုးတက်လာသည်။
၉ လ - ဆေးဝါးများ၊ အစောင့်အကြပ်များ၊ HOCD မှအမျိုးသမီးများအတွက်အရက်သောက်ခြင်းမှသည်အလုပ်သစ်သို့၊
၉ လ - ပျော်ရွှင်မှု၊ စိတ်တိုခြင်း၊ အိပ်စက်ခြင်း၊ မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်ပိုမိုရင်းနှီးသည်
90 ရက်အစီရင်ခံစာ - အကောင်းအဆိုး cons
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ၅ နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်ငါလုပ်ခဲ့တယ်။
90 Days - ပိုကြီးတဲ့မျက်လုံးတွေ၊ ဦး နှောက်မှေးမှိန်နေခြင်း၊ လူမှုရေး၊ အမျိုးသမီးဆွဲဆောင်မှု၊ စွမ်းအင်ပိုများခြင်း၊ ယုံကြည်မှုမြင့်မားခြင်း
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ကောင်းမွန်သောရလဒ်များနှင့်အကြံပြုချက်များ
90 ရက် - စွမ်းအင်နှင့်ပြည့်ဝ၏။ အဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်ပူပန်မှု / ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်စိတ်ကျရောဂါ။ စိတ်ခံစားမှုကိုပိုမိုသတိထားမိ။ ပိုများသောပစ္စုပ္ပန်။ ယုံကြည်မှုတိုးမြှင့်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ငါလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါပြောချင်တာကိုဖတ်ပါ။
ရက်ပေါင်း ၉၀ - အတွင်းထဲ၌သေပြီဟုမခံစားရတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်အတွင်းရှိစိတ်လှုပ်ရှားမှုသမုဒ္ဒရာနှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ငါကနုတ်ထွက်ပြီးနောက်ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံစားခဲ့ရပြီးဒါဟာအံ့သြစရာပဲလို့သင့်အားပြောပြပါစေ
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ ၌နိုးနိုးကြားကြားရှိပြီးအရာအားလုံးမည်မျှပျော်သည်ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်
Days 90 - ကျွန်ုပ်သည်ပြင်းထန်သော PIED မှသည်ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိရည်းစားနှင့် ၁ ရက်တွင်တစ်ကြိမ် ၅ ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံသည်
Days 90 - ကိုယ်ခန္ဓာအသွင်အပြင်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ စိတ်အပြောင်းအလဲမရှိခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနှင့်ယုံကြည်မှုမြင့်မားခြင်း၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်လေဆာအာရုံစူးစိုက်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း၊
ရက် ၉၀ - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီးမှုကနှိုးဆွသော၊
ရက် ၉၀ - ကျောင်းတွင်ပိုမိုအာရုံစိုက်ခြင်း၊
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ကျွန်ုပ်၏ပုံပြင်နှင့်ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိရန်စည်းမျဉ်း ၅ ခုရှိသည်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - PIED - နံနက်သစ်သားသည် ၄၅ ရက်ဝန်းကျင်တွင်ပြန်လာသည်။ ED သည်ရောဂါပျောက်ကင်းကြောင်းအတော်လေးယုံကြည်သည်
ရက် ၉၀ - Porn သွားပြီးသွားပါပြီ။
Days 90 - ကျွန်ုပ်သတိပြုမိသောကောင်းကျိုးများသည်မယုံနိုင်လောက်သောဘဝတွင်ယေဘုယျအားဖြင့်“ ပျော်ရွှင်” ပုံရသည်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ဤသည်ကို (၅) နှစ်တိုင်အဆက်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားပြီးနောက် - ကျွန်ုပ်နောက်ဆုံး၌မည်သို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
90 ရက် - မယုံနိုင်စရာ။ စိတ်ကျရောဂါကုသ; လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုလျော့နည်းသွား; အရာအားလုံးဘယ်လောက်လှသလဲဆိုတာငါသတိထားမိတယ်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - Real World သို့ကြိုဆိုပါ၏
ရက်ပေါင်း ၉၀ - နုတ်ထွက်ခြင်းသည်ခက်ခဲသည်။ ထောက်ခံမှုရ
ငါထို့နောက်ယခုအကြားဘဝမှာရှိကွဲပြားခြားနားမှုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ကြရတာဟာ 90 နေ့ရက်များ
ရက်ပေါင်း ၉၀ ပြီးဆုံးခြင်း။ ဤတွင်အကျိုးကျေးဇူးများအချို့ရှိပါသည်
ဆုံးရှုံးမှုများစွာအပြီးတွင်ရက်ပေါင်း ၉၀ အပြီးသတ်ပြီးစီးသွားသည်။ သင်သည်မရေမတွက်နိုင်သောအကြိမ်များကျရှုံးရန်ဆန္ဒရှိပါကအားသာချက်များစွာရှိသည်။
90 Days кийин - စူပါပါဝါနှင့် NoFap အပေါ်ငါ့အကြံအစည်
90 ရက်ပေါင်း Nofap တစ်ဦးလက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်တို့က
ရက်ပေါင်း ၉၀ Hard Mode လုပ်ဆောင်ပြီးပြီ - ရိုးသားစွာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ရက်ပေါင်း ၉၀ ကျော် - ငါပျောက်ကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်သိခဲ့တာလဲ
၉၄ ရက် - ကျန်းမာရေး၊
NoFap ၏ ၉၉ ရက် - ဝက်ခြံ၊ စွမ်းအင်နှင့် ၀ မ်းချုပ်ခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်
တစ်ဦးကမကောင်းတဲ့နေ့ကယခုညစ်ညမ်းသောနေ့ထက်တစ်ဦးသန်းကြိမ် သာ. ကောင်း၏
တစ်နှစ်အခမဲ့၊ ပိုစွမ်းအင်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမစဉ်းစားတော့ပါ
ဖျော်ဖြေနိုင်ပါ အကယ်၍ သင်သည် PIED ရှိပါကသင်သည် Hard MODE ကိုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်
ဝက်ခြံငါပျော်မွေ့သောအရာတို့ကိုလုပ်နေတာ, အကြောင်းကို 95% အားဖြင့်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားယုံကြည်မှုတက်ရှင်းလင်း
၁၀ နှစ်ကြာပြီးနောက်ငါ PIED ထဲသို့ဝင်နေသည်ဟုခံစားနိုင်သည် - ရက်ပေါင်း ၅၀ မှ ၆၀ အတွင်း PIED ပျောက်ကွယ်သွားသည်
100 ရက်အကြာမှာ orgasm လိင်စဉ်အတွင်းအားကောင်းများမှာ
ရက်ပေါင်း ၂၀၀ ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဟာကျွန်တော့်စိတ်ကိုမလွှမ်းမိုးတော့ဘူး။ ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ငါ့ဆက်ဆံရေးဟာအများကြီးပိုကောင်းတယ်။ 200% ပိုကောင်းလိုပဲ။
အဘယ်သူမျှမ porn4နှစ်ပြီးနောက် ... တစ်နှစ်ကျော်ဆက်ဆံရေးအတွက်
ကြိုးစားနေ၏4နှစ်ပေါင်းပြီးနောက်အရာအားလုံးတိုးတက်လာနေသည်
၆ နှစ်ကြာပြီးနောက်၊ ဘယ်သောအခါမှရက်ပေါင်း ၉၀ NoFap မလုပ်ပါနဲ့။ ဇွဲရှိခြင်းကြောင့်ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများ။
90 ရက်အကြာမှာငါ၏အ IBS ကျိန်းသေကြောင့်ဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သကဲ့သို့မကောင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါ, ဝမ်းနည်းမှုနှင့်အထီးကျန်အားလုံးသွားကြပြီ။
90 ရက်အကြာမှာ, ငါ့အမာခံ fetish စက်ဆုပ်ရွံရှာရှာတွေ့
ရက်ပေါင်း ၉၀ ကျော်ပြီးနောက်ငါမတိုးတက်၊
သွားကြောင်း PIED ခြောက်လပြီးနောက်, ငါ့ဦးနှောက်ကိုငါ့လိင်တံနှင့်အတူချိတ်ဆက်
အသက် ၁၄ - ၉၀ ရက် - ကျွန်ုပ်ဘ ၀ နှင့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောအရာများကိုပျော်မွေ့စွာစတင်ခဲ့သည်။ နောက်တဖန် "ဖုတ်ကောင် mode ကို" ။
(၁၄) နှစ် - မိန်းကလေးများကိုကွဲပြားခြားနားစွာစတင်ရှုမြင်ခြင်း
(၁၄) နှစ် - ချစ်သူ၊ ပိုမိုရှင်းလင်းသောစိတ်၊
အသက် ၁၄ - အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးတက်လာခြင်း၊ ကျွန်ုပ်မျက်လုံးများကိုချီးမွမ်းခြင်း၊
(၁၄) နှစ် - ကျောင်းအလုပ်လုပ်ရန်လှုံ့ဆော်ခံရခြင်း၊
အသက် ၁၄ - မိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ပြီးသူငယ်ချင်းများနှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်သည်
အသက် ၁၄ - လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်ကိုငါလိုချင်တဲ့သူကိုငါလွတ်လွတ်လပ်လပ်စကားပြောနိုင်တဲ့နေရာအထိလျှော့ချလိုက်တယ်။ ပိုမိုယုံကြည်မှု။ စွမ်းအင်များများလေ။ မိန်းကလေးဆွဲဆောင်မှုရူးသွပ်သည်
အသက် ၁၄ - စွမ်းအင်များများနှင့်ဒphilosophနိကဗေဒနှင့်သင်္ချာအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်
၁၅ နှစ် - စိုးရိမ်ပူပန်မှုပျောက်ကွယ် ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကျရောဂါသွားပြီ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပျောက်ကွယ်သွားသည်။
အသက် ၁၅ နှစ် - NoFap မတွေ့ခင်တကယ့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုကျွန်တော်မခံစားရဘူး၊ သူငယ်ချင်းမရှိဘူး၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မုန်းခဲ့တယ်
အသက် (၁၅) နှစ် - ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားပြီ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနီးပါးသွားပြီ။ စွမ်းအင်များများလေ။ တေးဂီတကပိုကောင်းတယ်၊ အစားအစာကပိုအရသာရှိတယ်၊
အသက် ၁၅ - အစွန်းရောက်ပစ္စည်းများသို့အသွင်ပြောင်းခြင်း၊ သတ်သေခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးပြီး HOCD - ယခုပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်
အသက် ၁၅ - စမ်းသပ်မှု
အသက် ၁၅ - အဆင့်များတိုးလာသည်။ ငါကျောင်းပြဇာတ်အဘို့အကြိုးစားခဲ့နှင့် ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္ got ရတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပိုတွေ့မယ် ငါပစ္စည်းပစ္စယပြီးပြီရ
အသက် ၁၅ နှစ် - ငါအံ့သြစရာကောင်းတယ်။ ငါဘယ်သူ့ကိုမှအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့စကားမပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမဲ့အခုတော့ပြproblemနာမရှိဘူး
အသက် ၁၅ နှစ် - ငါသိသိသာသာပိုပြီးယုံကြည်မှု၊ ရယ်စရာတွေခံစားခဲ့ရတယ်၊ ငါ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိနေတယ်၊
အသက် ၁၅ နှစ် - ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထက် ၃ လပိုမိုတိုးတက်ခဲ့သည်
အသက် ၁၅ - စိတ်ကျရောဂါမရှိတော့ပါ။ ယုံကြည်မှု, နေရာတိုင်းအမျိုးသမီးဆွဲဆောင်မှု
အသက် ၁၆ - ရက် ၃၀၀ - အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ခက်ခဲသောဝန်ခံချက်
အသက် ၁၆ - ၉၀ PMO ၏နေ့ရက်များ
အသက် ၁၆ နှစ် - စွမ်းအင်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုတစ်တန်၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုပျောက်ကွယ်လုနီးပြီ၊
အသက် ၁၆ - အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့် porn
(၁၆) နှစ် - ဦး နှောက်မြူမှုန်ဝါးသွားသည်။ ဒါဟာကျောင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ယုံကြည်မှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှုခေါင်မိုးမှတဆင့်ဖြစ်ကြသည်
အသက် ၁၆ နှစ် - ကတိသစ္စာပြုစာချုပ်၊ တရားအားထုတ်ရန်၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊
အသက် ၁၆ နှစ် - ပထမရည်းစား ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားပြီ၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှု
အသက် ၁၆ နှစ် - ရက် ၇၀ ခန့်တွင်ပထမဆုံးရည်းစားရပြီ။ တကယ့်ဘဝလူတစ် ဦး သည် pixel များထက် ၁၀၀x ပိုကောင်းသည်
အသက် ၁၆ နှစ် - ငါဟာအားနည်းပြီးအရည်အချင်းမရှိဘူးလို့အမြဲတမ်းထင်ခဲ့ပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှားကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့တယ်
အသက် ၁၆ နှစ် - အံ့သြစရာကောင်းသူကျွန်ုပ်မည်သူမဆိုနှင့်စကားပြောနိုင်သည်
အသက် ၁၆ နှစ် - ငါပုံကြီးချဲ့နေသလိုပဲဟုကျွန်ုပ်ထင်သော်လည်း NoFap သည်ကျွန်ုပ်ကိုတကယ်ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်
အသက် ၁၆ - ၁၃ လရှိပြီ။ အဲဒါကငါ့ဘဝမှာဘယ်လောက်ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတာငါမပြောနိုင်ဘူး။ ဒါဟာခရီးတစ်ခု၏ငရဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးကြိုးစားရကျိုးနပ်ပါသည်။
(၁၆) နှစ် - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်စိတ်နှင့် ဦး နှောက်အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုလေ့လာခြင်း
အသက် ၁၆ နှစ် - ပေါင် ၂၀ ဆုံးရှုံးသွားပြီး၊ အိပ်မက်တွေကိုပိုကောင်းအောင်၊
အသက် ၁၆ နှစ် - ကိုယ်အလေးချိန်ကျသွားတာ၊ အမျိုးသမီးတွေအမြင်ပြောင်းသွားတာ၊
(၁၆) နှစ် - စိတ်သည်ပိုမိုရှင်းလင်းစွာခံစားရပြီးအလုပ်များကိုကျွန်ုပ်ကိုင်တွယ်နိုင်သည်
အသက် ၁၆ နှစ် - အမျိုးသမီးများအပေါ်ကျွန်ုပ်၏သဘောထားပြောင်းလဲနေသည်။ ကျွန်ုပ်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်၎င်းတို့ကိုတည်ရှိပြီးအလောင်းများအဖြစ်ရှုမြင်မည့်အစားအမျိုးသမီးများသည်ခံစားချက်များကိုလူသားများအဖြစ်မြင်သည်
အသက် ၁၆ နှစ် - လွန်ခဲ့တဲ့သုံးလကကျွန်တော့်ဘဝ
အသက် ၁၆ နှစ် - ကျွန်ုပ်ဘဝသည် ၁၈၀ ပြည့်ခဲ့ပြီ။ အကျိုးကျေးဇူးများစွာခံစားခဲ့ရသည်။
အသက် ၁၆ နှစ် - သင်ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ဘဝသည် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်လိမ့်မည်။ Shit ဖြစ်လိမ့်မယ်။
၁၆ နှစ် - လက်ထိတ်ခတ်များကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီ
(၁၆) နှစ် - လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်ုပ်၏အတွေးအမြင်သည်ပြန်ပေါ်လာသည်။ ကျောင်းရှိရလဒ်သည်ခေါင်မိုးမှတစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။ သာယာဝပြောတဲ့၊
အသက် ၁၇ - ၃ နှစ် - Nofap ဟာပြောင်းလဲသွားပြီးကျွန်တော့်ဘဝကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ အစမှာငါရှိနေသေးတယ်လို့ခံစားရတယ်
အသက် ၁၇ - ၇၅ နှစ်၊ NoFap ၏နေ့ရက်များ - အရေးကြီးဆုံးသင်ခန်းစာ ၅
အသက် ၁၇ - ရက် ၉၀ ကျွန်ုပ်ဘဝပြောင်းလဲသွားသလား။
အသက် ၁၇ နှစ် - NoFap ကိုမတွေ့ရှိခင်ကျွန်တော်ဟာအခြေခံအားဖြင့်အသက်ရှင်နေတဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပဲ။ အမြဲစိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ ကျောင်းမှာပျက်တာ၊
အသက် ၁၇ - ယုံကြည်မှုတိုးပွားလာသည်။ ငါ၏အလူမှုရေးဘဝတိုးတက် သင်သည်သင်၏စွဲခြင်းမတိုင်မီသင်ခံစားခဲ့ရသောအရာတို့ကိုခံစားနိုင်။
အသက် ၁၇ - မိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်စကားပြောရန်ယုံကြည်မှု
အသက် ၁၇ - ၁၈၁ နေ့ - ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်များသည်ယခုတွင်အားရှိလာပြီဖြစ်ရာမှေးမှိန်တော့မည်မဟုတ်တော့ဘဲယုံကြည်မှုတိုးပွားလာသည်
အသက် ၁၇ - ကျွန်ုပ်၏ကုထုံးပညာရှင်ပင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၌အကောင်းမြင်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောခံစားမှုရှိသည်
အသက် ၁၇ - လူကန်လန်မှ extrovert အထိ၊ ယခုသည်မသက်မသာအခြေအနေများကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပြီးအခြားသူများ၏ထင်မြင်ချက်ကိုဂရုမစိုက်ပါ
အသက် ၁၇ - nofap ကိုအလေးအနက်ထားပြီးသင့်ဘဝပြောင်းလဲမှုကိုကြည့်ပါ
အသက် ၁၇ နှစ် - ယုံကြည်မှုပိုရလာခြင်း၊ မိန်းကလေးများနှင့်သူစိမ်းများအားပိုမိုလွယ်ကူစွာပြောဆိုခြင်း၊ စွမ်းအင်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုပိုများသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ပေါင်းသင်းခြင်းကိုနှစ်သက်လာသည်
အသက် ၁၇ နှစ် - ငါဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူရှိနိုင်တယ်
အသက် ၁၇ နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်လူများနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာစကားပြောဆိုနိုင်သည်၊ ပို၍ ကောင်းမွန်သည်ဟုခံစားရနိုင်သည်
အသက် ၁၇ - ကျွန်ုပ်သည်ယုံကြည်မှု၊ ကျက်သရေ၊ ဆွဲဆောင်မှုပိုမိုခံစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးများကိုယခုဆွဲဆောင်နိုင်သည်
အသက် ၁၇ - မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရလာပြီးကျွန်မရဲ့အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုရခဲ့တယ်။ ဘဝမှာအရာရာကိုပျော်မွေ့လာသည်။
အသက် ၁၇ - ငါသန့်ရှင်းတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ရှိပြီ။
အသက် ၁၇ - ဒီပျော်ရွှင်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးကိုငါအရင်ကမခံစားဖူးဘူး။ မိန်းကလေးများအပေါ်ကျွန်ုပ်၏အမြင်ပြောင်းလဲသွားသည် - ကျွန်ုပ်သည်သူတို့ကိုလိင်ဆိုင်ရာအရာများဟုမထင်တော့ပါ။
အသက် ၁၇ နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းအတွက်ကုသရန်ရှာဖွေသည့်နေ့နှင့်တစ်နေ့နာရီပေါင်းများစွာငိုခဲ့ရသည်။ ယခုတွင်ငါသည်ယုံကြည်စိတ်ချမှု၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောလူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှု၊ အမျိုးသမီးများမှပိုမိုအာရုံစိုက်ခြင်း
အသက် ၁၇ - အမျိုးသမီးများသည်ကျွန်ုပ်ထွက်သွားတိုင်းကျွန်ုပ်ကိုစစ်ဆေးသည်
အသက် ၁၇ - စကားလက်ဆုံပြောဆိုခြင်းကိုမတားဆီးရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနံရံ
အသက် ၁၇ - ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိ၊
အသက် ၁၇ - စွမ်းအင်များများပိုရမယ်၊ ယုံကြည်မှုပိုရမယ်၊ ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်ခံရတယ်၊
အသက် ၁၇ - ကျွန်ုပ်၏အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုများနှင့်မလုံခြုံမှုများသည်ပြproblemsနာများမဟုတ်တော့ပါ
(၁၇) နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ကမ္ဘာသည်လုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏အမျိုးသမီးများနှင့်လည်းပတ်သက်ခဲ့သည်
အသက် ၁၇ နှစ် - စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု၊ လူမှုအခြေအနေများတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း၊
အသက် ၁၇ - NoFap သည်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများကိုမကူညီနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်သေစေ!
အသက် (၁၇) - Porn-ED သွေးကိုကုသပေးသည်။ အဆိုပါ flatline ရိုက်နှက်ရန် "edging" ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်
အသက် ၁၇ - ၆ လသေသည့်ဒစ်ခ်နှင့်အခြားဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများအပြီးပြင်းထန်သော PIED ကိုကုသနိုင်လုနီးပါး
အသက် ၁၇ - ၁၀ လကြာ NoFap ပြီးနောက် PIED ပျောက်ကင်းသွားသည်။
အသက် ၁၇ - လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ် ၉၉% ကုန်သွားပြီ၊ လူတွေကငါ့ကိုထင်တာကိုဂရုမစိုက်နိုင်ဘူး
အသက် ၁၇ - လွန်ခဲ့သောငါးလသည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်
၁၇။ ဒီနေရာမှာအောင်မြင်မှုရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမှန်ပါတယ်။ NoFap ကနေအများကြီးအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
အသက် ၁၇ - အဲဒါကျိုးနပ်လား။ ဟုတ်ကဲ့ငရဲ ထိုအခါငါသင်အတူတူလုပ်ဖို့အကြံပြုပါသည်။
အသက် ၁၇ - မင်းဘဝပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်။ DO လုပ်ပြီးပြန်ကြည့်မနေနဲ့
အသက်အရွယ် 17 - သရုပ်ြပများနှင့်ဘဝအပြည့်အဝ
အသက်အရွယ် 17 - ငါတကယ်အဘို့ကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တွေ့သည်မိန်းကလေးတစ်ဦး
အသက်အရွယ် 17 - အတန်းတက်သစ်အကျိုးစီးပွားနှင့်အလုပ်အကိုင်, ပိုကောင်းတဲ့လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှု
အသက်အရွယ် 17 - ငါပုံမှန်ခံစားရ
အသက်အရွယ် 17 - ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်မှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်ပြုံးနေရှာတွေ့
အသက်အရွယ် 17 - ငါကွဲပြားခြားနားသောမိန်းမတို့ကြည့်ရှုသူတို့ထံမှပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုရ
အသက်အရွယ် 17 - နောက်ထပ်စွမ်းအင်, မျက်လုံးချင်းပိုမိုလွယ်ကူ
အသက်အရွယ် 17 - ငါ့ဘဝငါ့အလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုလုံးဝပျောက်ရှိပါတယ်, စာသားအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည်
အသက် ၁၈ - ၁၀၀ ရက် - အဖြစ်အများဆုံးအမှားများ၊ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ကျွန်ုပ်၏အဖြစ်အပျက်
အသက် ၁၈ - ရက် ၅၀ - ကျွန်ုပ်သည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောလူတစ် ဦး ပါ
အသက် ၁၈ နှစ် - ၇ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတွေကငါမထနိုင်တာကြောင့်ရှက်ခဲ့ရတယ်။ PIED သည်ယခုအခါပျောက်ကင်းသွားပြီဖြစ်သည်။
အသက် ၁၈ နှစ် - မိန်းကလေးများအနေဖြင့်ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိလာသည်၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းမရှိတော့ပါ။ လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများလျော့နည်းသွားခြင်း၊ ကြီးမားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အသက် ၁၈ - နေ့ ၅၀: ငါကလူသစ်တွေနဲ့စကားပြောနေတယ်၊ ​​ပြီးတော့လူမှုရေးအဆင်မပြေမှုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတယ်
အသက် ၁၈ - ED သည်ပိုမိုကျန်းမာသန်စွမ်းသောလူမှုရေးကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်လွဲချော်နေသောအမျိုးသမီးများအားမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်
အသက် ၁၈ - ပို၍ အသက်ဝင်သည်။ အခုတော့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံစားလာရပြီ။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက်ဂရိတ်လျှော့ချရေး။ ငါအရေးပါသောအရာတို့ကိုပိုမိုအာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ်
၁၈ နှစ် - လိင်တူချစ်သူ - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးလေးစားမိပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုများစွာခံစားရတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အမှန်တကယ်ပြissuesနာများကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်၊
အသက် ၁၈ နှစ် - ပျော်ရွှင်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှုနှင့်စွမ်းအင်တို့ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်မှုတိုးလာ ပိုပြီးလူပေါင်းကောင်းသော
၁၈ နှစ် - ပျော်ရွှင်မှုပိုရခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုပိုရခြင်း၊ ဘဝရည်ရွယ်ချက်ရှိခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပိုမိုခံစားရခြင်း
အသက် ၁၈ - လိင်မှတစ်ဆင့်အော်ဂဇင်မပြုလုပ်နိုင်သူများအတွက်မျှော်လင့်ပါ။
အသက် ၁၈ - ကျွန်ုပ်၏ PIED ကိုမည်သို့ကုသနိုင်ခဲ့သနည်း။
အသက် ၁၈ - ကျွန်ုပ်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်အလွန်အခြေခံကျသောအဆင့်တွင်သာ ပို၍ ပျော်ရွှင်သည်။ ငါကလူနဲ့ပိုကောင်းဆက်သွယ်မှုပိုယုံကြည်မှု & အထွက်။
အသက် ၁၈ - ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုရှင်းလင်းစွာတွေးတောနိုင်ပြီးအမျိုးသမီးများကိုလူပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်မြင်နိုင်သည်
အသက် ၁၈ - ကျွန်ုပ်သည်စာမေးပွဲကို ဦး နှောက်မြူခြင်းမရှိဘဲပြီးစီးခဲ့သည်။ အတားအဆီးတွေရှိရင်တောင်ဘဝကပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းခံစားရတယ်။
အသက် ၁၈ - အခုလူတစ်ယောက်လိုငါခံစားရတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုခြောက်နှစ်ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့စစ်မှန်တဲ့အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုသတ်ပစ်လိုက်ပြီ။
အသက် ၁၈ - ဒီနေ့ငါနေ့စွဲတစ်ခုရခဲ့တယ်။
အသက် ၁၈ နှစ် - ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်အနည်းဆုံးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိသည်။ ညစ်ညမ်းခြင်းကိုမရပ်တန့်မီကျွန်ုပ်သည်အလွန်ဆိုးရွားသည့်အခြေအနေတွင်ရှိသည် ဦး နှောက်မြူခြင်း၊
အသက် ၁၈ - ကျွန်ုပ်၏ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်
အသက် (၁၈) - ယခုတွင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပျော်ရွှင်သည်။ ငါအရမ်းခံစားရတယ်
အသက် ၁၈ နှစ် - ငါဟာလူမှုရေးအပယ်ခံမဟုတ်ဘူ
အသက် ၁၈ - ကွဲပြားခြားနားသောမိန်းကလေးများကိုဆွဲဆောင်သောမောင်းနှင်မှုများ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းမှု
(၁၈) နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုသည်ဇယားကွက်များမှလွဲပြီးကျွန်ုပ်၏လှုံ့ဆော်မှုသည်ကောင်းကင်၌မြင့်မားသည်
အသက် ၁၈ - နှစ်လစိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပွားမှုမရှိပါ - ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဓာတ်ကျသွားပြီ။
အသက် ၁၈ - လူထုရှေ့စကားပြောခြင်းကိုမကြောက်တော့
အသက် ၁၈ - အခု PMO မပါပဲရက်ပေါင်း ၁၂၀ နေပြီဆိုတော့နေ့စဉ်အရာတွေထက်ပိုပြီးပျော်ရွှင်မှုခံစားရတယ်
အသက် ၁၈ နှစ် - PIED ပျောက်သွားပြီ၊ ပထမဆုံးအကြိမ်နှင့်အရာများသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်
(၁၈) နှစ် - PIED - ငါထိုင်ပြီးထိုင်ခုံမှာလိင်ဆက်ဆံဖို့အကြိမ်ကြိမ်မတတ်နိုင်လောက်အောင်စိုက်ထူနိုင်ခဲ့တယ်။
အသက် ၁၈ - ချစ်စရာကောင်မလေးနဲ့ရက်စွဲတစ်ခုရတယ်။ ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အပိုင်းတွေကပိုပိုပြီးများလာတယ်
အသက် ၁၈ နှစ် - ၁၃၀၀ ရက်ကြာအောင်ကြိုးစားပြီးနောက် PMO ကိုအမြဲတမ်းဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီခဲ့တဲ့အရာတစ်ခု။
အသက် ၁၈ - ဒီနေ့အချိန်မှာငါဟာအမြဲတမ်းကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်
အသက် ၁၈ - မိန်းကလေး ၃ ဦး ကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ nofap မတိုင်မီငါတစ်ယောက်တည်းတောင်မရနိုင်ပါ
အသက် ၁၈ - ယုံကြည်မှု၊ အပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်လူတိုင်းနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းခြင်း
အသက် ၁၈ - အိပ်မက်များ၊ အနံ့များ၊ ရည်းစားများနှင့်ကျွန်ုပ်သည် bullshit ကိုမယူတော့ပါ
အသက်အရွယ် 18 - ငါသူမ၏ကြိုက်နှစ်သက်မယ့်မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုပြောသည်
အသက် ၁၉ - ၁ နှစ် - ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှု၊ ယုံကြည်မှု၊ မျက်လုံးချင်း၊ ကြံ့ခိုင်မှု၊
အသက် ၁၉ - ရက် ၉၀ အခမဲ့၊
အသက် ၁၉ - ပြန်လည်နာလန်ထူမှုအကြောင်းတစေ့တစောင်း ...
အသက် ၁၉ နှစ် - အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဆွဲဆောင်နိုင်မှု၊ ယုံကြည်မှုပိုကောင်းလာခြင်း၊ အရေပြားနဲ့မျက်လုံးများပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း၊
အသက် ၁၉ - ရက်ပေါင်း ၉၀ ပြီးနောက်၊ PIED မှဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လည်ကျန်းမာလာသည်၊ fetishes၊ စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်စိတ်
အသက် ၁၉ - ပိုမိုကောင်းမွန်သောအာရုံစူးစိုက်မှု၊ စွမ်းအင်ပိုမိုရရှိမှု။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုသွားပြီ။ ထူးဆန်းသောကျန်းမာရေးပြProbleနာများပျောက်ကွယ်သွားသည်။
အသက် ၁၉ နှစ် - ဦး နှောက်သန့်ရှင်းရေး၊ အားကစားတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်၊ ပိုမိုရှင်သန်နေပုံ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအိပ်စက်ခြင်း၊ အာရုံပျံ့လွင့်မှုကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း
အသက် ၁၉ - DE ပျောက်ကင်းသွားပြီ၊ မိန်းကလေးကလိင်ကိစ္စဟာပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်တယ်၊
အသက် ၁၉ နှစ် - လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုလျော့နည်းလာခြင်း၊ ယုံကြည်မှုပိုမိုများပြားလာခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးလာခြင်း၊ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအသံ
အသက် ၁၉ - နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုသည်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် porn ကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းနှင့်အတူမပျော်နိုင်ပါ
အသက် ၁၉ - လူများနှင့်စကားပြောရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်၊ စကားပြောသောအခါအလွန်အမင်းယုံကြည်မှုရှိခြင်း၊ လူများကို ပို၍ ရိုသေလေးစားခြင်း / စာနာခြင်းပြခြင်း၊ မင်းသမီးများနှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုရန်ကျွန်ုပ်မကြောက်ရွံ့ပါ
အသက် ၁၉ - သာမန်မိန်းကလေးတစ်ယောက်တောင်မှသူမကအရမ်းကိုလှတယ်၊
၁၉ နှစ် - ပထမ ၆-၇ ပတ်အကြာမှာကျွန်တော်အရမ်းမပျော်ခဲ့ပေမယ့်အခုတော့အံ့သြမိပါတယ်။ ငါသည်လည်းကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးသမီးများကိုရှုမြင်ကြသည်။
အသက် ၁၉ - ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်လှပသောမိန်းကလေးတစ် ဦး သည်ကျွန်ုပ်ကိုလိုက်ဖမ်းနေသည်
(၁၉) နှစ်အရွယ်အဆင့်မှ ၄.၀ GPA အထိ
အသက် ၁၉ - PIED မှအောင်မြင်သောလိင်အထိ!
အသက် ၁၉ - ကြက်ဆင်မှသည်ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်အရကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်ဘဝကိုပြန်လည်ရယူခဲ့သည်။
အသက် ၁၉ - ကျွန်ုပ်ပညာသင်ဆုရရှိခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်သည်
အသက် ၁၉ - ပိုကြီးသောအပ်နှံခြင်း။ အသက်တာအတွက်သာ။ ကြီးမြတ်ဆွဲဆောင်နှင့်စိတ်အားထက်သန်မှု။ မျက်လုံးချင်းဆုံသည် အနိမ့်ဆုံးတောင်ရောက်နေရင်တောင်ငါဟာချန်ပီယံတစ်ယောက်လိုခံစားနေရတယ်။
အသက် ၁၉ နှစ် - PMO No မှရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ရှင်းပြနိုင်သော်လည်း၊ စာရင်းသည်ရှည်လွန်းသည်
အသက် ၁၉ နှစ် - လိင်ဆက်ဆံရာမှငါနောက်ဆုံးအနေနဲ့အော်
အသက် ၁၉ - ကျွန်ုပ်သည်ရေကူးဝတ်စုံမော်ဒယ်များကိုအကြီးအကျယ်ချိုးနှိမ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့နှင့်အတူနေလိုသည်။ ယခုကျွန်ုပ်ရည်းစားနှင့်သာအတူနေလိုသည်
အသက် ၁၉ - ကျွန်ုပ်အတွင်း၌နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလူသားတစ်စုံတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီ
အသက် ၁၉ - ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်များကိုပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ပိုပြီးသည်းခံခြင်း
အသက် ၁၉ - ကျွန်ုပ်သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ + နှင့်တစ်ရက်လုံးလုံး porn နှင့်ကစားစရာများတွင်ကုန်ခဲ့ရသည်။ အခုငါဘဝတစ်ခုရပြီ
အသက် ၁၉ - သူငယ်ချင်းများ၊ ယောက်ျားများနှင့်အမျိုးသမီးများအားမည်သူမဆိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့် aura တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တည်ဆောက်ခဲ့သည်
အသက် ၁၉ - ထောင်ချောက်မှလွတ်မြောက်ပြီဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်
အသက် ၁၉ - တိုး။ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုလျော့နည်းလာခြင်း - ကျွန်ုပ်သည်လူတိုင်းကိုမသက်မသာမဖြစ်ဘဲကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်
အသက် ၁၉ - ကျွန်ုပ်၏စိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြခြင်း၊
အသက် ၁၉ - ရက်ပေါင်း ၉၀ ကိုနှိပ်ပါ။ porn- သွေးဆောင် ED သွားပြီ။ ငါ့ခရီး။
အသက် ၁၉ - ဘဝကိုသာချစ်မြတ်နိုးခြင်း
အသက် ၁၉ နှစ် - ငါ့ဝက်ခြံဟာ NoFap မှာပေါ်လာတယ်
အသက် ၁၉ - ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခံအားသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ အရေပြားမှေးမှိန်သွားပြီ၊ သေတော့မည်မဟုတ်
အသက် ၁၉ - လူတို့နှင့်စကားပြောသောအခါ ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်း၊
၁၉ နှစ် - ဖုတ်ကောင်မရှိတော့ပါ
အသက် ၁၉ - ညစ်ညမ်းမှုမရှိပါ၊ ရံဖန်ရံခါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊
အသက် ၁၉ - ယခုကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်းသည်ရှင်းလင်းပြီးကျွန်ုပ်မျက်စိသည်ယူနိုက်တက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Matrix မှဖြုတ်ခြင်းနှင့်တူသည်။
အသက် ၁၉ - တစ်နှစ် - ညစ်ညမ်းသောအကျင့်နှင့်အကျင့်စရိုက်ဆိုးစွဲခြင်းကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲလမ်းခဲ့သည်
အသက် ၁၉ - PIED နှင့်မီးယပ်ရောဂါထောက်ပံ့ခြင်း၊ လူကန်လန်မဟုတ်တော့ပါ
အသက် ၁၉ - PIED ကကုသပေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအကြိမ်အနည်းငယ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအလွန်အမင်းခက်ခဲခဲ့သည် (ကွန်ဒုံးဖြင့်ပင်) နှင့်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။
အသက် ၁၉ နှစ် - PIED သွားပြီ၊ မိန်းကလေးများပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအာရုံစူးစိုက်မှု၊ အဆင့်အတန်းတိုးတက်ခြင်း၊
အသက် ၁၉ - PIED သည်ယခုအခါကျွန်ုပ်အတွင်း၌လောင်ကျွမ်းနေသောမီး ဖြစ်၍ လှပသောမိန်းကလေးရရန်လွယ်ကူလာသည်
၁၉ နှစ် - PIED - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုဖြတ်ခြင်းကကျွန်ုပ်နှင့်တိုက်ရိုက်ရောသွယ်ဝိုက်။ သော်လည်းကောင်းကျွန်ုပ်နှင့်ပိုမိုပျော်ရွှင်ရန်နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြင့်လည်းကောင်းချဉ်းကပ်စေခဲ့သည်။
အသက် ၁၉ - PMO သည်ကျွန်ုပ်၏ကလေးဘဝ / ဆယ်ကျော်သက်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပျက်စီးခဲ့သည်
အသက် ၁၉ - သင့် ဦး နှောက်ကို Porn ၌ဖတ်ပါ။ ငါကငါ့အအောင်မြင်မှုအများစုကြွေး။
အသက် ၁၉ - အကျိုးခံစားခွင့်ကိုရိတ်သိမ်းပြီးတစ်စုံတစ် ဦး ၏ဘဝကိုပြောင်းလဲပစ်ပါ
အသက် ၁၉ - ငါရပ်ပြီးကတည်းကနံနက်သစ်တော! စိတ်ကျရောဂါနွမ်း
အသက် ၁၉ - PMO မစတင်ခြင်း၊ တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်ဤတွင်ပါဝင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။
အသက် ၁၉ နှစ် - PIED နှင့်တစ်နှစ်ကျော်ကြာရုန်းကန်ခဲ့ရသည်
၁၉ နှစ် - ကျွန်ုပ်၌အကောင်းဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှု!
အသက် ၁၉ - လိင် / hypno / အစောင့်အကြပ်မှရှည်လျားသောလမ်း
အသက် ၁၉ - ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အကောင်းဆုံးသောအချိန်ဟုရိုးသားစွာခံစားရသည်
အသက် ၁၉ - ပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းဆေးစွဲခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသော ED မှစုစုပေါင်းပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း
၁၉ နှစ် - ဆုတ်ခွာသည် shit ဖြစ်သည်။ အခုတော့ငါ့မျက်နှာကပိုကောင်းလာပြီ၊ စွမ်းအင်ပိုရလာပြီ
၁၉ နှစ် - PIED ဝေဒနာသည်တစ် ဦး ထံမှနှစ်သိမ့်စကား
အသက်အရွယ် 19 - ရှင်းလင်းအရေပြား, ဆံပင်သှေးရငျးခငျြးကာမဆကျဆံခွငျး porn အတွက်အကျိုးစီးပွားဆုံးရှုံးကျဆင်းရပ်တန့်
အသက်အရွယ် 19 - ရုံ NoFap မှကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးနမ်းကျေးဇူးတင်စကားတယ်!
အသက်အရွယ် 19 - ပိုတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့ဂရုစိုက်တတ်တဲ့တစ်ဦးအရှုံးသမား၏လျော့နည်း
အသက် ၂၀ - စွမ်းအင်၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု၊ စိတ်ပျက်စရာ / စိတ်ဓာတ်ကျသည့်အခြေအနေတွင်မရှိသလောက်
အသက် ၂၀ - ၁၀၀ ရက်: ကျွန်ုပ်၏ယခင်အရှည်ဆုံးရက်သည်ရက် ၃၀ ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားကူညီပေးသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်မခံစားရပါ။ အခုတော့အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရတယ်။
အသက် ၂၀ - ၁၀၀ ရက် ဒါကအစပဲ။
အသက် ၂၀ - ၃ နှစ် NoFap ကကျွန်တော့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်
အသက် ၂၀ - ၃၇ ရက်နှင့် PIED ကိုကုသနိုင်သည်
အသက် ၂၀ - ရက်ပေါင်း ၉၀ (၁၅ လကြိုးစားပြီးနောက်) - ဤမျှလောက်များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများ
အသက် ၂၀ - အမျိုးသမီးများကိုသင်၏တပ်မက်မှု၏အရာအဖြစ်မဟုတ်ဘဲလူသားအဖြစ်ရှုမြင်ပြီးနောက်၊
အသက် ၂၀ - အခုအချိန်မှာအကျိုးကျေးဇူးများဒီမှာအရူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ယုံကြည်မှုဟာရူးသွားပြီ
အသက် ၂၀ - ပိုကောင်းသောမျက်လုံးချင်းဆုံခြင်း၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုမရှိတော့ခြင်း၊ ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်း၊
အသက် (၂၀) ​​- ခန္တာကိုယ်မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာလိင်
အသက် ၂၀ - ခေါင်းကိုကြည်လင်စွာလုပ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်အမြန်နှုန်းနှစ်ဆနှုန်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နေသကဲ့သို့နီးပါးစွမ်းအင်၊ ကျွန်ုပ်၏ပိုင်ဆိုင်ရာများကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါ
အသက် ၂၀ - ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအသံ၊ ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိရန်၊ ပေါင်းသင်းရန်လွယ်ကူခြင်း၊
အသက် ၂၀ - သင်တိုက်တွန်းခံရသည့်အခါ pushups လုပ်ပါ
အသက် ၂၀ - ED - လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကငါ PIED နဲ့ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုတွေနဲ့ရုန်းကန်ခဲ့တယ်။ မရုန်းကန်တော့ဘူး။
အသက် ၂၀ - ကျွန်ုပ်သည်ဆsix္ဌမခံစားချက်ဟုခံစားရပြီးဘုရင်တစ်ပါးကိုမြုပ်နှံနိုင်သည်
အသက် (၂၀) ​​- အမျိုးသမီးများအတွက်သဘာဝအရဆွဲဆောင်နိုင်မှုကိုထပ်မံရှာဖွေသည်
အသက် ၂၀ - စိတ်ဓာတ်ကျ။ ချစ်စရာကောင်းသော Emo မိန်းကလေးများမှသည်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောမိန်းကလေးများအထိ
အသက် ၂၀ - Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှုမှသည်ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းခိုင်ခံ့ပြီးရေရှည်စိုက်ထူနိုင်သည့်အထိဖြစ်သည်
အသက် (၂၀) ​​- ပြင်းထန်သောလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုမှသည်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှအထိမဖြစ်။ ပိုကောင်းတဲ့မှတ်ဉာဏ်နှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှု။ အများအားဖြင့်တော့ငါဟာပိုပြီးလွတ်လပ်တယ်
အသက် (၂၀) ​​- မိန်းကလေးများသည်သင်စွမ်းအင်ချွေတာနေစဉ်သင်၏စွမ်းအင်ကိုသိနိုင်သည်
အသက် ၂၀ - နှုတ်ဆက်ပြီး PIED နှင့်အဆင်မပြေသောလိင်
အသက် (၂၀) ​​- sissification fetish ကိုငါဘယ်လိုဖယ်ရှားလိုက်သလဲ
အသက် ၂၀ - ငါအသက်ရှင်နေပြီ။ ကျွန်တော့်အာရုံပြန်လာနေ အနိမ့်တန်းမှစ။ ငါယခုအတန်းထဲတွင်ကြီးစိုး။ အပြောင်းအလဲကိုမိန်းကလေးများသိသည်။
အသက် ၂၀ - ၂ နှစ်နီးပါးအကြာတွင်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးနံနက်သစ်သားကိုရရှိခဲ့သည်
အသက် ၂၀ - ကျွန်ုပ်ယခုရှိသောလူကိုငါအရှုံးမပေးပါ
အသက် ၂၀ - PMO မတူသောဘဝနှင့် PMO မပါသောဘဝအကြားစစ်မှန်သောကွဲပြားခြားနားမှုရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်သဘောပေါက်ခဲ့သည်
(၂ ဝ) အသက် (၂၀) ​​- ဒါကိုလျစ်လျူရှုထားတာမဟုတ်ပါဘူး
အသက် ၂၀ - စွမ်းအင်များများစားစားရှိပါလိမ့်မယ်။ စွမ်းအားလေးပါ။ စိတ်အားထက်သန်ပါ။ တစ်ခုခုခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရှုံးမပေးပါဘူး။
အသက် ၂၀ - စာအုပ်များဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းကိုနှစ်သက်သောကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုများစွာရရှိခဲ့သည်
အသက် ၂၀ - PMO၊ News နှင့် Social Media တို့ကိုငါဖြတ်ပြီးသောအခါကျွန်ုပ်၏စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့သည်
အသက် ၂၀ - ကျွန်ုပ်၏ ၀ တ္ထုသည်ကျွန်ုပ်အပေါ်ချုပ်ကိုင်ထားမှုပျောက်ဆုံးနေသည်
အသက် ၂၀ - PIED နှင့် DE ကို ၃ ပတ်အကြာတွင်ကုသပေးခဲ့သည်။ အသက် ၁၄ နှစ်ကတည်းက ED ရှိခဲ့ဖူးတယ်။
အသက် ၂၀ - ၁၇ နှစ်ကနေ PIED ။ ငါထိုးဖောက်ဖို့မလွယ်ဘူး။ အချိန်ဆွဲမနေပါနဲ့!
အသက် ၂၀ - PIED ဆေးကုသမှုနှင့်အခြားအကျိုးခံစားခွင့်များ…ထို့နောက်ငါသတိထားမိလိုက်သည်
အသက် ၂၀ - ၀ တ်စုံသည်ငါ၏ရဲစွမ်းသတ္တိကိုသတ်ခဲ့သည်။ (ဘာကြောင့်မြန်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးထွက်သင့်တယ်)
အသက် ၂၀ - Porn-inced ED အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်း
အသက် ၂၀ - အပြာစာပေများကကျွန်ုပ်ကိုအမှောင်ထုထဲသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်
အသက် ၂၀ - ညစ်ညမ်းစာကိုဖြတ်ပစ်ပါ၊ ဒေါ်လာကိုပိတ်ရန်သင်ယူသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ ၉-၅ အလုပ်မှထွက်ခဲ့သည်
အသက် ၂၀ - နားလည်သဘောပေါက်ပါကျွန်ုပ်၏ GF ကိုအသစ်အဆန်းထက်ပိုပြီးလိုချင်သည်၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောအလုပ်သင်ဆရာဝန်ဖြစ်လာသည်
အသက် ၂၀ - အရှိန်မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်စည်၏အောက်ခြေတွင်ကျွန်တော်ခြစ်မိသည်။ အခုတော့ငါလွတ်လွတ်လပ်လပ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနိုင်ပြီ၊
(၂၀) နှစ် - မင်းရဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့အတူမင်းရဲ့ဘဝ၊ ယုံကြည်မှု၊
အသက် ၂၀ - ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောအတွေ့အကြုံမှာပြောင်းလဲသွားပြီ။ အဲဒါအတုပါပဲ
အသက် ၂၀ - kinky လိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်၏လိင်သည် "ပုံမှန်" ဖြစ်သည်
အသက်အရွယ် 20 - ငါမှန်ထဲမှာမြင်သောသူနှင့်အတူအမှန်ဆိုသည်ကား, ပျော်ရွှင်
အသက် ၂၁ နှစ်မှ ၁ နှစ် - NOFAP သည်ကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့တာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုပြောချင်သည်
အသက် ၂၁ နှစ် - ၁ နှစ် - ဒီနှစ်ငါနဲ့မတူတော့ဘူး။ မလုံခြုံမှုမရှိယုံကြည်မှုနှင့်ဖဲ့
အသက် ၂၁ - ၁.၅ နှစ်၊ ဘဝသစ်တစ်ခုလုံး
အသက် ၂၁ - ၁၃၁ ရက်၊
အသက် ၂၁ မှ ၆၀ ရက်အတွင်းကျွန်ုပ်ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ မိသားစုမှသူငယ်ချင်းများ၊ မိန်းမများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း။
အသက် (၂၁) ရက်မှ (၉၀) ရက်အထိ pmo အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် - သိမ်မွေ့သော်လည်းဘဝပြောင်းလဲမှုပြောင်းလဲခြင်း!
(၂၁) နှစ် ၂၁ - ကျွန်တော်ဟာပုံကြီးချဲ့တာတောင်မှမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကကျွန်တော့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ ပိုကောင်းဘို့။
အသက် ၂၁ - ရက်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ် Viagra ကိုမလိုအပ်တော့ပါ။ NoFap ကကျွန်တော့်ဘဝကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။
(၂၁) နှစ် - အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ခရီး၊ ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်း၊
အသက် ၂၁ - ဒီခရီးမတိုင်ခင်ကကျွန်ုပ်သည်အားနည်းသောဒစ်ကို ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်သောညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများဖြင့်သုတ်လိမ်းခဲ့သည်
အသက် (၂၁) နှစ် - အမျိုးသမီးများပိုမိုအာရုံစိုက်ခြင်း၊
(၂၁) နှစ် - ကောင်းမွန်သောအိပ်စက်ခြင်း၊ အသားအရေတိုးတက်ခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားခြင်း
အသက် ၂၁ - ပိုမိုကောင်းမွန်သောခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အရေပြားအရည်အသွေးကောင်းမွန်ခြင်း၊ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကောင်းမွန်ခြင်း။
အသက် ၂၁ - ယုံကြည်မှုအလွန်မြင့်မားသည်။ တစ်လခန့်တွင်နံနက်သစ်ကိုပြန်ရပြီ၊
အသက် (၂၁) နှစ် - ယုံကြည်မှုမြင့်တက်လာခဲ့သည်
အသက် (၂၁) နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်မိန်းကလေးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပါစေခက်ခက်ခဲခဲမနေနိုင်ပါ။ နောက်ဆုံးတော့ ၇၆ ရက်ရောက်လာတယ်။
အသက် ၂၁ - ပထမပိုင်းတွင်တဖြည်းဖြည်းချင်းဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ကောင်းမွန်သောအလုပ်ဖြစ်သည်
အသက် ၂၁ ရက် ၃၆ ရက်
အသက် ၂၁ - နောက်ဆုံးတွင် DE ပျောက်ကင်းသွားပြီး၊ မျက်လုံးချင်းဆုံမှုကြောင့်အမျိုးသမီးများသည်ကျွန်ုပ်ကိုပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်
အသက် ၂၁ - စိတ်ကျရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကလေးငယ်တစ် ဦး အဖြစ်ထပ်မံခံစားရပြန်သည်။ လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်ကုသပေးခဲ့သည်။ အာရုံတိုး။ ငါအမှုအရာပြုရရန်လှုံ့ဆျောမှုရှိသည်
အသက် (၂၁) နှစ် - စိတ်ကျရောဂါပျောက်ကွယ်သွားပြီ၊ လူမှုရေးစိတ်ပူပန်မှုလျော့နည်းသွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စိတ်အားထက်သန်မှုများစွာခံစားရသည်
(၂၁) နှစ် - စိတ်ကျဝေဒနာပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ မိန်းကလေးများအားလိင်ပစ္စည်းများကိုမဟုတ်ဘဲလူသားများအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားခြင်းမရှိသလောက်ဖြစ်ခြင်း၊
အသက် ၂၁ - သင်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန် PIED အထိစောင့်မနေပါနှင့်။
အသက် ၂၁ - ED - ရက်ပေါင်း ၁၀၀ NoSissy Porn - ဒဏ္Myာရီများ၊ အမှားများနှင့်သိပ္ပံပညာ
အသက် (၂၁) - လိင်တူချစ်သူ / လိင်တူချစ်သူများအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအမျိုးအစားအားလုံးနီးပါးသို့တိုးမြှင့်ခဲ့သည် (အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်)
(၂၁) နှစ် - ဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်း၊
(၂၁) နှစ် ၂၁ - ဘ ၀ နှင့်တူသည်ဟုခံစားရခြင်းသည်အရောင်ပြန်ပေါ်လာသည်
အသက် ၂၁ - လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်ကကျွန်ုပ်သည် NoFap ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယခုငါလူဖြစ်၏။
အသက် ၂၁ - ပျင်းရိသည့် ၃၀၀ ပေါင်မှလမ်းညွှန်မှုမရှိသောအသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်ရှိအသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် 21lb အထိပျင်းရိသည်
(၂၁) နှစ် - စွမ်းအင်၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုမိုရရှိခြင်း။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတွေးအခေါ်မရှိတော့စိုးရိမ်စိတ်။ ငါအရင်ကထက်ပိုကျန်းမာလာတယ်
အသက် ၂၁ နှစ် - ယုံကြည်မှုမြင့်မားခြင်း၊ မြင့်မားသောစိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှု၊ လူမှုရေးစိတ်ပူပန်မှုနည်းပါးခြင်း၊
အသက် ၂၁ - HOCD နှင့် PIED၊ နှေးကွေးသောတိုးတက်မှု၊
အသက် ၂၁ - BDSM fetish ကိုဘယ်လိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့လဲ
အသက် (၂၁) နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်အသက်တာကိုဒေါသနှင့်မုန်းတီးမှုနည်းသောနည်းလမ်းများဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောမေတ္တာဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။
(၂၁) နှစ် ၂၁ - ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုမည်မျှပြောင်းလဲစေခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်စကားလုံးများကိုမထည့်သွင်းနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ကျွန်ုပ်၏စကားလုံးများကို ယုံကြည်၍ သင်၏အရာအားလုံးကိုပေးရမည်။
အသက် ၂၁ - Neo ဟာလုံးဝမဖြုတ်ဘဲချက်ချင်းရပ်တန့်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်
အသက် ၂၁ နှစ် - ငါအာဏာရလာပြီးလက်ဝှေ့ထိုးနိုင်မှုစွမ်းရည်အရမ်းကောင်းလာတယ်။ ငါကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်နိုင်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်။
အသက် ၂၁ - ကျွန်ုပ်မှာစွမ်းအင်များများများများစားစားရှိသည်။ ငါကပိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ် ကျွန်တော့်ရဲ့လူမှုရေးဘဝတိုးတက်လာတယ် ငါ့မျက်လုံးကကြည်လင်နေပြီးငါ accutane ကိုမဖြတ်တော့ဘူး
အသက် ၂၁ - ကျွန်ုပ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တစ်လျှောက်လုံး PIED ခံစားခဲ့ရသည်
အသက် ၂၁ - ငါစူပါသူဌေးတစ်ယောက်လိုခံစားနေရတယ်
အသက် ၂၁ - ကျွန်ုပ်ဘဝ၏ကဏ္ personally အားလုံးတွင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်တိုးတက်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်
(၂၁) နှစ် ၂၁ - မိန်းကလေးများနှင့်ရယ်မောခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုပြောဆိုခြင်း၊ စွမ်းအင်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ
အသက် ၂၁ နှစ် - စိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနည်းခြင်းနှင့်အရေပြားများတောက်ပနေသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုရရှိသည်
အသက် ၂၁ - ပိုလေးသော၊ မုတ်ဆိတ်မွေး၊ အသားအရေကြည်လင်စေခြင်း၊ ဆံပင်ကောင်းခြင်း၊ အိပ်စက်ခြင်းနည်းခြင်း
အသက် (၂၁) နှစ် - မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ပထမဆုံးပြုလုပ်ခဲ့ရာ 'friendzone' မှလွတ်မြောက်ခဲ့သည်
အသက် ၂၁ နှစ် - စွမ်းအင်ပိုများသောအားဖြင့် ပို၍ ပျော်ရွှင်သည်။ ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်း၊ သေးငယ်သောအရာများကိုကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားသည်။
၂၁ နှစ် - ပိုလွတ်လပ်သောစကား၊
အသက် (၂၁) နှစ် - မကြာခဏပိုမိုအားကောင်းသည့်စိုက်ထူခြင်း၊ လိင်၌ပျော်မွေ့ခြင်း၊
(၂၁) နှစ် ၂၁ - နံနက်ခင်းပြန်လာချိန်၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ ကြည်လင်သောအသားအရေ၊ နက်ရှိုင်းသောအသံ
အသက် ၂၁ - ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှုသည်အလွန်ပြင်းထန်ခဲ့သည် သင့်ဘဝကိုပိုကောင်းအောင်ပြောင်းလဲပါ
(၂၁) နှစ် ၂၁ - ကျွန်ုပ်ရည်းစားကပုံမှန်ဖြစ်သည်ဟုထင်သောကြောင့်…
အသက် (၂၁) နှစ် - ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်လုံးဝစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ခဲ့ရပြီး BJ အတွင်း၌ပင်မခံစားရပါ
(၂၁) နှစ် - NoFap သည်အံ့ဖွယ်အမှုများကိုအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်သည်။ အဲဒါကိုကပ်လိုက်ပါ။
(၂၁) နှစ် ၂၁ - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးဗားရှင်းသို့သွားရန်အလုပ်ဖော်တစ် ဦး အားမေးခဲ့သည်
အသက် ၂၁ - PIED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ခဲ့ခြင်း - ကျွန်ုပ်သည်မနေ့ညကအမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ပြီးအရာအားလုံးသည်လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည်အတိုင်းအလုပ်လုပ်ကြသည်
(၂၁) နှစ် - PIED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ပြီ - ယခု porn သည်ကျွန်ုပ်ကိုတောင်မနှိုးနိုင်ပါ။ ငါသူမကိုလိုချင်တယ်၊ သူမနဲ့လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းငါတကယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံစားရတယ်။
အသက် ၂၁ နှစ် - PIED ပျောက်သွားပြီ။ အခုဆိုရင်ငါဟာ ၁၀၀ ရာနှုန်းအခက်အခဲရှိ၊
အသက် ၂၁ - PIED တိုးတက်မှု
အသက် ၂၁ - PIED …ပြpornနာကနောက်ဆုံးတော့ငါလက်ခံခဲ့တယ်
(၂၁) နှစ် ၂၁ - ကျူးကျော် ၀ င်ရောက်နိုင်သော fetish မှပြန်လည်ကျန်းမာလာခြင်း၊ တကယ့်လူများထံမှလိပ်ပြာများခံစားခြင်း၊
(၂၁) နှစ် - ချိုမြိန်သောအဆိပ်မှပြန်လည်ကျန်းမာလာခြင်း
အသက် ၂၁ - လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်ကိုလျှော့ချ။ စွမ်းအင်တိုးမြှင့်။ တိုးမြှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအား။ ရဲရင့်ခြင်းတိုးလာသည် (၎င်းသည်ကြီးမားသည်။ )
အသက် ၂၁ - တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးနေထိုင်ပါ
(၂၁) နှစ် - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေရန်ကြံစည်ခြင်းများမရှိတော့ပါ။ နောဖပ်ဟာကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ
(၂၁) နှစ် - NoFap နှင့် PornFree အကြောင်းတွေးခေါ်မှုများ
(၂၁) နှစ် ၂၁ - လွန်ခဲ့သော (၂) နှစ်က (၆) လထပ်မံ reboot လုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ PIED ကိုကုသပေးပြီးကျွန်ုပ်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်
အသက် ၂၁ - စိတ်ဓာတ်ကျမှုနည်းသော၊ အသားအရေရှင်းလင်းခြင်း နှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်မှာနံနက်သစ်သားကိုပြန်ယူလာတယ်။
အသက် (၂၁) နှစ် - ကျွန်ုပ်တို့သည်သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောအိမ်ထောင်ရေးကိုပြန်လည်ရရှိခြင်းနှင့်ယခင်ကထက်ပိုမိုနီးကပ်လာသည်
အသက် (၂၁) - လွတ်လပ်မှု၊ အင်အားကြီးမားမှုနှင့်အမှီအခိုကင်းမှုရရှိခြင်း၏ ၀ တ်စုံကိုဝတ်ဆင်ခြင်း
(၂၁) နှစ် ၂၁ - ကြယ်နွံကိုသင်ရှူရှိုက်မိသောအခါကြယ်များသည်စတင်စတင်သည်
အသက် ၂၁ - ဆုတ်ခွာခြင်းသည်အကြမ်းအားဖြင့်ဖြစ်သော်လည်းယခုကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုစွမ်းအင်၊ မှုတ်သွင်းခံ၊
အသက်အရွယ် 21 - လုံးဝကိုငါ့ဂိမ်းစွဲကုသပေးခဲ့၏။ ရည်းစားရတယ်။ ရီးရဲလ်ဘဝသင့်ရဲ့ screen ပေါ်မှာ pixels ထက်လမ်း သာ. ကောင်း၏
အသက်အရွယ် 21 - ကျန်းမာမျက်စိ, ပိုပြီးကြွက်သား, ပိုကြီးတဲ့လိင်တံနဲ့အဆီဆုံးရှုံးမှု
အသက်အရွယ် 21 - masturbate မှ Motivation, နည်းပါးလာမတရားသော
အသက်အရွယ် 21 - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးဗားရှင်းဖြစ်လာငါ့ခရီး
အသက်အရွယ် 21 - အမျိုးသမီးများပိုမိုလှပသောပါ၏ ငါနီးပါးကူးယဉျရပ်တန့်ပါတယ်။
အသက် ၂၂ - ၁၈၀ ရက်နှင့်ကျွန်ုပ်၏အတွေးများ
အသက် ၂၂ - ရက် ၂၀၀ တွင်ကျွန်ုပ်သည်ယခု ပို၍ ကောင်းမွန်သောခံစားချက်ရှိသည်။ ငါကပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိတယ်၊ ငါကလူတွေကိုပြုံးတယ်၊ မိန်းကလေးရောယောက်ျားရောပါရောစကားပြောနိုင်တယ်။
အသက် ၂၂ - ၉၀ ရက်နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းဖြစ်သည်
အသက် ၂၂ - ပိုကောင်းသောအာရုံစိုက်မှု။ ပိုပြီးလှုံ့ဆော်မှု။ ကျွန်ုပ်မည်သူဖြစ်သည်ကို ပို၍ အဆင်ပြေစွာယုံကြည်မှုရှိသည်။ စွမ်းအင်များများလေ။ အများကြီးပိုပျော်ရွှင်။ ငါကလူအကြောင်းပိုဂရုစိုက်တယ်။
အသက် ၂၂ - အကြိမ်ပေါင်းများစွာလိင်ဆက်ဆံမှုများပြီးနောက်ကျွန်တော့်ဒစ်ခ်ျအလုပ်လုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိ။ PIED ပျောက်သွားပြီးကောင်မလေးရခဲ့သည်
အသက် ၂၂ - ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အကောင်းဆုံးနှစ်ဖြစ်သည်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ NoFap ရှုတ်ချခံနေရသည်။ ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့လည်ချောင်းနာ။
အသက် ၂၂ - ယုံကြည်မှု၊ ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်း၊ မိန်းကလေးများ၏ဆွဲဆောင်မှုသည်အမှန်ဖြစ်သည်
အသက် ၂၂ - ကျွန်ုပ်ရည်းစားကို ပို၍ ဂရုစိုက်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုကျန်းမာသည်ဟုခံစားရသည်
အသက် ၂၂ - အေဒီ၊ ကျွန်ုပ်သည်သွေးပြန်ကြောများထင်သည်၊
အသက် ၂၂ - Viagra တောင်မှအလုပ်မလုပ်သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင် PIED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်
အသက် ၂၂ နှစ် - ယုံကြည်မှုရှိပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိခြင်း၊ အမျက်ဒေါသပြsolနာများပြေလည်သွားစေခြင်း၊ ဆီးကျိတ်တိုးတက်လာခြင်း၊ လူမှုရေးစိတ်ပူပန်မှုနည်းပါးခြင်း၊
အသက် ၂၂ နှစ် - အဖြေရလိုသူများအတွက် Nofap သည် PIED 22% ကိုကုသနိုင်သည်။
အသက် ၂၂ - စိတ်ပျက်စရာမှမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်အလင်းသို့၎င်း၊ ငါ၏အစစ်မှန်သောဝိသေသလက္ခဏာထင်ရှားလျက်ရှိသည်
၂၂ နှစ် - မှောင်မိုက်မှအလင်းသို့
အသက် ၂၂ - အနမ်းမရှိသောအပျိုစင်ဘဝမှအပျိုစင်ဘဝအထိ (ရည်းစားနှင့်အတူ)
အသက် ၂၂ - အဝလွန်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းမှကောင်းသောအလုပ်သို့၊ မသင့်လျော်သည့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်“ အကြီးအကဲ” အဖြစ်လူသိများခံရခြင်း
အသက် ၂၂ - စွမ်းအင်ပိုကြီးသည်။ တိုးတက်လာသောအာရုံစူးစိုက်မှု။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျော်သာ။ ကြီးမြတ်ထိန်းချုပ်မှု။ ကောင်းသောမျက်လုံးချင်းပြ ပိုမိုကောင်းသောအာရုံစူးစိုက်မှု။ မှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးတက်စေ
အသက် ၂၂ - ကျွန်ုပ်အသက် ၁၄ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အရွယ်အထိ ED ရှိခဲ့လျှင်၊ အကြှနျုပျ၏ porn လစဉ်လတိုင်းနေမကောင်းနှင့်စိတ်ပျက်စရာရတယ်
အသက် ၂၂ - ကျွန်ုပ်ဟာအရင်ကထက်ရှက်တတ်သူပါ။ ကျွန်ုပ်၏တတိယနှစ်တွင်ဆေးကျောင်းမှထွက်ခွာ။ ၉.၆၅ / ၁၀ တန်းရမှတ်များထားရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်စာမေးပွဲအားလုံးကိုအောင်ခဲ့သည်
အသက် ၂၂ - ကျွန်ုပ်၏ PIED ကိုရိုက်သည်ကိုကျွန်ုပ်မယုံနိုင်ကြောင်း - ကျွန်ုပ်သည်တစ်ဖန်အသက်ရှင်ပြန်သည်
အသက် ၂၂ - ငါ bullshit ကိုမတုံ့ပြန်တော့ဘူး၊ အိပ်စက်အနားယူတော့မယ်၊ အသားအရေကြည်လင်လာတယ်
အသက် ၂၂ နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုပျောက်ကွယ်ခြင်း၊
အသက် ၂၂ - PIED ကိုကျွန်တော်နှင့်အဆက်ဖြတ်ခဲ့ပြီး၊ အတွေ့အကြုံမှသင် porn သည်သင်၏အသက်တာမှဖြတ်လိုက်လျှင်ပျောက်သွားနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ဒါဟာငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်
အသက် ၂၂ - ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုထင်ခဲ့သော်လည်းစွဲလမ်းမှုမှပြန်လည်ကျဆင်းလာခြင်းကကျွန်ုပ်အားပိုမိုလုံခြုံမှုမရှိသောမျက်လုံးချင်းဆုံမှု၊ စစ်တိုက်ခြင်းငှါမသွားလိုခြင်း၊
အသက် ၂၂ - ငါကပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအာရုံစူးစိုက်မှု။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု လူတွေကကျွန်မကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်တယ်။
အသက် ၂၂ - ဘ ၀ ဟာအလွန်လှပပြီးလူတွေကမင်းကိုစိတ်ထိခိုက်အောင်အမြဲတမ်းဒီနေရာမှာမရှိကြဘူး
အသက် ၁၈ - ကျွန်ုပ်၏အပျိုစင်ဘဝပျောက်ဆုံးသွားသည်
အသက် ၂၂ - ကျောင်းသူကျောင်းသား (ED) ။ ။ အရင်တုန်းကငါထက်ပိုပြီးချစ်မြတ်နိုးသူတစ်ယောက်ပါ
အသက် ၂၂ - စွမ်းအင်များများစားစား။ ငါအများကြီးပိုမကြာခဏပျော်ရွှင်ခံစားရသည်။ သာ။ ကြီးမြတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သား။ လူမှုရေးအရပိုပြီးယုံကြည်မှုအများကြီး။ ထစ်ကုတ်သွားပြီ
အသက် ၂၂ - မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုရှိလာသည်။ စိတ်ကျရောဂါလျော့နည်းသွားသည်။ နောက်ဆုံးတွင်လူများကိုလူများအဖြစ်တစ်ဖန်မြင်လာသည်
အသက် (၂၂) နှစ်များသောအားဖြင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်ခြင်း၊ အခြားလုပ်ဆောင်မှုများကို ပို၍ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းခြင်း၊ ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသောလိင် - မောင်းနှင်ခြင်း / စိုက်ထူခြင်း၊
အသက် ၂၂ - ကျွန်ုပ်ဘဝသည်လွန်ခဲ့သောသုံးလကသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်
အသက် ၂၂ - NoFap သည်အင်အားမြှောက်ကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအလုပ်မဖြစ်စေနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်စတင်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ အကျိုးရှိသည်
အသက် ၂၂ - PIED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသပြီး ၃ လအကြာတွင်ယုံကြည်မှုတိုးပွားလာသည်
အသက် ၂၂ နှစ် - PIED ကျွန်ုပ်သည်“ reboot process” တစ်ခုလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယများစွာရှိခဲ့သော်လည်းဤအရာသည်တရားဝင်အလုပ်လုပ်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်
အသက် ၂၂ - ရက်ပေါင်း ၁၂၀ နှင့်အပြီးတွင်ဆေးကုသမှုခံယူသောအဆုတ်ရောဂါကိုကုသနိုင်သည်
အသက် ၂၂ - Porn သွေးဆောင် ED: ရက် ၃၀ အတွင်းရလဒ်များသည်စိတ်မှေးမှိန်သွားသည်
အသက် ၂၂ - ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုဖြတ်ခြင်းဖြင့်သင်၏စိတ်ကိုကုစားပြီး PIED၊ ဦး နှောက်နှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ဒါကြောင့်အရင်ဆုံးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုဖြတ်လိုက်ပါ။
(၂၂) နှစ် - စိတ်ကြွစိတ်ကြွဆေးပြားနှင့်ပြန်လည်စတင်ခြင်း
အသက် ၂၂ နှစ် - ပြင်းထန်သောပုံ - အသက်တာသစ်! ဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကိုနှစ်နှစ်ကြာအောင်မခံစားခဲ့ရ
အသက် ၂၂ - PMO မပါပဲခြောက်လ
အသက် ၂၂ - သမ္မာသတိရှိခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုရှောင်ရှားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်
အသက် (၂၂) - ထူးဆန်းသောဝတ်စုံများမှခံစားခဲ့ရခြင်း & PIED: NoFap သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်ဘဝနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။
အသက် ၂၂ - စိန်ခေါ်မှုများသည် ပို၍ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီဖြစ်သည်
အသက် ၂၂ - ဗီဒီယိုများ kinkier နှင့်မကြာခဏလာသည်။ ငါတောင်မှတော့ဘူး။
အသက် ၂၂ - ညစ်ညမ်းခြင်းမှထွက်ခွာခြင်းမှအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာတစ်ခုရှိသည်။ ယခုကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးကိုမည်သို့ရိပ်မိသနည်း
အသက် ၂၂ - ဒီနေ့ငါအရမ်းလူမှုရေးအရအရမ်းယုံကြည်တယ်
အသက် (၂၂) နှစ် - စိတ်ပိုင်း၊ ထက်မြက်မှု၊
အသက် ၂၂ နှစ် - ငါ့အတွက် nofap လုပ်ပေးခဲ့တာ
အသက်အရွယ် 22 - ဖျက်သိမ်းရေး porn ငါ့အစိတ်ပိုင်းပြည်နယ်အလှနျတိုးတက်လျက်ရှိသည်
အသက်အရွယ် 22 - အစွန်းရောက် porn နှင့် cuckolding fetish မှစ. ကျန်းမာဆက်ဆံရေး
အသက်အရွယ် 22 - ပျောက်ဆုံးသွားသောကျမရဲ့အပျိုစင်ဘဝကို!
အသက် ၂၃ နှစ်မှ ၁ နှစ်။ ကျွန်ုပ်သည်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်မှယောက်ျားတစ်ယောက်သို့ယခုနှစ်တွင်သင်တန်းတက်သည်။
အသက် ၂၃ - ၁၀ နှစ်ပျက်စီးခြင်း၊ ရက်ပေါင်း ၃၀၀ အိမ်လိုင်းပျက်သော်လည်းကျွန်ုပ်ပျော်ရွှင်သည်
အသက် ၂၃ - ရက် ၁၀၀ ရှိသောနံနက်သစ်သားသည်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်
အသက် (၂၃) မှ (၁၂၀) ရက်အထိ Hard Mode ။ ဇာတ်လမ်းမတိုင်မီ / ပြီးနောက်ရှည်လျားသော
အသက် ၂၃ - ရက်ပေါင်း ၉၀ ပြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏အကြံပြုချက်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
၂၃ နှစ် - ပို၍ ကောင်းသောအာရုံစူးစိုက်မှု။ စွမ်းအင်များများလေ။ ပိုပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အား။ ပို။ ချုပ်တည်းခြင်းနှင့်စည်းကမ်း။
(၂၃) နှစ် - ကောင်းမွန်သောရှေးဟောင်းခေတ်များကဲ့သို့…စိတ်ကူး။ စိုက်ထူခြင်းကိုရနိုင်သည်
အသက် ၂၃ နှစ် - PMO မပြီးဆုံးသောတစ်နှစ်တာလုံး။ CGPA 23 ကနေ 1 မှတိုးတက်လာခဲ့သည်
အသက် ၂၃ နှစ် - ယုံကြည်မှု၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု၊ အားအင်၊
(၂၃) နှစ် - ထိခိုက်ပျက်စီးစေသောအပြုအမူများကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားသင့်ပါ။ အပြောင်းအလဲကိုလူတွေကသတိပြုမိသည်
၂၃ နှစ် - ED & DE ။ Porn / Masturbation မှအချိန်ကြာမြင့်စွာအနားယူခြင်းကမယုံနိုင်စရာလိင်နှင့်ကြံ့ခိုင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်
အသက် ၂၃ - ED သွားပြီ မင်းခရီးမစခင်အထိသင်လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကိုမသိဘူး။
အသက် (၂၃) နှစ် - စွမ်းအင်၊ ယုံကြည်မှု၊ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုရှောင်ရှားခြင်း၊
အသက် ၂၃ -“ အပျိုစင်အပျိုစင်” မှပျော်ရွှင်သောဆက်ဆံရေးသို့
(၂၃) နှစ် - လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ကညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူတစ် ဦး မှယနေ့ကောလိပ်ပါမောက္ခတစ် ဦး နှင့်ပါရဂူဘွဲ့ရကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
(၂၃) နှစ် - စိတ်ကျဝေဒနာမှဆက်ခံရန်အထိ
အသက် ၂၃ နှစ် - အာရုံစူးစိုက်မှုပိုမိုများပြားလာခြင်း၊
(၂၃) နှစ် - ပို၍ ပျော်ရွှင်ပြီးပိုမိုပေါင်းသင်းလိုသောဆန္ဒရှိသည်။ ငါမိသားစု & သူငယ်ချင်းများကိုပိုမိုကျေးဇူးတင်ခံစားရသည်။ အကြှနျုပျ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုလျော့နည်းမကြာခဏဖြစ်ပါတယ်
အသက် ၂၃ - ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည် PIED နှင့်ငါ၏စိတ်ကိုညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမှကင်းဝေးကြောင်းတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်
(၂၃) နှစ် - ငါရိုက်တယ် ဟုတ်တယ်ငါလုပ်ခဲ့တယ်
အသက် ၂၃ - ငါယောက်ျားတစ်ယောက်လိုခံစားရတယ် ငါကပိုပြီးအဆင်ပြေပြီးယောက်ျားတွေနဲ့မိန်းကလေးတွေအနားမှာသက်သောင့်သက်သာရှိတယ်။
အသက် ၂၃ - နောက်ဆုံးတွင်အလုပ်သွားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်
အသက် ၂၃ - ငါနောက်ဆုံးမှာဆုတစ်ခုရခဲ့တယ်။ (နေ့ ၄၅)
(၂၃) နှစ် - ငါပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတယ်
အသက် ၂၃ - ကျွန်ုပ်သည်ယခုအိပ်ပျော်နေပြီ၊ ပျော်ရွှင်မိပြီးကမ္ဘာကြီးအတွက်ဤခံစားချက်ကိုကုန်သွယ်မည်မဟုတ်
(၂၃) နှစ် - ငါအရင်ကအရမ်းစိုးရိမ်ပူပန်ပြီးကြောက်လန့်ခဲ့ဖူးတယ်
အသက် ၂၃ - ယခုကျွန်ုပ်အသက် ၄၅ နှစ်ကျော်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်နေဝင်ဆည်းဆာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကျင်းပပါမည်
အသက် ၂၃ - နောက်ဆုံးမှာကျွန်ုပ်ဘ ၀ ကိုအတူတကွစုစည်းနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
(၂၃) နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်အစစ်အမှန်ဘဝအမျိုးသမီးများကိုအလွန်စွဲမက်ပါသည်
အသက် ၂၃ - တစ်နှစ်ဝက်အတွင်းစိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အပူတပြင်းဘဝမှနောက်ဆုံးဘ ၀ တွင်နေထိုင်ရန်ငါသွားခဲ့သည်
၂၃ နှစ် - porn မပါသောဘဝသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိတော့ပါ ဝေးလျော့နည်းစိတ်ကျရောဂါ။
အသက် ၂၃ - သိမှုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကိုအကန့်အသတ်မရှိထောက်ပံ့ပေးသည်
(၂၃) နှစ် - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများကြောင့်ဆက်ဆံရေးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော့်ဘဝဟာလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀၁ ရက်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာ ၁၈၀ ပြည့်စုံတယ်
အသက် ၂၃ - ပို၍ ဂရုမစိုက်။ ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိပါ။ အမျိုးသမီးများအားကွဲပြားစွာရှုပါ
အသက် ၂၃ နှစ် - ယုံကြည်မှုပိုရှိ၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ ကာယပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုမိုအားကောင်းလာသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လူတစ် ဦး အနေဖြင့်များစွာကြီးထွားရန်လိုအပ်သေးသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။
၂၃ နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ရက်ပေါင်း ၂၀၀ အခမ်းအနား
(၂၃) နှစ် - အမျိုးသမီးများနှင့်ကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်မှုသည်အဆလျင်မြင့်တက်ခဲ့သည်
အသက် ၂၃ နှစ် - ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏မျက်လုံးများကပိုမိုတောက်ပသည်။
အသက် ၂၃ - ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုများပျောက်ကွယ်သွားပြီး၊ ကောလိပ်သို့ပြန်တက်ပြီးကျွန်ုပ်၏အတန်းထိပ်တန်းဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
(၂၃) နှစ် - လူတွေကငါလာပြီလို့ပြောကြတယ်။
အသက် ၂၃ - PIED သည်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်သည်။ ကျွန်မရဲ့လူမှုဘ ၀ မှာအခြေအနေတွေပိုကောင်းလာပြီ၊ မိတ်ဆွေသစ်တွေဖြစ်လာတယ်၊ ငါဟာမိဘတွေ၊ အစ်မတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပိုပြီးစကားပြောနေတယ်။
အသက် ၂၃ - PIED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ခဲ့ porn သို့ပြန်သွားခဲ့သည်: GF & flatlines နှင့်အတူလိင်လျော့နည်း။ ငါတို့ကကွဲသွားတယ်
အသက် ၂၃ - PIED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ဒါ့အပြင် - ယုံကြည်မှုမြင့်တက်လာခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဘ ၀ အရည်အသွေး၊ ငါစကားပြောရတာတကယ်ပျော်တယ်
၂၃ နှစ် - PIED နှစ် - ငါ့အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်း
အသက် ၂၃ နှစ် - PIED သွားပြီ - နံနက်သစ်သား၊ ခိုင်ခံ့သောလိင်စိတ်၊ မကြာခဏစိုက်ထူခြင်း
အသက် ၂၃ နှစ် - PIED သည်အနာပျောက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လေးဆယ့်လေးနှစ်အတွက်အလေးအနက်စိုက်ထူခြင်းခံရမည်ဟုမထင်ပါ
(၂၃) နှစ် - PIED ။ (၂) လကြာ nofap ပြီးတဲ့နောက်ငါတို့နောက်ဆုံးမှာလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ဒါဟာအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်
၂၃ နှစ် - PIED - နေ့စဉ်သန်စွမ်းသောစိုက်ထူခြင်း / နံနက်သစ်သား၊ အသက်ရှင်နေထိုင်မှုတိုးတက်မှုများ၊ ကွမ်တန်ရူပဗေဒလော။
၂၃ နှစ် - Porn fetish နှင့် PIED ပျောက်သွားပြီ
၂၃ နှစ် - Porn သွေးဆောင် ED သည်ပျောက်ကင်းသွားသည်
(၂၃) နှစ် - ရောက်ရှိခြင်းသည်အလွန်ကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးများကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာတွေ့မြင်နိုင်သည်
အသက် ၂၃ - ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်း။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအကောင်းဆုံးအရာ
အသက် ၂၃ နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်အပျိုစင်ဖြစ်သည်ကိုသူမယုံနိုင်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်လိမ်နေကြောင်းချက်ချင်းပြောကြားခဲ့သည်
(၂၃) နှစ် - ED အချို့သည်လိင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်ဟုထင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများအပေါ်ပိုမိုစွဲမက်လာပြီးပိုမိုယုံကြည်မှုရှိလာသည်။
အသက် ၂၃ - တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်သည်စွမ်းအင်နှင့်ပြည့်နေပြီးအရာအားလုံးသည် HD ၌ရှိသကဲ့သို့ဖြစ်သည်
(၂၃) နှစ် - လူတစ်ယောက်လိုခံစားလာရခြင်း၊
(၂၃) နှစ် - fetish ပျောက်ကွယ်သွားပြီ
အသက် ၂၃ - လူကြမ်းအဖြစ်မှသူရဲကောင်းသို့ပြန်ချင်ပါသလား။ မပိတ်မိအောင်ကြိုးစားပါ။
အသက် ၂၃ - အလုံးစုံသောစိတ်အခြေအနေ၊ စည်းကမ်းပိုရှိခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုရှိခြင်း၊
အသက်အရွယ် 23 - မျက်လုံးအသကျရှငျကိုကြည့်, စိုးရိမ်ပူပန်ပိုကောင်း
အသက်အရွယ် 23 - ငါတကယ်အားကိုး, ယုံကြည်မှု, ငါသည်ဖြစ်လာနေပါတယ်လူတစ်ဦးကိုချစ်
(၂၃) နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ PIED သည်ပျောက်ကင်းသွားပြီ၊ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများရှိပြီ၊ ယခုခံစားရပြီ!
အသက် ၂၄ နှစ် - DE ပျောက်သွားပြီ၊ ပိုမိုအားကောင်း၊
(၂၄) နှစ် - ဂီတသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်၊ ကျွန်ုပ်ဘဝနှင့်လူသားဖြစ်မှုကိုကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားလေးမြတ်သည်
(၂၄) နှစ် - ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းကကျွန်ုပ်ဘဝကိုအဆင့်များစွာမြှင့်တင်ပေးခဲ့ပြီး၊ ဖော်ပြရန်မဖြစ်နိုင်ပါ
အသက် ၂၄ နှစ်မှ ၄ နှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်ယခုလေ့လာသင်ယူနေပြီဖြစ်သည်
အသက် ၂၄ - ရက်ပေါင်း ၅၀၀: ကျွန်ုပ်၏လိင်ဘဝသည်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးအမျိုးသမီးများ၏အလှအပကိုတကယ်မြင်တွေ့ရသည်။
အသက် ၂၄ နှစ်မှ ၆ လအထိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုရှင်းလင်းစွာတွေးခေါ်နိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့ပြီး၊ လိင်ဆိုင်ရာမောင်းနှင်အားနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုကူညီခဲ့သည်။ ယခုရှားပါးတိုက်တွန်းပါသည်
အသက် ၂၄ - ရက်ပေါင်း ၉၀: ဘ ၀ သည်မင်းကောင်းသည်။
အသက် ၂၄ - ညစ်ညမ်းသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ပြန်အမှတ်ရမိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်သည်ဘောင်ကို“ အေးခဲစေ” ပြီးမီးပုံကြီးတစ်ခုလောင်ကျွမ်းနေသည်ဟုစိတ်ကူးမိသည်။
(၂၄) နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ပျော်ရွှင်သောဘဝသို့ပြန်သွားပါ
(၂၄) နှစ် - ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၊ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများဖြင့်အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ကမ္ဘာပေါ်ရှိကောင်းကင်နှင့်တူသည်။
အသက် ၂၄ - ၁၂၂ ရက်နှင့် PIED သည်ရောဂါပျောက်ကင်းခဲ့သည်
(၂၄) နှစ် - ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ခြင်း။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်ပိုမိုအားကောင်းဆက်သွယ်မှုကိုခံစားရသည်။ ပိုပြီးစိတ်ခံစားမှု။ ငါပိုပြီးစာနာခံစားရတယ်။ အမျိုးသမီးများနှင့်လည်းမိတ်ဖွဲ့ခဲ့သည်။
အသက် ၂၄ - ကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုများအတွက်ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိခြင်း၊ ပို၍ အာရုံစူးစိုက်။ လေ့လာမှုများကိုပိုမိုအလေးအနက်ထားသည်
အသက် ၂၄ - အမျိုးသမီးတစ် ဦး၊ အရှက်ခွဲခံရခြင်း၊ အတင်းအဓမ္မပြုကျင့်ခံရခြင်း၊
အသက် ၂၄ နှစ် - ၄ နှစ်ရုန်းကန်ရုန်းကန်နေရချိန်
အသက် ၂၄ - လေးလကြာဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းကကျွန်ုပ်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ လာစမ်းပါ ဦး (ညီအစ်ကိုတွေ)
(၂၄) နှစ် - အမျိုးသမီးစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အားလျော့ခြင်းမှဒစ်မှလုံးလုံးဆံပင်အထိ။ ဒါက 24% beatable ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၂၄ - အနိမ့်ဆုံးနှင့်ရှုံးနိမ့်မှုမှသည်မြင့်မားသောလခစားအလုပ်၊ ကား၊ တိုက်ခန်းနှင့်နံနက်သစ်သားများအထိ!
(၂၄) နှစ် - လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုမှသည် alpha male အထိဖြစ်သည်
အသက် (၂၄) နှစ် - ကျွန်ုပ်၏အရှည်ဆုံးဒဏ်ကိုခံခဲ့ရပြီးကျွန်ုပ်ဘဝကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့သည်
(၂၄) နှစ် - ကျောက်တုံးအောက်ထိမှန်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ခဲ့သည်
အသက် ၂၄ - မိန်းကလေးများကိုမကြည့်တော့ဘဲကျွန်ုပ် ဦး ခေါင်းတွင်လုပ်နေသည်။ သူတို့ကအခုငါနဲ့ပရောပရည်လုပ်နေတယ်
အသက် ၂၄ နှစ် - ငါယုံကြည်မှုရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့်စကားပြောဆိုနိုင်ပြီးပြက်ရယ်ပြုခြင်းခံရနိုင်သည်။
အသက် ၂၄ - ငါကကလေးတစ်ယောက်လိုခံစားရတယ်၊ ကျွန်ုပ်ရည်းစားနှင့်ပိုမိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်း
အသက် (၂၄) နှစ် - ကျွန်ုပ်တွင် ED နှင့်ပတ်သက်သောပြissuesနာများရှိခဲ့ပြီး nofap ကသူတို့ကိုလုံးလုံးကုသပေးခဲ့သည်
အသက် ၂၄ - ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုကျန်းမာသန်စွမ်းသောအသွင်အပြင်ရှိသည်
အသက် ၂၄ - ကျွန်ုပ်တွင် OCD ရှိခဲ့ဖူးပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏လူများအပေါ်ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်ကိုအမြဲတမ်းစိုးရိမ်ခဲ့သည်။ ဒီဟာနီးပြီ
အသက် ၂၄ - ငါမနက် ၃ နာရီမှာနိုးလာပြီးအိပ်ရာဝင်ဖို့အတွက် porn ကိုကြည့်ခဲ့ရတယ်
အသက် ၂၄ နှစ် - စိတ်ဖိစီးမှုခံနေရသူရဲ့မနာလိုဝန်တိုမှု၊
အသက် ၂၄ - ကျွန်ုပ်သည်ခေတ္တဖုတ်ကောင်ဖြစ်သော်လည်းတဖန်လူသားတစ် ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်
အသက် (၂၄) နှစ် - ငါစကားပြောနေတာပိုကောင်းတယ်။ ပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိတယ်။ ငါကလေးတွေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်ဒါကြောင့်ငါကသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်မှာပိုကောင်းအာရုံစူးစိုက်။
အသက် ၂၄ - ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
အသက် ၂၄ - ရငျးနှီးသောရငျးနှီးမှုဖွစျစနေိုငျသညျကိုနောကျဆုံးသတိရမိသညျ
အသက် ၂၄ နှစ် - မှတ်မိနိုင်လောက်သောမှတ်ဉာဏ်၊ ခေါင်မိုးမှတေးသီချင်းရေးသားခြင်း၊ PIED ကိုကုသနိုင်သည်
အသက် ၂၄ နှစ် - စွမ်းအင်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသိပညာတိုးပွားစေခြင်း၊ သိသိသာသာတိုးမြှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသံလိုက် / ယုံကြည်မှု။ သာယာတဲ့။
(၂၄) နှစ် - လူတွေကလိင်ဆက်ဆံတာကိုကြည့်ချင်တာကိုမခံစားရဘူးလို့ခံစားရတာအရမ်းကောင်းတယ်
အသက် ၂၄ နှစ် - ၁ လနှင့် ၉ လရှိပြီ
အသက် ၂၄ နှစ် - ကျွန်ုပ်၏အိပ်မက်ပန်းတိုင်သို့ရောက်ခဲ့သည်
အသက် ၂၄ - သင်၏လိင်စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုရန်သင်ယူပါ။
(၂၄) နှစ် - ရောဂါပိုးမွှားကပ်နေစဉ်အတွင်းအလွန်အမင်းညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းကကျွန်ုပ်ကို PIED - Cured!
အသက် ၂၄ နှစ် - စိတ်အတွေးအခေါ်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်း + ကျွန်ုပ်၏ဇာတ်လမ်း (ရက်ပေါင်း ၇၀ မွမ်းမံခြင်း)
၂၄ နှစ် - အရာရာအောင်မြင်ရန်လှုံ့ဆော်မှု။ ဦး နှောက်မြူခြင်း၊ ငါအရင်ကထက်အများကြီးပိုပြီးရယ်မော။
အသက် ၂၄ နှစ် - အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောအမြင်၊ ပိုမိုသောအကြောင်းအရာများ
(၂၄) နှစ် - NoFap လုပ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏အကျိုးကျေးဇူးများသည် NoFap (နှင့် ပို၍ အားမငယ်သောဒစ်) မဟုတ်ပါ
အသက် ၂၄ - ကြီးထွားရန်မကြောက်တော့ပါ
အသက် ၂၄ - NoFap သည်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်
အသက် ၂၄ - ယခုကျွန်ုပ်အရောင်များကိုတွေ့ပြီ။ ဒီကြီးကျယ်တဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးကသင့်ကိုမထိန်းချုပ်ပါစေနဲ့။
(၂၄) နှစ် - Porn သွေးဆောင်ခြင်းကိုတားဆီးနိူင်သော ED
အသက် ၂၄ နှစ် - PIED ပျောက်သွားပြီ
အသက် ၂၄ နှစ် - PIED မရှိတော့ - လူများစွာထိခိုက်စေသည့်ပျက်စီးမှုအားလုံးအတွက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုရိုက်နှက်ပါ
အသက် ၂၄ နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်မင်္ဂလာဆောင်ညတွင် PIED - နောက်ဆုံးတွင်ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်
အသက် ၂၄ နှစ် - ရက်ပေါင်း ၉၀ ရက်၊ ရက် ၁၅၀ မလုံလောက်ပါ ၁ နှစ်…မလုံလောက်ပါ
အသက် ၂၄ - Porn သည်ကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုယခင်ကကဲ့သို့မထိန်းချုပ်တော့ပါ။ ငါနေတဲ့ဘဝကိုကြိုက်တယ်
အသက် ၂၄ နှစ် - Porn သွေးဆောင်မှုကြောင့်ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်
အသက် ၂၄ - လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများသိသိသာသာကျဆင်းခဲ့သည်။ ပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိတယ်။ ကျွန်တော့်ခံစားချက်ကပိုကောင်းတယ် ငါအများကြီးပိုပြီးစာနာရှိသည်
(၂၄) နှစ် - စွဲဆောင်မှုသည်အမှန်ပင်။ အမှုအရာပြုရရန်ပိုမိုစွမ်းအင်။ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအသံ။ ဒေါသ နည်း၍ စိတ်ပျက်ရပြီးစိတ်ဓာတ်ကျသည်။
(၂၄) နှစ် - ကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသည့်အကျိုးကျေးဇူးများသည်စကားလုံးများကိုဖော်ပြနိုင်ခြင်းထက်ကျော်လွန်နေသည်
အသက် ၂၄ နှစ် - ကျွန်ုပ် nofap ကိုစတင်ခဲ့ခြင်းမှာ erectile ပြproblemsနာများဖြစ်သော်လည်းယခုအခါများသောအားဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်
(၂၄) နှစ် ငါစိတ်ကူးယဉ် w / အော်ဂဇင်နိုင်ပါတယ်!
အသက် ၂၄ - ထူးခြားသောအသံဖြစ်မည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အခြားသူတစ် ဦး နှင့်တူသည်
အသက် ၂၅ နှစ် - ငါဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်ပြီးထိန်းချုပ်မှုပိုပေးတယ်
အသက် ၂၅ -“ ခင်ဗျားကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမရိုက်နိုင်ဘူး။ ပြေးကြစို့”
အသက် ၂၅ မှ ၁၁၀ ရက်အထိကျွန်ုပ်အသက်ရှင်လျက်ခံစားရသည်။ ငါနေ့ 25 နှင့်ယနေ့တွင်ခဲ့ပုံကိုနှိုင်းယှဉ်။ ကွာခြားချက်မှာနေ့ရောညပါ
အသက် ၂၅ ရက်မှ ၂၀၀ ရက်အတွင်း PIED သည်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်သည်။ ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိခြင်း၊ ငါပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုခံစားရသည်။ ကျွန်တော့်မိန့်ခွန်းကပိုပြီးရှင်းပါတယ်
အသက် ၂၅ - ၂၂၂ ရက် - အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။ နောက်ဆုံးတော့ငါအသက် ၂၅ နှစ်မှာရည်းစားရှိတယ်။
အသက် ၂၅ နှစ်မှ ၆ နှစ်အကြား DE သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုဖြတ်ပြီးသွားသည်
အသက် ၂၅ - လှပသောအမျိုးသမီးများနှင့်ပျော်စရာကောင်းသောည။
အသက် (၂၅) နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်မှုအတွက်တာ ၀ န်ခံမှုရှိသည့်မိတ်ဖက်ပါ
အသက် ၂၅ - NoFap သည်ကျွန်ုပ်၏ပြproblemsနာအားလုံးအတွက်အဖြေမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ရောက်စေခဲ့သည်
အသက် ၂၅ နှစ် - အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအော်ဂဇင်များ။ အိပ်မပျော်ခြင်းနှင့်ငြီးငွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံအစည်သွားပြီ
အသက် ၂၅ - နာတာရှည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကြောင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်မည်မျှနက်ရှိုင်းသည်ကိုကျွန်ုပ်မျက်ခြည်ပြတ်စေခဲ့သည်
အသက် ၂၅ - ချီးမွမ်းမှုကအရေးမကြီးတော့ဘူး
အသက် ၂၅ နှစ် - သုတ်ရည်လွှတ်မှုပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးလေးစားမှုကမြင့်တက်နေပြီး၊
အသက် ၂၅ နှစ် - ED၊ သင်ရုန်းကန်နေလျှင်ဖတ်ပါ
အသက် ၂၅ - အလွန်အမင်းရုပ်သိမ်းခြင်းကိုစိုးရိမ်ခြင်း၊ သို့သော်ယခုပင်စိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစကားပြောဆိုခြင်း၊ ပိုမိုတည်ငြိမ်သောစွမ်းအင်အဆင့်များရှိခြင်း
အသက် ၂၅ - နောက်ဆုံးတွင် PIED ကိုကုသခဲ့သည်။ အကြံပြုချက်များ
အသက် ၂၅ - နောက်ဆုံး ၅ နှစ်အကြာတွင်တိုးတက်မှု
အသက် ၂၅ - ED ကိုပြုပြင်ပြီးကျွန်ုပ်မပျော်ခဲ့ပါ
အသက် ၂၅ နှစ် - ရာစုနှစ်များစွာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ရာပေါင်းများစွာသောပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းများနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကင်းမဲ့ခြင်းမှယနေ့ ၃၂ နာရီမနက်အထိ
အသက် ၂၅ - စူပါ ဦး နှောက်မှစကားပြောခြင်းမှမိန်းကလေးများအထိ၊ ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးသမီးများနှင့်ရက်များစွာအကြိမ်အထိ
အသက် ၂၅ နှစ် - ပေါင်းပင်များ၊ လှုပ်ခြင်းများ၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများနှင့် MDMA မှလူကြိုက်များခြင်းနှင့်ဘဝအပေါ်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအမြင်သစ်များအထိ
အသက် ၂၅ နှစ် - လိင်တူချစ်သူအမျိုးသား။ PIED ကြောင့်ဒီခရီးကိုကျွန်တော်စခဲ့တယ်။ မနေ့က cialis မရှိဘဲနှစ်ခါလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်
အသက် ၂၅ - ကျွန်ုပ်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုလိုက်လံရှာဖွေခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ GF ကိုပြန်လည်ရယူခြင်း (နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ) ကိုရရှိခဲ့သည်
အသက် ၂၅ - Hard mode သည်ကျွန်ုပ်၏ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကုသပေးခဲ့ပြီး ၂၃ ရက်အကြာတွင်သုတ်ရည်လွှတ်မှုနှောင့်နှေးခဲ့သည်
အသက် ၂၅ နှစ် - ကျန်းမာသောအစားအစာကအများကြီးကူညီသည်
အသက် (၂၅) နှစ် - အမျိုးသမီးများနှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုတတ်ရန်ကျွန်ုပ်သင်ယူခဲ့ပုံ
အသက် ၂၅ - ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ပျော်ရွှင်သည်၊ ယုံကြည်မှုရှိပြီးယခင်ကထက် ပို၍ လှုံ့ဆော်ခံရသည်
အသက် ၂၅ နှစ် - ငါမိန်းကလေးတွေကိုအလွယ်တကူစကားပြောနိုင်ပြီးသူတို့အပေါ်စာနာစိတ်လည်းအများကြီးရှိတယ်
အသက် ၂၅ - ကျွန်ုပ်မှာစွမ်းအင်တစ်တန်ရှိတယ်။ သာမာန်အားဖြင့်ပျော်ရွှင်မိပေမယ့် BS အတွက်စိတ်တိုတတ်ပါတယ်
အသက် ၂၅ - မနက်မှာထိတ်လန့်သလိုခံစားရတယ်
အသက် ၂၅ - လူတိုင်းသည်အနည်းဆုံးတစ်လ PMO လုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးအကျိုးကျေးဇူးများခံစားရမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်
အသက် ၂၅ နှစ် - Nofap ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်လုံးဝမယုံကြည်ခဲ့ပါ
အသက် ၂၅ - ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးဗားရှင်းဖြစ်ရန်ပြန်လာခဲ့သည်
အသက် ၂၅ - အတွေးပုံစံများတိုးတက်လာသည်။ ငါလုပ်ခဲ့တာကိုဂုဏ်ယူတယ်၊ ချစ်ခင်မှုနဲ့ချစ်ခင်မှုနဲ့မထိုက်တန်တော့ဘူး၊ လူမှုရေးအရစိတ်မဝင်စားတော့ဘူး။
အသက် ၂၅ နှစ် - စွဲစွဲလမ်းမှုအတွက်အလုပ်ရခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ဂီတစီးဆင်းနေသည်
အသက် ၂၅ - ယခုနှစ်ကျွန်ုပ်၏ (အံ့သြဖွယ်) ယခု GF ဖြင့်အပျိုစင်ဘဝပျောက်ဆုံးသွားသည်
အသက် (၂၅) နှစ် - ဆေးဆရာဝန်။ ငါလုံးဝစိုက်ထူခြင်းမရှိ, လိင်ကိုကြောက်, ငါ့ရည်းစားကြောက်လန့်အံ့သြဖွယ်အချိန်ရှိခြင်း & အလွန်ကြီးစွာသောလိင်ဘဝကိုပျော်မွေ့ခဲ့သည်။
အသက် ၂၅ - အမျိုးသမီးများအပေါ်ပိုမိုလူသားဆန်သောအမြင်၊ နံနက်သစ်တော၊ စိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်မကောင်းသောမြည်းကဲ့သို့ခံစားမိသည်
အသက် ၂၅ နှစ် - သက်တမ်းပိုများခြင်း၊
အသက် ၂၅ - ယခု 'ပျမ်းမျှ' မိန်းကလေးအားဆွဲဆောင်သည်
အသက် ၂၅ နှစ် - ညစ်ညမ်းသောအရေခွံမှထွက်ပေါ်လာသောစကားဝိုင်းအနေဖြင့် - ကျွန်ုပ်သည်အသိပညာတိုးချဲ့ခြင်းကိုယခုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်
အသက် ၂၅ - စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှုအကြောင်းကျွန်ုပ်ပြောပြသောအခါလူများကကျွန်ုပ်ကိုမယုံကြပါ
အသက် ၂၅ နှစ် - PIED နှင့် DE သွားပြီ
အသက် ၂၅ - PIED ကို ၄၅ ရက်အတွင်းကုသနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျန်းမာရေးပြissueနာတစ်ခုဖြစ်သည်၊
အသက် ၂၅ နှစ် - PIED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်၊ စိတ်ကျရောဂါသည် ၈၅% ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်၊ ယုံကြည်မှုတိုးလာသည်
အသက် ၂၅ နှစ် - ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် PIED ကိုကုသခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၄ နှစ်ရှိပါပြီ၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုဘဲလိင်မဆက်ဆံဘဲပြည့်တန်ဆာလိင်အကျင့်ယိုယွင်းခြင်းကိုပြည့်တန်ဆာများငှားရမ်းခြင်း၊
အသက် ၂၅ နှစ် - PIED ပျောက်ကင်းသွားပြီ - ငါပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ပြီဟုခံစားရသည်။ ပြီးတော့ငါဆေးလုံးမလိုအပ်တော့ဘူး
အသက် ၂၅ နှစ် - PIED လုံးဝပျောက်သွားပြီ ကျွန်ုပ်၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အကောင်းဆုံးဘ ၀ ဖြစ်သည်။
အသက် ၂၅ နှစ် - PIED၊ ၂ နှစ်အလွှာရှိသူ၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆိုင်ရာယုံကြည်မှုနှင့်လိင်အရပေါများသည်
အသက် ၂၅ နှစ် - PIED, Docs သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံတွင်အပ်များကိုသတ်မှတ်ထားသည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းမှုမှာ porn ဖြစ်သည်
အသက် ၂၅ နှစ် - PIED၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုထိန်းချုပ်ရန်ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်ဟုခံစားရပြီး ပို၍ ရယ်မိသည်
အသက် ၂၅ နှစ် - စွမ်းအားပြည့်၊ ယုံကြည်မှုရှိသူ၊
အသက် ၂၅ - လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းသွားသည်
အသက် ၂၅ နှစ် - သူရဲကောင်း၏ခရီး
အသက် ၂၅ - လူသားတို့၏ကောင်းကျိုးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ဆန္ဒများကိုယဉ်ပါးအောင်လုပ်ရန်အချိန်
အသက်အရွယ် 25 - အများကြီးပိုပြီးမကြာခဏမိန်းကလေးငယ်များအားဖြင့်ချဉ်းကပ်ခံရ, PIED ပိုကောင်း
အသက်အရွယ် 25 - အများကြီးကျန်းမာယခုနံနက်သစ်သား!
အသက်အရွယ် 25 - ယခုလိင်စိတ်တိုးမြှင့်, Viagra မပါဘဲကောင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ဘယ်တော့မှမ
အသက် ၂၆ နှစ်မှ ၁ နှစ်အစီရင်ခံစာ - ယခုငါလည်ပတ်သည့်အချက်အချာမှာ GitHub ဖြစ်သည်
၂၆ နှစ် - ၁၂၇ ရက် PMO အခမဲ့၊ Hard-mode
(၂၆) နှစ် - (၁၆) နှစ်မှစ၍ စွဲစွဲလန်းလန်းနေသောယခုဆက်ဆံရေးသည်ကောင်းမွန်သောအိပ်စက်ခြင်း၊ စွမ်းအင်နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရှိခြင်း
အသက် ၂၆ - ကျွန်ုပ်သည်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသောဘာသာမဟုတ်သော်လည်းအဆင့် ၁၂ ဆင့်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်လုပ်ဆောင်ပေးသည်
အသက် ၂၆ နှစ် - ပိုမိုကောင်းမွန်သောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှုတိုးတက်လာခြင်း၊ စိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းလာခြင်း၊
အသက် ၂၆ - အကြီးမားဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုကကျွန်ုပ်စိတ်အေးလက်အေးဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ဒေါသပေါက်ကွဲခြင်းများကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစိတ်အခြေအနေနှင့်စိုးရိမ်စိတ်အဆင့်များ
(၂၆) နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်အသက် (၈) နှစ် (သို့) ၉ နှစ်အရွယ် မှစ၍ လိင်မှုဆိုင်ရာမုန်းတီးမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်
အသက် ၂၆ - ယုံကြည်မှုလွန်စွာတိုးပွားလာသည်။ လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများလုံးဝမရှိတော့ပါ။ အထွေထွေစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ထိတ်လန့်တိုက်ခိုက်မှုများသည် ၅၄ ရက်မှစပြီးပျောက်ကွယ်သွားတော့သည်။
အသက် ၂၆ - အရူးယုံကြည်မှု၊ လိင်တံသည်အလွန်ခံစားရသည်၊ အမျိုးသမီးများသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးမကြာခဏဆီးသွားခြင်းနည်းသည်
(၂၆) နှစ် - သန္ဓေတည်ခြင်းနှောင့်နှေးခြင်း၊ ပစ္စည်းများကိုသန္ဓေသားအဖြစ်သို့တိုးမြှင့်ခြင်း - ယခုအချိန်၊ စွမ်းအင်နှင့်အမျိုးသမီးများကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြင့်ကြည့်ရှုခြင်း
အသက် ၂၆ - ဆရာဝန်များကကျွန်ုပ်၏ PIED - FAIL ကိုကုသရန်ညစ်ညမ်းဆေးကိုဆက်လက်အသုံးပြုရန်ပြောခဲ့သည်။
အသက် ၂၆ - အေဒီ။ ။ ၁၀ နှစ်အရွယ်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစကြည့်သည်။ နံနက်သစ်သည် ၉ လအတွင်းပြန်လာသည်
အသက် ၂၆ - ဘ ၀ အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်။
အသက် ၂၆ - လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ခြင်း၊ လူမှုရေးအခြေအနေများတွင်ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိခြင်း၊ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်မလုပ်နိုင်သောအရာများကိုပြုလုပ်ရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခြင်း။ ကောင်းလိုက်တာ!
အသက် ၂၆ နှစ် - ကျွန်ုပ်ရည်မှန်းချက်မပြည့်မီမကြာခဏပျက်ကွက်ခြင်း၊
၂၆ နှစ် - ပထမဆက်ဆံရေးအစစ်အမှန်၊ ပို၍ ပျော်ရွှင်ပြီး ပို၍ ပင်စိတ် ၀ င်စားမှုရှိသည် PIED သည်ပျောက်သွားပုံရသည်
အသက် ၂၆ နှစ် - သဘာဝဘေးအန္တရာယ်မှ Nofap အောင်မြင်မှုနှင့်သုတ်ရည်ကိုထိန်းထားနိုင်ခြင်း
အသက် ၂၆ နှစ် - ယုံကြည်မှုပိုရလာခြင်း၊ လူမှုရေးစိတ်ပူပန်မှုနည်းပါးခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်ထိတ်လန့်ခြင်းများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ငါဆေးတွေကိုသောက်နေတုန်းပဲ၊ အခုတော့အရင်ကထက်ပိုပျော်လာတယ်။
(၂၆) နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်အိုင်ဖုန်းကိုဖယ်ရှားရန်လိုသည်
အသက် ၂၆ နှစ် - လိင်မှုကိစ္စကိုခံစားခွင့်သည်ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုပျက်စီးစေပါသလား။
(၂၆) နှစ် - ငါကဖိန်းဓာတ်တောင်မလိုတော့ဘူး
အသက် ၂၆ - ကျွန်ုပ်သည် porn ကိုမတိုက်ခိုက်တော့ပါ။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကအပြည့်အ ၀ ပြန်လည်ပြုပြင်ထားတယ်။
အသက် ၂၆ နှစ် - ငါ Bravado ရဲ့သတ္တိကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ် - PIED ကိုကုသခြင်းအပါအ ၀ င်အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီး။
အသက် ၂၆ - သိသာထင်ရှားတဲ့ရလဒ်တွေကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ဦး နှောက်မြူသိသိသာသာမြင့်တက်သွားပြီးကျွန်မရဲ့စိတ်ကျရောဂါကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့သဘောထားကပိုကောင်းလာဖို့ပြောင်းလဲနေပါတယ်
အသက် ၂၆ - ကျွန်ုပ်၌မိန်းကလေးများနှင့်စကားပြောရန်ဘောလုံးရှိသည်
အသက် ၂၆ - ကျွန်ုပ်သည် cuckolded၊ shit, lick feet စသည်တို့နှင့်ဆက်ဆံရန်တိုက်တွန်းခြင်းလုံးဝပျောက်ဆုံးသွားသည်။
အသက် ၂၆ နှစ် - ငါပျင်းနေတဲ့ Midsex ကိုဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက်ငြီးငွေ့ပြီးငါ့ရင်သွေးလေးကိုဆုံးရှုံးခဲ့တာလဲ။ မဖြစ်တော့ဘူး ဒါဟာတစ်ခုလုံးကွဲပြားခြားနားသောအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၂၆ နှစ် - အိပ်စက်ခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း၊ အံ့သြဖွယ်စွမ်းအင်၊ တုံ့ပြန်မှုနည်းပါးခြင်း၊ ထိတ်လန့်မှုနည်းပါးသောအမျိုးသမီးများ၊
အသက် ၂၆ - ၁၄ နှစ်မှစ၍ ပျောက်ဆုံးသွားပြီးစွဲလမ်းနေပြီးနောက်ဆုံး၌ညစ်ညမ်းသောရုပ်နှင့်လိင်နှင့်ရင်းနှီးမှုတို့ကိုခံစားနိုင်သည်
အသက် ၂၆ - ဤအရာကိုစီမံပါ၊ သင်ဘဝကိုစီမံရန်သင်၌တန်ခိုးရှိသည်
အသက် ၂၆ နှစ် - လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း - PMO မပါ ၀ င်သော ၁၅ လ - ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းကကျွန်ုပ်ဘဝကိုပြန်လည်ရရှိစေခဲ့သည်။
အသက် ၂၆ - ယုံကြည်မှုပိုမိုရှိခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်း၊ ပိုမိုအာရုံစိုက်ခြင်း၊ ဦး နှောက်မြူမရှိခြင်းမှအနည်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၂၆ - အပြာနှေးသည့်ရုပ်ပုံများကိုမသုံးတော့ပါ
အသက် ၂၆ - ကျွန်ုပ်၏ရိုးသားသောအကျိုးကျေးဇူးများ (အကယ်၍ နာကျင်မှုမရှိပါကသင်ကြီးထွားမည်မဟုတ်ပါ) AMA
အသက် ၂၆ - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေသောအမျိုးသမီးများ၏ပုံရိပ်များကိုပြန်လည်မတိုက်ခိုက်တော့ပါ
(၂၆) နှစ် Nut နို ၀ င်ဘာသည်အလွန်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်
အသက် ၂၆ - အာဖရိကအားကစားသမား၏ရှုထောင့်မှရက်ပေါင်း ၇၀ ကျော်။
(၂၆) နှစ် - မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအဖြစ်မှဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရသည်။
အသက် ၂၆ - PE တိုးတက်လာခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံး ၀ တ္ထုတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ porn အသုံးပြုခြင်းသည်“ horniness” နှင့်အနည်းငယ်သက်ဆိုင်သည်။
အသက် ၂၆ - PIED, လိင်အတွက်ဆေးပြားအများဆုံးသုံးသည်။ အခုတော့အစိုင်အခဲစိုက်ထူ, နံနက်သစ်သား, ပိုပြီးယုံကြည်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်
အသက် ၂၆ နှစ် - PIED ပျက်ကွက်ပြီးနောက်နောက်ဆုံးကျွန်တော့်ဇနီးကိုယ်ဝန်ရလာသည်။ ငါအရမ်းသူမ၏ဆွဲဆောင်ယခုညစဉ်ညတိုင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်
အသက် ၂၆ နှစ် - PIED ကျွန်ုပ်သည် ဦး နှောက်အားပြန်လည်ပြုပြင်ရန် (သို့) အနည်းဆုံးဖြစ်စဉ်ကိုလုပ်ရန်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်
(၂၆) နှစ် - Semen ထိန်းသိမ်းခြင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်မောင်းနှင်သည်
အသက် ၂၆ - ကွန်ဒုံးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်
၂၆ နှစ် - လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာနောက်ခံ၌အမြဲတမ်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုခံစားခဲ့ရသည် - သို့သော်ယခုတော့မဟုတ်တော့ပါ။
၂၆ နှစ် - လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်ကိုလျှော့ချပေးခဲ့သည်။ ကျန်းမာသန်စွမ်းတယ် ငါရုတ်တရက်အသိဉာဏ်ဖြစ်လာခဲ့သည်လျှင်အဖြစ် ဦး နှောက်မြူသွားပြီ။ ဂီတ / အနုပညာကိုယေဘုယျအားဖြင့်တန်ဖိုးထားခြင်း။
အသက် ၂၆ - လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ကိုသစ္စာဖောက်ကာအခြေခံအားဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုကျွန်ခံစေခဲ့သည်
အသက် ၂၆ - ညစ်ညမ်းသောအစားထိုးပစ္စည်းများအားတမ်းတနေဆဲဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်ရည်းစားတစ်ယောက်လိုချင်ကောင်းလိုလိမ့်မည်
အသက် ၂၆ နှစ် - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေမှုနှင့်သေသည့်လိင်တံ။ ညစ်ညမ်းရောဂါနှင့်နေ့စဉ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုဖြတ်တောက်ပစ်ရန်ကုထုံးဆရာကပြောခဲ့သည်။ အဲ့ဒါအလုပ်ဖြစ်တယ်!
အသက် ၂၆ နှစ် - ၁၆ လကြာညစ်ညမ်းမှုကင်းသောအကြံဥာဏ်သုံးချက်
အသက် ၂၆ - မိမိကိုယ်ကိုအောင်နိုင်ခြင်း ရုပ်ပုံများမတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်အပြည့်အစုံပြောင်းလဲခြင်း။
အသက်အရွယ် 26 - တစ်ဦး alpha တူသောစိတ်, သွားပြီဟုဦးနှောက်မြူ, အထင်ကြီးပညာသင်နှစ်စွမ်းဆောင်မှု
အသက် (၂၇) နှစ် -“ မင်းသာအလေးအနက်ထားတယ်ဆိုရင်စက္ကူကိုထိုးရတာလွယ်တယ်”
အသက် ၂၇ နှစ်မှ ၁ နှစ် NoFap သည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကမ္ဘာသို့ကျွန်ုပ်၏မျက်စိကိုဖွင့်ပေးခဲ့သည်
အသက် ၂၇ ရက်မှ ၆၀ ရက်၊ ငါပိုပြီးပြုံးတယ် ငါပျော်ရွှင်တယ်
အသက် ၂၇ - ၆၁ ရက် - ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အလုပ်ရရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်သည် ပိုမို၍ အခိုင်အမာပြောဆိုသည်
(၂၇) နှစ် - ၁၁ နှစ်ကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများကိုထပ်မံစွဲမက်မိပြန်သည်
အသက် ၂၇ - ၈ နှစ်ကြိုးစားပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်သည်ရက်ပေါင်း ၃၀ ထိပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်သို့ရောက်ခဲ့သည်။ ဒါကငါကွဲပြားခြားနားဒီအချိန်ငါပြုခဲ့တယျ။
အသက် ၂၇ - PIED ကိုရိုက်ပြီးရက် ၃၀၀ အတွင်းငြင်းပယ်ခံရမှာကိုကြောက်တယ်
(၂၇) နှစ် - ဦး နှောက်မြူမှုန်သွားသည်။ လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းသွားသည်။ နံနက်စိုက်ထူ၏သာ။ ကွီးမွတျကြိမ်နှုန်း။
အသက် ၂၇ နှစ် - ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားခြင်း၊ မောင်းနှင်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုတိုးခြင်း၊ နည်းလမ်းများစွာတွင်ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချခြင်း၊
အသက် (၂၇) နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာအချိန်ယူပြီးလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း၊ နံနက်သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်သည်
(၂၇) နှစ် - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအများကြီးပိုခံစားမိခြင်း
အသက် ၂၇ - နောက်ဆုံးတွင် ၀ င်ငွေကိုနှစ်ဆသောအလုပ်သစ်၊
(၂၇) နှစ် - လိင်မှုကိစ္စမှနှစ်ပေါင်းများစွာလွတ်မြောက်ခြင်း
အသက် (၂၇) - 'ထာဝရနေခြင်းမှသည် "ကောင်းမွန်သောဘဝဖြင့်နေထိုင်ခြင်းအထိ"
အသက် ၂၇ - ယုံကြည်မှုနိမ့်ကျသောရှက်တတ်သောကောင်လေးတစ်ယောက်မှယခုကျွန်ုပ်၏ကြောက်ရွံ့မှုအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီ၊
အသက် ၂၇ - ယေဘုယျအားဖြင့်အထူးသဖြင့်လိင်ဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ဘဝသည်သန့်ရှင်းသည်။ ဒီထက်ကောက်သော။
အသက် ၂၇ နှစ် - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်းမရှိ၊ လက်တွေ့ဘဝနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းကိုယခင်ကထက်ခံစားကြည့်ပါ။ ယုံကြည်မှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုတိုးလာသည်
အသက် ၂၇ နှစ် - ပျော်ရွှင်မှုပိုရလာ၊
အသက် ၂၇ - ကျွန်ုပ်၏အပြာစွဲရောဂါကိုကုစား။ လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွင်အလုပ်လုပ်သည်
အသက် ၂၇ - အမျိုးသမီးများအတွက်ပိုမိုကျန်းမာသောအမြင်၊ ချိန်းတွေ့ခြင်း၊ လူမှုရေး၊ အလုပ်အကိုင်တိုးတက်မှု
အသက် ၂၇ - NoFap စမ်းသပ်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ရယ်စရာဗီဒီယို (Glink)
အသက် ၂၇ - ကျွန်ုပ်သည်ဖိတ်ကြားသောနေရာများမှမိန်းကလေးများနှင့်ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်သောသူများ၏အာရုံစိုက်မှုကိုခံရသည်
(၂၇) နှစ် - ငါအရမ်းဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်လာခဲ့သည်; ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအစားအစာများပျင်းစရာကောင်းလာတယ်၊ ငါနှိုးလို့မရဘူး
အသက် ၂၇ - ကျွန်ုပ် DE နှင့် PIED ကိုကုသပေးခဲ့သည်
အသက် (၂၇) နှစ် - ကျွန်ုပ်ဆေးလိပ်ဖြတ်သည်အထိကျွန်ုပ်၌မည်သည့်ရောဂါလက္ခဏာရှိမှန်းမသိခဲ့ပါ
အသက် (၂၇) - ကျွန်ုပ်သည်လူများပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ပျော်ရွှင်မှုပိုရလာသည်
အသက် ၂၇ - ငါဘယ်တော့မှမပျော်ခဲ့ဘူး၊ ငါသည်ငါ၏စစ်မှန်သောကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြစ်လာသည်
အသက် ၂၇ - ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများကိုအကြီးအကျယ်လျှော့ချခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည်လင်ပြတ်သားခြင်း၊ အမျိုးသမီးများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုကိုပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း
အသက် (၂၇) နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်လိင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ရပ်များစွာကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည်။ သူ့မယားကိုပြစ်မှားသောသူမူကား၊
(၂၇) နှစ် \_ t ငါအများကြီးဝင်ငွေအလားအလာရှိခဲ့ကြောင်းစိတ်ကူးခဲ့ဘူး။
(၂၇) နှစ် - ဘဝကပိုကောင်းတယ်
အသက် (၂၇) နှစ် - မိန်းကလေးများကိုအသစ်သောနည်းဖြင့်ကြည့်ခြင်း၊ NoFap ၏လှပသောရလဒ်
အသက် ၂၇ နှစ် - အိမ်ထောင်သည် - လိင်ပြproblemsနာများပျောက်ကင်းသွားသည်။ ကျနော်တို့လိင်လုပ်ဘူး, ငါတို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာလုပ်!
အသက် (၂၇) နှစ် - Monster flatline၊ သို့သော်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊
အသက် ၂၇ နှစ် - စွမ်းအင်များများစားစား၊ မိန်းကလေးများနှင့်ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိခြင်း၊ ပိုမိုသိရှိနားလည်ခြင်း၊
အသက် ၂၇ - မနက်ခင်းသစ်နှင့်အလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်း။
အသက် ၂၇ - စိုက်ထူခြင်းကိစ္စများမရှိတော့ပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်လက်တည်ရှိနေမှုကြောင့်လိင်စွမ်းအင်ပိုမိုများပြားလာပါသလား။
အသက် (၂၇) နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်အမှန်တကယ်စကားစမြည်မပြောမှီအချိန်အထိကျွန်ုပ်မည်မျှပြောင်းလဲသွားသည်ကိုမသိခဲ့ပါ
အသက် ၂၇ - PIED & DE ပျောက်ကင်းသွားသည်။ အများအပြားအပိုဆောင်းအကျိုးခံစားခွင့်။
အသက် ၂၇ - PIED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့်ကမ္ဘာကြီးအပေါ်ကျွန်ုပ်၏အမြင်ကျယ်လာသည်။ အရင်ကမလုပ်ဖူးတဲ့အရာတွေကိုလုပ်နေသလိုခံစားရတယ် ငါအသက်ရှင်နေတယ်
အသက် ၂၇ - PIED သည်အနာရောဂါပျောက်ကင်းပြီးလိင်နည်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်။ အားကောင်းလာသည်
အသက် ၂၇ နှစ် - PIED ကကျွန်တော့်ကိုဆေးလိပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ ၅ လတာကကျွန်တော့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်
အသက် ၂၇ နှစ် - PIED၊ အံ့သြစရာကောင်းတာကအကျိုးကျေးဇူးတွေကအံ့သြစရာပဲ
(၂၇) နှစ် - PIED ငါမနက်ခင်းထပြီးအိပ်ရာနိုးလာပြီးလိင်ဆက်ဆံဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ကျောက်တုံးကြီးကိုတုန်ခါနေတယ်။ ထူးဆန်းတဲ့ fetishes မှေးမှိန်။
အသက် ၂၇ - Porn ကကျွန်ုပ်အားဘဝ၊ အမျိုးသမီးများနှင့်ရောပြီးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့၊ တစ်ခါတစ်ရံအကြမ်းဖက်ပစ္စည်းများအပေါ်မှီခိုအားထားခြင်းမရှိခဲ့ပါ
အသက် ၂၇ - ပြင်းထန်သော pied နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံမရှိသော ၂ နှစ်အကြာတွင်ပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့သည်
အသက် ၂၇ နှစ် - ဆက်ဆံရေးဟာအများကြီးတိုးတက်လာတယ်။ လိင်ကပိုကောင်းတယ်။ ငါ့စီးပွားရေးနှင့်အတူအရူးထုတ်လုပ်မှု။ အကြမ်းဖက် fetishes သွားပြီ။
အသက် ၂၇ - ယခုကျွန်ုပ်သည်အခြားအဆင့်တွင်ရှိနေသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများနှင့်တူသည်ဟုခံစားရသည်
အသက် ၂၇ - ပြင်းထန်သော PIED ကုသမှု - နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ဒုံးဖြင့်ပင်စိုက်ထူခဲ့သည်
အသက် ၂၇ - ငါဟာယုတ်ညံ့သူလို့ခံစားမိလို့ပူပြင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်
အသက် (၂၈) နှစ် - PIED သည်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသပြီးကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းထင်ထားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဟုခံစားရသည်
အသက် ၂၈ - ရက် ၁၀၀ ထိ၊ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတွေးများ
အသက် ၂၈ - ၁၁၄ ရက် - SAD ကောင်လေးမှကုမ္ပဏီ ၂ ခု၏စီအီးအိုသို့ကျွန်ုပ်၏ခရီး (PIED မှလည်းကုသနိုင်ခဲ့သည်)
အသက် ၂၈ - ရက် ၂၀၀ တွင်: Porn-ED ဆေးသည်ကုသသည်
အသက် ၂၈ - ရက် ၉၀ ရက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ တိုးတက်မှုများ - ပိုမိုယုံကြည်မှု၊ တက်ကြွမှု၊
အသက် ၂၈ နှစ် - လိင် - အမျိုးသား - ကျွန်ုပ်သည်ယခုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး၊ အတော်လေးထင်ရှားစွာဆုတ်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု။
အသက် ၂၈ နှစ် - DE သွားပြီ ငါပြproblemနာကို porn အသုံးပြုမှုခဲ့စိတ်ကူးခဲ့ဘူး
အသက် ၂၈ နှစ် - လိင်ဆက်ဆံစဉ်နောက်ဆုံးတွင်အော်ဂဇင်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။
အသက် ၂၈ - ပြင်းထန်သော PIED မှ ၆၆ တွင်အောင်မြင်သော၊ အသည်းအသန်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှအောင်မြင်သည်
အသက် ၂၈ နှစ် - PIED, varicocele, ဆီးကြိတ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ testicular torsion၊ သစ်သားသို့မဟုတ်အလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
အသက် ၂၈ - ငါ PIED ကိုကုသပေးခဲ့သည်။
အသက် (၂၈) နှစ် - ကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသည့်အကျိုးခံစားခွင့်များ၏တစ်ဝက်ကိုပင်မသိခဲ့ပါ
အသက် ၂၈ - ငါမတူကွဲပြားတယ်။ ငါသာယာတဲ့၊ ငါပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေလုပ်နိုင်တယ်၊ ငါကလူတွေရဲ့မျက်စိကိုကြည့်နိုင်တယ်၊ အလုပ်မှာသူဌေးနဲ့စကားပြောနိုင်တယ်
အသက် ၂၈ - ၁၄ နှစ်မှာငါ pied လုပ်ခဲ့တာ။ Hardmode အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။
အသက် (၂၈) နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်အမဲသားတစ်မျိုးကဲ့သို့အမျိုးသမီးများကိုမကြည့်တော့ပါ။ ပိုမိုကောင်းသောအာရုံစူးစိုက်မှု။ ပြုပြင်ထားသောအစားအစာများကိုမစားတော့ပါ
အသက် ၂၈ - ကျွန်ုပ်သည်ကြွေးမြီအတွက်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀၀ - ၁ နှစ်အပ်ငွေပေးရန်အချိန်ဖြစ်သည်
အသက် ၂၈ နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အရှည်ဆုံး၊ အလေးနက်ဆုံးနှင့်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောဆက်ဆံရေး၌ရှိနေသည်။ ငါ့ရဲ့စိတ်ဟာရှင်းပါတယ်၊ ငါ့ရဲ့စွမ်းအင်ကတက်လာတယ်။
အသက် ၂၈ - ၁၂-၂၀ ကနေ ၂၂ မှ ၂၈ အထိပိုကောင်းတဲ့စိုက်ထူနိုင်ခဲ့တယ်။
အသက် ၂၈ နှစ် - စိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှုနှင့်စွမ်းအားတိုးလာခြင်း၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများလျော့နည်းလာခြင်း၊ လိင်ကျန်းမာရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း၊
အသက် ၂၈ နှစ် - လက်ထပ်ထာ - porn-induced ED ။ ပိုကောင်းတဲ့လူဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုငါ့အကွံဉာဏျ
အသက် ၂၈ နှစ် - ဆေးကျောင်းသား။ အကျိုးကျေးဇူးများ (“ စူပါပါဝါ”) သည်သင်ထင်သည်ထက်များစွာပိုကောင်းသည်။
အသက် ၂၈ နှစ် - ယုံကြည်စိတ်ချမှုပို BS မယူပါနဲ့ ငါဟာချောမောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမယ့်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ ငါပိုပြီးသူရဲခံစားရတယ်
အသက် ၂၈ နှစ် - ငါယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်ရှိခြင်း၊ အမျိုးသမီးများနှင့်အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခြင်း၊ လူများနှင့်ပိုမိုဆက်သွယ်လိုစိတ်ရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်
အသက် ၂၈ နှစ် - စွမ်းအင်နှင့်ယုံကြည်မှုပိုရှိသည်။ မည်သည့်လူမှုရေးအခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ဦး နှောက်မြူလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားသည်
အသက် ၂၈ - နံနက်သစ်သားပြန်လာပြီ လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်ကိုလျှော့ချ။ ပိုမိုနိုးကြား၊ နိုးကြား၊ သတိရှိ၊ အမျက်ဒေါသလျော့နည်း မိတ်ဖက်နှင့်အတူကြာကြာရေရှည်စိုက်ထူ။
အသက် ၂၈ နှစ် - PIED သည်နောက်ဆုံးတွင်ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်ခင်လိင်ကိစ္စအံ့သြစရာကောင်းတာကိုကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်။
အသက် (၂၈) နှစ် - PIED သည်ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည် - အပြာလိုင်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပြီးဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများမှာငရဲမှဖြစ်သည်
အသက် ၂၈ - PIED သည်အတိတ်၏အရာဖြစ်သည်။ အခုငါဒုတိယအချီတောင်သွားနိုင်ပြီ
အသက် (၂၈) နှစ် - PIED, Flatline - ကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀% မဟုတ်သေးသော်လည်းအနီးကပ်ရှိနေသည်
အသက် (၂၈) နှစ် - PIED, အမျိုးသမီးများအားဆွဲဆောင်မှုနည်းခြင်း - ယခုအခါစိတ်မပါ ၀ င်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုကျဆင်းလာခြင်း၊
အသက် ၂၈ နှစ် - PIED ။ တစ်လမညစ်ညမ်းဘဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသမိုင်းတွင်ပထမဆုံးအကြိမ် Viagra မပါဘဲစိုက်ထူနိုင်ခဲ့သည်။
အသက် ၂၈ - Porn သွေးဆောင် ED - ကျွန်ုပ်သည်ရည်းစားနှင့်တစ်နေ့လျှင် 28-2 ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံမှုတစ်ခုစီသည်မိနစ် ၁၀ မှ ၄၀ ထိရှိသည်။ အကြှနျုပျ၏လိင်တံတစ်ခုလုံးကိုအချိန်အစိုင်အခဲကျောက်ဖြစ်ပါတယ်
အသက် ၂၈ နှစ် - အိပ်စက်ခြင်းကပိုကောင်းတယ်၊ ယုံကြည်မှုပိုရှိမယ်၊ စွမ်းအင်ပိုရမယ်၊
အသက် ၂၈ - လူမှုရေးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကျနော့်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ယုံကြည်မှုဘယ်တုန်းကမှမမြင်ဖူးအဆင့်ဆင့်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်
အသက် ၂၈ - ၁၈ နှစ်၌ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစတင်ခဲ့သော်လည်းစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုသည်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျောက်ဆုံးသွားပြီးလိင်ဆက်ဆံစဉ်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းခံရသည်။ အားကစား, ထိတ်လန့်တိုက်ခိုက်မှုသွားပြီကူညီပေးခဲ့သည်
အသက် (၂၈) နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အကောင်းဆုံး၊ ကာမဂုဏ်ခံစားမှုနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုင်ရာမာရသွန်ပြေးပွဲများဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်၏အော်ဂဇင်သည်ကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သမျှအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အသက် ၂၈ - ပုံပြင်ကဆက်ပြောသည်။ (HOCD)
အသက် ၂၈ - PMO ကိုကျွန်ုပ်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဟုကျွန်ုပ်သတိပြုမိသည့်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်
အသက် ၂၈ - ဤနှစ်သည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်သည်
အသက် ၂၈ - လုပ်ပိုင်ခွင့်ပိုပေးသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်ဘဝခံစား။
အသက် (၂၈) နှစ် - ပိုကောင်းတဲ့ဘဝဆီလျှောက်လှမ်းနေခြင်း။
အသက် (၂၈) နှစ် - သင်ပိုမိုအသက်ရှင်လာမည်
အသက် ၂၈ နှစ် - ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်“ Must masturbate” မှလွတ်လပ်မှုအသစ်ကိုခံစားခြင်း
အသက်အရွယ် 28 - Porn-သွေးဆောင် ED သွားပြီ!
အသက် ၂၉ နှစ် - လိင်သဘာဝမဆန်သောအကျင့်စရိုက်များနှင့်လိင်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများသည်တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားသည်
အသက် ၂၉ - ရက်ပေါင်း ၂၀၀ အကြာတွင်ဘာတွေပြောင်းလဲသွားပြီလဲ၊ ဘာတွေပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေသေးလဲ
အသက် ၂၉ ရက်မှ ၆၀ ရက် - မလုံခြုံသောကောင်မလေးမှမိန်းကလေး ၄ ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့သည်အထိ။ အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိသည်။
အသက် ၂၉ နှစ်မှ ၈ နှစ်အထိပြင်းထန်သော PIED မရှိတော့ပါ
အသက် ၂၉ ရက်မှရက်ပေါင်း ၉၀ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအသံ၊ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုမိုရှိခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့မှုနည်းပါးခြင်း၊
အသက် ၂၉ - ၁၄ နှစ် PMO စွဲပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ ကျွန်တော်ဟာညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်နှစ်အထိခံစားခဲ့ရတယ်။ ဒီဟာကဘာလဲ
အသက် ၂၉ နှစ် - ၈ နှစ်ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ဘဝပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်
အသက် ၂၉ - nofap မစတင်ခင်မှာကျွန်မဟာလိင်တူချင်းချစ်သူတွေလို့မထင်တော့ဘူး၊
အသက် (၂၉) နှစ် - ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားခြင်း၊ သေနတ်ဖြင့်ပစ်ပေါက်ခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊
အသက် (၂၉) နှစ် - (၂.၅) လအတွင်းကုသသော Porn-ED ဆေးသောက်သုံးမှု - အကြံပြုချက်များနှင့်အားပေးမှု
အသက် ၂၉ - နောက်ဆုံး ၉၀ ကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ အတွေ့အကြုံမျှဝေခြင်းနှင့်အကြံဥာဏ်။
အသက် ၂၉ - လိင်ဆက်ဆံစဉ်ပထမဆုံးအကြိမ်အော်ဂဇင်ပြုခြင်း (ပြင်းထန်သောနှောင့်နှေးသည့်သုတ်ရည်လွှတ်မှု)
အသက် (၂၉) နှစ် - ED နှစ်ကြာပြီးနောက်ပထမဆုံးအကြိမ်ထိုးဖောက်ခြင်း
အသက် ၂၉ - DE ရှိခဲ့လျှင်ယခုပိုမိုခက်ခဲလာပြီးလိင်ဆက်ဆံခြင်းပိုများလာပြီးပိုမိုပြင်းထန်သောလိင်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့သည်
အသက် ၂၉ - PIED ပြီးနောက်၊ ယနေ့လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ အစွန်းရောက်ပစ္စည်းများ၊ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်ရည်းစားဆုံးရှုံးခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့သည်
အသက် ၂၉ - ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုမယုံနိုင်ဘူး
အသက် ၂၉ နှစ် - ၆ လ nofap လုပ်ခဲ့ပြီး PIED ကနောက်ဆုံးတော့ပိုကောင်းတယ်
အသက် ၂၉ - ကျွန်ုပ်သည်ကျန်းမာသန်စွမ်းသူ၊ ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ပြည့်ဝသည်ဟုခံစားရသည်။ ငါ့အသားအရေကောင်းတယ် ကျွန်တော်နေလို့ကောင်းပါတယ်။
အသက် ၂၉ - ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ယုံကြည်မှုရှိပြီးကျွန်ုပ်ရရှိသောယုံကြည်မှုသည်တိုင်းတာ။ မရနိုင်ပါ
အသက် ၂၉ - ကျွန်ုပ်သည် vanilla ပစ္စည်းမှသည်လိင်တူဆက်ဆံခြင်း၊ အ ၀ တ်စားခြင်း၊ ဒါပေမယ့်အခုငါလွတ်ပြီလို့ပြောနိုင်ပြီ
အသက် ၂၉ နှစ် - စိုးရိမ်ပူပန်မှုနည်းပါးသောကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်တွင်အလုပ်တစ်ခုရရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ပိုမိုထိတွေ့မှုရှိခြင်း၊ လူများကိုမျက်စိဖြင့်ကြည့်။ အခွင့်အာဏာနှင့်ပြောဆိုခြင်း
အသက် ၂၉ နှစ် - စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ပြတ်သားခြင်း၊ အလုပ်သစ်စတင်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာဆက်ဆံနိုင်ခြင်း
အသက် ၂၉ - နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကြည့်ခြင်း Porn သည်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏လိင်ဆန္ဒများကိုကျွန်ုပ်နှင့်အဆင်မပြေသောအရာတစ်ခုအဖြစ်သို့တွန်းပို့ခဲ့သည်ကိုတွေ့နိုင်သည်
အသက် ၂၉ - ဆရာဝန်: ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီ ဇာတ်လမ်း၏ကိုယ်ကျင့်တရား nofap အကျင့်ကိုကျင့်သည်။
(၂၉) နှစ် - လိင်မှုဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုတားဆီးရန် ED မဟုတ်ပါ၊
အသက် ၂၉ - PIED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည် GF နှင့်ကောင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုပြုနိုင်ပြီးလိင်တံတစ်ခုခုကိုသာတွေးနေခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုနေ့တိုင်းထရန်လွယ်ကူလာသည်
အသက် ၂၉ နှစ် - PIED ပျောက်သွားပြီ၊ နေဆဲအချို့ DE
အသက် ၂၉ နှစ် - PIED: ငါလက်ထပ်ပြီးတစ်လ nofap ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ငါယခု 29% စိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
အသက် ၂၉ - PIED ။ နောက်ဆုံးတော့လိင်အင်္ဂါလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။
အသက် ၂၉ - PIED …ငါနောက်ဆုံး (Covid ပြီးနောက်) လိင်ဆက်ဆံလျှင်၎င်းသည်အတွေ့အကြုံအသစ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်
အသက် ၂၉ နှစ် - ကျွန်ုပ်နစ်မြုပ်နေသောသင်္ဘောထဲရှိအပေါက်များကိုချိတ်ထားပြီးယခုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အချိန်နှင့်ခွန်အားရှိသည်
အသက် ၂၉ - Porn သွေးဆောင်မှုကိုကုသပေးသည်။ လွန်ခဲ့သော ၆ လအတွင်းကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်တစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်
အသက် ၂၉ - တစ်လအတွက် Pornfree နှင့်ထူးခြားမှုမှာအံ့သြစရာဖြစ်သည်
အသက် ၂၉ - ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသည်ထက်ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိမှုကိုခံစားရသည်။
အသက် ၂၉ - လူမှုဆက်သွယ်မှုများသည်ထိတ်လန့်စရာကောင်းသည်။ ယခုလိမ္မာပါးနပ်မှု၊ ယောက်ျား - Boob သွားပြီ
အသက် (၂၉) နှစ် - PIED (၁၀) နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်နောက်ဆုံးတွင်ပျောက်ကင်းသွားပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏ဘဝသည်ဤမျှလောက်ကြီးကျယ်သောအရာများမဟုတ်ပါ။
အသက် ၂၉ - အကြီးမားဆုံးစွမ်းအားသည်ကျွန်ုပ်လိုချင်သောအရာမှန်သမျှကိုကျွန်ုပ်ရရှိနိုင်ခြင်းအပေါ်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကြီးမားခြင်းဖြစ်သည်။
အသက် ၂၉ နှစ် - ကျွန်ုပ်သည် PIED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်။ ပြန်လာပြီ။ သို့သော်…ယောင်
အသက် ၂၉ - ဒီ shit ဟာယောက်ျားတွေပဲ။ မင်းရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပစ်မယ်
အသက်အရွယ် 29 - သငျပွညျ့စုံထိန်းချုပ်မှုနှင့်သင်၏မှောင်မိုက်ဘက်ကိုလက်ခံရတဲ့အခါဘာမှဖြစ်နိုင်
PMO မပါဘဲအသက် ၃၀ မှ ၄၆၈ ရက် - ဤကာလအတွင်းအရာများစွာပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အများအားဖြင့်ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကပြောင်းလဲသွားတယ်။
အသက် ၃၀ - ပိုမိုကောင်းသောအာရုံစူးစိုက်မှု၊ ဦး နှောက်မြူမှုန်ဝါးသွားခြင်း၊ စိတ်ကျဝေဒနာပျောက်ကွယ်သွားခြင်း၊ ထူးဆန်းသောစိတ်ကူးယဉ်မှုများ (BDSM, fetish စသည်တို့…) ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
အသက် ၃၀ - တစ်နှစ်ကျော်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သောပြောင်းလဲမှုများ
အသက် ၃၀ - Nofap ကိုခြောက်လအတွင်းကျွန်ုပ်၏ Porn-ED ရောဂါကုသပေးခဲ့သည်
အသက် ၃၀ - လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းသွားခြင်း၊ ပိုမို၍ ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသောစွမ်းအင်၊ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအသံ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသားအရေနှင့်အထွေထွေအသွင်အပြင်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲမှု
အသက် ၃၀ - ယခင်ကထက်စိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းနိုင်သည်။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲမိန်းကလေးများနှင့်အတူစကားပြောဆိုနိုင်သည်။ ဘဝကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ပြီး ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ ပို၍ ပျော်ရွှင်ပါ။
အသက် ၃၀ - ယုံကြည်မှုမြင့်မားသည်။ မည်သည့် shit မျိုးကိုမှသည်းမခံပါနှင့်၊ သူစိမ်းများနှင့်ပင်စကားစမြည်စပြောနိုင်သည်၊ တကယ့်ဘဝမှမိန်းကလေးများအားနှိုးဆွပါ။
အသက် ၃၀ - ငါလုပ်ခဲ့မိတယ် - ကြေကွဲဖွယ် PIED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုပြန်လည်ထူထောင်ရေး!
အသက် ၃၀ - ကျွန်ုပ်အစ်ကို၏မင်္ဂလာပွဲတွင်၎င်းကိုအကောင်းဆုံးလူသားအဖြစ်သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်
အသက် ၃၀ - ကျွန်ုပ်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ် ၂၀ ကို PIED ဖြင့်ဖြုန်းတီးခဲ့ဖွယ်ရှိသည်၊ သို့သော်ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်လိင်မှုဘ ၀ တွင်ရှိသည်!
အသက် ၃၀ - ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများကိုကန့်ကွက်ခြင်းမပြုတော့ပါ။ ငါကျပန်းလူများပိုမိုဖော်ရွေဖြစ်လာကြပါပြီ။ တိုးမြှင့်လှုံ့ဆျောမှု။
အသက် ၃၀ - ကျွန်ုပ်သည်ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး ကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ဇနီးသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများမှလှည့်စားသောကျွန်ုပ်၏မှားယွင်းသောစိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုပြည့်မှီစေရန်လိင်ဆိုင်ရာကိစ္စမဟုတ်တော့ပါ။
အသက် ၃၀ - မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊ စိတ်ငြိမ်သက်မှုနှင့်နံနက်သစ်တောများတိုးလာသည်
အသက် ၃၀ - အိမ်ထောင်သည် ၅ နှစ် - ED ၃.၅ နှစ် (Viagra ကိုတောင်မှချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိ) PIED သည်ယခုအခါပျောက်ကင်းသွားပြီ။
အသက် ၃၀ - အိမ်ထောင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဘဝတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုခံစားခဲ့ရသည်
အသက် ၃၀ - ကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများကိုသိသိသာသာလျော့ကျစေသည်။ အမျိုးသမီးတွေပတ် ၀ န်းကျင်မှာအဆင်မပြေမှုတွေပျောက်သွားတယ်။
အသက် ၃၀ - စိတ်ဓာတ်သည်လမ်းသာဖြစ်သည်။ စိတ်ကျရောဂါလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားသည်မဟုတ်, ကြီးမားသောတိုးတက်မှုပါ! ငါကပိုစကားနည်းပြီးယုံကြည်မှုလည်းရှိတယ်။
အသက် (၃၀) - ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်းမရှိပါ။ မှတ်ဉာဏ်တိုးတက်လာ စွမ်းအင်အဆင့်မြင့်သည် ဟာသဉာဏ်ကောင်းလာတယ်။ လူတွေပိုပြီးဆွဲဆောင်လာတယ်။
အသက် ၃၀ - အော်ဂဇင်အမြောက်အများပြီးနောက်၌ပင် ED သို့မဟုတ် Flatline မရှိတော့ပါ။ ငါပျောက်ကင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်
အသက် ၃၀ - Porn-Erectile Dysfunction သည်ယခုအချိန်တွင် ပို၍ ကောင်းမွန်ပြီးကျွန်ုပ်ပုံမှန်အားဖြင့်မရှိသောနေရာများတွင်အိုရှိသည်
အသက် ၃၀ - ကျွန်တော့်အတွက်ဂုဏ်ယူစွာဖြင့်ငွေကြေးတိုးတက်လာသည်
အသက် ၃၀ - ကျွန်တော့်ရဲ့အခက်အခဲကြောင့်သူတစ်ပါးရဲ့သက်သေအထောက်အထားကကျွန်တော့် ဦး ခေါင်းကိုပြောင်းလိုက်တယ်
အသက် ၃၀ - လိင်ကိစ္စပိုမိုအသည်းအသန်ခံစားလာရပြီး၊
အသက် ၃၀ - ၆၈ ရက်အကြာတွင်အောင်မြင်သောလိင် - PIED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်သည်။
အသက် ၃၀ - ယောက်ျားလေးများ (မိန်းကလေးများ) ကိုယုံကြည်ပါ၊ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုဖယ်ရှားခြင်းကသင့်အားပိုမိုယုံကြည်မှုရှိစေပြီးပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောချစ်မြတ်နိုးမှုကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်။
အသက် ၃၀ ကျော် - အိမ်ထောင်သည် - အောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံမှုသည်ကျောက်တုံးကဲ့သို့ခက်ခဲသည်။ ငါ 30 နှစ်အတွင်းဤသို့ပြုနိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ အခြားအကျိုးကျေးဇူးများ။
အသက် ၃၀ - ယခုငါသိပြီ။ PMO သည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏စိတ်ဆင်းရဲစရာဘဝ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။
အသက် ၃၀ - ၁၀ နှစ်ကျော်ကြိုးစားပြီးရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်…နောက်ဆုံးမှာငါ၌အလေ့အကျင့်မဟုတ်ဘဲစွဲလမ်းမှုရှိသည်ဟုသဘောပေါက်လာသည်
အသက် ၃၀ - ၁၅ နှစ်ပျက်စီးပြီးနောက် PIED ပျောက်သွားသည်၊ ၁၀ ကီလိုဂရမ်၊ ပိုတီထွင်သည်
အသက် ၃၀ - ကျွန်ုပ်ဘဝကိုပြန်ချင်သည်
အသက် ၃၁ - ၉၀ ရက် - ဘာအလုပ်လုပ်ခဲ့သလဲ၊
အသက် ၃၁ - ရက်ပေါင်း ၁၅၀ ညစ်ညမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာငါဆေးမထိုးဘဲနှစ်ခါလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။
အသက် (၃၁) နှစ် - အသွင်အပြင်ကောင်းမွန်ခြင်း (အသားအရေ၊ မျက်လုံးများ)၊ အိပ်စက်အနားယူခြင်း၊
(၃၁) နှစ် - ကျား၊ မ၊
(၃၁) နှစ် - ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်း၊ ယုံကြည်မှုပို။
(၃၁) နှစ် - ကြမ်းတမ်းသောသစ်သားနှင့်သစ်သားပြန်သည် ခံစားမှုနှင့်ရငျးနှီးမှုတို့သည်ယခင်ကထက်ပိုကောင်းသည်။ Fetishes မသွားဘဲအလွန်လျော့နည်းသွားသည်။
(၃၁) နှစ် - ငါအရမ်းပျော်တယ်။ အခုတော့ငါရည်းစားတစ် ဦး ဓာတ်ပုံကိုမြင်သောအခါရုံစိုက်ထူရ။
အသက် ၃၁ - ကျွန်ုပ်ရည်းစားနှင့်ဗီဒီယိုစကားပြောနေစဉ်အိပ်ရာထဲတွင်မဟုတ်ပါ
အသက် ၃၁ - ကျွန်ုပ်သည်အခြားသူတစ် ဦး ပါ။
အသက် ၃၁ - ကျွန်ုပ်ကိုယ်ခန္ဓာသည်အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းကိုနောက်တဖန်ဖြတ်သွားသကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်သည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင်ပြောင်းလဲနေပါသည်
အသက် ၃၁ နှစ် - အိမ်ထောင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ငြိမ်သက်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုခံစားခဲ့ရသည်။ မခံစားရဖူးသောအတွေ့အကြုံ (သို့) အနည်းဆုံးကြာမြင့်စွာကတည်းက
(၃၁) နှစ် - မွတ်စ်လင်မ် - ကျွန်ုပ်၏စိတ်သည်ဘဝနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊
အသက် ၃၁ - NoFap သည်ကျွန်ုပ်၏ ED ကိုဖျက်ဆီးပြီး ၄၈ ရက်အတွင်းကျွန်ုပ်၏လိင်ဘဝကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်
အသက် ၃၁ - ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဘဝ၊ အကန့်အသတ်မရှိသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စွမ်းအင်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်
အသက် ၃၁ နှစ် - PIED တော်တော်များများပျောက်ကင်းသွားသည်။ ငါက "ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ" ကိုမြှင့်တင်ခဲ့တယ်
(၃၁) နှစ် - Porn သွေးဆောင် ED နှင့်နှောင့်နှေးနေသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုပျောက်ကင်းသွားသည်
အသက် ၃၁ - ဘုတ်အဖွဲ့မှအသိအမှတ်ပြုဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာ ၀ န်ကြီးမှ ၀ င်ရောက်သော ED ပြန်လည်နာလန်ထူရေးဇာတ်လမ်း
(၃၁) နှစ် - Porn-ED ED: ငါ့ရည်းစားနဲ့လိင်ဆက်ဆံနေတဲ့အချိန်မှာငါ့ရဲ့စိုက်ထူမှုကတော်တော်လေးခက်ခဲသွားပြီ
အသက်အရွယ် 31 - DE အနာကိုငြိမ်းစေ။ သန့်ရှင်းသောဘုရား Shit, လိင်!
အသက် ၃၂ ​​နှစ်မှ ၃ နှစ်အကြာမှာငါပြန်တက်လာပြီး ၃ ရက်လောက်အကြာမှာလိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့တယ်။
အသက် ၃၂ ​​- တစ်လအကြာတွင်လိင်နှင့်ဘဝသည် ပို၍ ပျော်စရာကောင်းလာသည်
အသက် ၃၂ ​​- NoFap မတိုင်မီကကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ခက်ခဲစွာမရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါ။ ငါ့ဘဝလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီ
အသက် ၃၂ ​​- ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုဖြတ်ပြီးနောက် DE ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်
(၃၂) နှစ် - သန္ဓေတည်ခြင်းနှောင့်နှေးခြင်း၊
အသက် ၃၂ ​​- ကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်အပြင်ငါကိုယ်တိုင်လည်းပြောင်းလဲလာသည်
အသက် ၃၂ ​​- ကျွန်ုပ်အတွက်တော့၎င်းသည်ရာသက်ပန်စွဲလမ်းမှုဖြစ်သည်
အသက် ၃၂ ​​- မိန်းကလေးများအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ပရောပရည်လုပ်နေကြသည်။ ယခုတွင်ငါသည်ပေါ့ပေါ့လိင်ဆက်ဆံရန်ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုမိပြီဖြစ်သည်
အသက် ၃၂ ​​နှစ် - ပျော်ရွှင်သော၊ စိတ်လှုပ်ရှားနေသော်လည်း၊ အိုး PIED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ပြီးလိင်ဟာအံ့သြစရာကောင်းတယ်
အသက် ၃၂ ​​- အိမ်ထောင်ရေးနှောင်ကြိုးသည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်လုံးဝကွဲပြားကြောင်းကျွန်ုပ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်သည်
အသက် ၃၂ ​​- အင်တာဗျူးသူကိုမျက်စိဖြင့်ကြည့်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်အလုပ်ရခဲ့သည်
အသက် ၃၂ ​​- ကျွန်ုပ်၏ပင်ကိုစရိုက်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီ။ အမျိုးသမီးများနှင့်ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိစွာပြောဆိုခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအပေါ်ပိုမိုလေးစားခြင်း၊
အသက် (၃၂) နှစ် - ဒီဟာကလုံး ၀ ထိုက်တန်ပါတယ်
အသက် ၃၂ ​​- ဘဝသည်ရုတ်တရက်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်သိသာသောတိုးတက်မှုများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရသည်။
အသက် ၃၂ ​​- ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုသည်ကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းမှလာသည်
အသက် ၃၂ ​​- PIED သည်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ပုံရသည်။ ငါ့အလင်းလေဖြတ်နှင့်အတူ 32% စိုက်ထူ။ နံနက်သစ်သားပြန်လာသည်
အသက် ၃၂ ​​- ၆ လအကြာတွင်ရိုက်နှက်ခံရသည်။ ခက်ပြီးအားကောင်းတယ်
အသက် ၃၂ ​​နှစ် - PIED တိုးတက်မှုများ၊
အသက် ၃၂ ​​နှစ် - PIED - ရက်ပေါင်း ၄၀၉ ရက်နှင့်ကြာရှည်စွာပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးသည်။ ငါတပြင်လုံးကိုအချိန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။
(၃၂) နှစ် - PIED - ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသည်အတက်အကျများ၊ ငါပျောက်ကင်းသွားပြီဟုယနေ့ငါခံစားမိသည်
အသက် ၃၂ ​​နှစ် - PIED ပြင်းထန်သည့် ၁၂ နှစ်အတွက်ပြန်လည်နာလန်ထူလာနိုင်သည်။ ထိုစကားလုံးပျံ့နှံ့သွားသည်
(၃၂) နှစ် - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမအောင်မြင်သောရောဂါများပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်အား (၉) နှစ်တာကာလအားသူမအားတစ်ခါမျှမချစ်ခဲ့သည့်နည်းတူကျွန်ုပ်၏ရည်းစားကိုချစ်ခင်ခဲ့သည်
အသက် (၃၂) နှစ်အောင်မြင်မှု - အချိန်မတန်သေးသောသုက်လွှတ်မှုနှင့် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပြုပြင်သည်
အသက် ၃၂ ​​နှစ်၊ လက်ထပ် - ၈ လ CBT ကုထုံး၊ PIED ပိုကောင်းသည်၊ စွဲလမ်းမှုအန္တရာယ်ကိုသတိမပြုမိသူများအတွက်စိုးရိမ်သည်
အသက် ၃၃ ရက် - (ED) ရက်ပေါင်း ၆၀ - ကျွန်ုပ်၏လိင်ဘဝသည်သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားသည်
အသက် ၃၃ နှစ် - နှစ် ၂၀ အတွင်း sissy hypno hell ပါသောပြောင်းလဲမှု ၁.၅ နှစ်
အသက် (၃၃) နှစ်မှ (၂၀၀) အတွင်းရှိဗီဒီယိုနှင့်ရုပ်ပုံများ (ကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုစွန့်လွှတ်အနစ်နာခံ) SHIFT + DELETED
အသက် (၃၃) နှစ်မှ (၂၀) ​​နှစ်အတွင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် (၅) နှစ်သက်တမ်းရှိသည့် PIED ဆေးပြားများကပင်၎င်းကိုဆေးပြားများဖြင့်ပင်မရနိုင်တော့ပါ။ အခုတော့စန်း ... ချက်ချင်းခက်ခဲရော့ခ်!
အသက် ၃၃ - ၉၀ ရက်၊ P နှင့် M သည် ၉ နှစ်ကြာမှနုတ်ထွက်ရန်ကြိုးစားသည်။
အသက် ၃၃ - နဂါးတစ်ပတ်၌တစ်ပတ်ကျွန်ုပ်ကိုနိုးထစေခဲ့သည်
အသက် ၃၃ နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်နှစ်ဆယ်ကျော် / သုံးဆယ်အစောပိုင်း၌ PIED တီထွင်ခဲ့သည်
အသက် ၃၃ - နောက်ဆုံး ၉၀ ထိရောက်ပြီ။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အချက် ၁၁ ချက်ပါ
အသက် (၃၃) - သူစိမ်းများနှင့် PIED များနှင့်လူရှုပ်သည့်အစည်းအဝေးများမှသည်ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအထိဖြစ်သည်
အသက် (၃၃) နှစ် - ကျွန်ုပ်မည်မျှအသက်ရှင်နေထိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မပြောနိုင်ပါ
အသက် ၃၃ နှစ် - ကျွန်ုပ်သည် PIED ၁၂ နှစ် (အမျိုးသမီးများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောအခါအကြွင်းမဲ့သက်မဲ့ဒစ်)
အသက် (၃၃) - လှပသောအမျိုးသမီးများအားလူသားများအဖြစ်ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ရသည်။ ငါအောင်မြင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုစတင်ငွေရှာ။ များစွာသောအခြားအကျိုးကျေးဇူးများ။
အသက် ၃၃ နှစ် - ငါစိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှုကင်းမဲ့ခြင်း၊ အဲဒါကကျွန်မရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုထိခိုက်ခဲ့တယ်
အသက် (၃၃) နှစ် - လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ရေချိုးကန်အတွင်း၌အဝတ်လျှော်နေသည်
အသက် ၃၃ နှစ် - အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်သင်ယူနိုင်စွမ်းတိုးတက်လာခြင်း၊ စိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းလာခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏အတွင်းစိတ်အခြေအနေကိုပိုမိုသိရှိလာခြင်း။ တိုးတက်လာသောအလုပ်ကျင့်ဝတ်
(၃၃) နှစ် - ဒီတစ်ခါတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။
(၃၃) နှစ် - ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ကူးစိတ်သန်းအသစ်ကို PMO မရှိသည့်နောက်မှစတင်ခဲ့သည်
အသက် ၃၃ နှစ် - PIED ကိုဒုတိယအကြိမ်ကုသပေးခဲ့သည်။
အသက် ၃၃ နှစ် - PIED ကုသခြင်း - ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရှင်ကိုကျန်းမာသန်စွမ်းမှု၊
(၃၃) နှစ် - PIED၊ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြားပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း၊
အသက် (၃၃) နှစ် - Porn သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်ကိုပျက်စီးစေပြီးကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်
အသက် (၃၃) နှစ် - ကျွန်ုပ်ရုတ်တရက်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည့်အနာဂတ်တစ်ခုရလာသည်
(၃၃) နှစ် - အကျိုးကျေးဇူးများသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းပြီးပြည်တွင်းရေးပိုမိုများပြားလာသည်
အသက် (၃၃) နှစ် - အဓိကအကျိုးကျေးဇူးမှာအချိန်ဆွဲမှုနည်းသည်။ ငါလပေါင်းများစွာအဘို့အချွတ်ခဲ့ကြီးမားတဲ့အိမ်မှာစီမံကိန်းကိုပြီးစီးခဲ့သည်။
(၃၃) နှစ် - ဒီဆုဟာလှပတဲ့လိင်မှုကိစ္စဖြစ်ပြီးဝေမျှနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်လိုအပ်ချက်မှအပိုဆုတစ်ခုသို့ပြောင်းသည်
အသက် ၃၃ နှစ် - အိမ်ထောင်ပြုသည် - ကျွန်ုပ်သည်ပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဝါသနာတွေ၊ လေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာပျော်ရွင်မှုရတယ်။ စိတ်ကရှင်းပါတယ်
(၃၃) နှစ် - ငါနှစ်များအတွင်းခံစားခဲ့ရသည်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်
အသက် ၃၄ နှစ်မှ ၁ နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်ကျွန်ုပ်သည် ၁၁ နှစ်ကြာလက်ထပ်ခဲ့သည့် ၁၁ နှစ်ကြာလက်ထပ်ပွဲများထက်ယခုပိုမိုနီးကပ်လာပြီဖြစ်သည်။
အသက် ၃၄ - ၁၃၂ ရက် - အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလေဆာအာရုံ၊ စွမ်းအင်၊ ဆွဲဆောင်မှု၊ ယုံကြည်မှု…သူစိမ်းများပင်ချဉ်း ကပ်၍ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်လိုသည်။
(၃၄) နှစ် - နောက်ဆုံးတော့ငါအရမ်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ပါ။
အသက် ၃၄ - ၉၄ ရက်၊ လိင် (DE) ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်မပြီးနိုင်ခြင်းကိုပျောက်ကင်းစေသည်
အသက် 34 - DE, ED ။ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်စွဲစွဲလမ်းမှုကြောင့်လိင်ဖျော်ဖြေနိုင်မှုစွမ်းရည်ကျဆင်းခဲ့သည်။ Rectified!
(၃၄) နှစ် - ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ပြီးရှင်သန်နိုင်တယ်။ ငါ့အတွက်တော့အဲဒါထက်မကကြီးဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုငါအဲဒါကိုမျှဝေလို့ရတယ်။
အသက် (၃၄) နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်ထိတ်လန့်ခြင်းမရှိတော့ပါ။ စိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းခြင်း။ စိတ်ကျရောဂါနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနီးပါးသွားပြီ။ အစားအစာကပိုအရသာရှိတယ်။ လိင်အံ့သြဖွယ်ခံစားရသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောမိန်းမတို့အားကြည့်ရှုရန်စတင်။
အသက် (၃၄) နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်တစ်နှစ်ကျော်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမင်းအတွက်သတင်းတပုဒ်ရှိတယ်။ မင်းခရီးက P ကိုမဖြုတ်နဲ့
အသက် ၃၄ - နောက်ဆုံးမှာငါဖြစ်ချင်တဲ့လူဖြစ်လာတယ် - porn-induced ED success
အသက် ၃၄ - ငါ ၁၉ ရက်ကတည်းက PIED ရခဲ့တယ်၊ ရက်ပေါင်း ၄၀၀ ငါလိင်ဆက်ဆံလို့မရဘူးညစ်ညမ်းတယ်
အသက် (၃၄) နှစ် - စိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းမှု။ သာ။ ကြီးမြတ်ယုံကြည်မှုပိုကောင်းတဲ့စကားပြောဆိုမှု။ စိတ်ထဲတွင်အသွားအလာနည်းသည် ပိုပြီးငါ့ဇနီးသတိပြုမိ!
အသက် (၃၄) နှစ် - အမျိုးသမီးများအားမဖော်ပြခြင်း YouTube / သတင်းဆိုဒ်များအတွက်အချိန်နည်းသည်။ ဒီထက်ငေါ့နှင့်ကဲ့ရဲ့။
(၃၄) နှစ် - ယခုဥမင်၏အဆုံး၌အလင်းကိုမြင်ရလျှင်ဤစွဲလမ်းမှုသည်မည်မျှမှောင်မိုက်နေသည်ကိုတွေ့ရခြင်းသည်အံ့သြစရာဖြစ်သည်
အသက် ၃၄ နှစ် - PMO အခမဲ့ - အလွန်အမင်းစိတ်ဓာတ်ကျပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၊
အသက် ၃၄ နှစ် - PIED ကိုကုသပေးခြင်း - vanilla porn မှ femdom & sissification porn သို့မြင့်တက်သွားခြင်း၊ ၎င်းသည်သာမန်လိင်မှစိုက်ထူခြင်းသို့မဟုတ်ကျေနပ်မှုရရန်မစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။
အသက် (၃၄) နှစ် - PIED သည်လျင်မြန်စွာကုသနိုင်သည်
(၃၄) နှစ် - Porn - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု - မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးနှင့်အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးအော်ဂဇင်
(၃၄) နှစ် - လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများသည်လအတန်ကြာသွားပြီဖြစ်သည်။ porn တိုက်တွန်းမှုများသွားပြီ; မင်းသမီး IRL ထွက်စစ်ဆေးနေ
အသက် ၃၅ - ၁ နှစ်။ ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်ကျွန်ုပ်ပြုခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်နှင့်အခြားအခွင့်အရေးရလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ခဲ့ပါ
အသက် (၃၅) နှစ် - အိမ်တစ်လုံးကို ၀ ယ်ယူခဲ့၊ ကုဒ်သင်ရန်သင်ယူခဲ့သည်၊ လိင်ဘဝသည်အံ့သြစရာကောင်းသည် (PIED မရှိတော့)
အသက် ၃၅ - ED - သုညလိင်စိတ်နှင့် PIED မှရက် ၂၀၀ အတွင်း horny နှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းသည်
အသက် ၃၅ - ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကို ၁၀ နှစ်ကျော်ကြာတိုက်ဖျက်ခြင်း
အသက် ၃၅ - ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားကိုပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်း
အသက် ၃၅ နှစ် - ညစ်ညမ်းဆေးစွဲခြင်းကိုဖယ်ရှားပြီးကျွန်ုပ်၏ PIED ကိုကုသပေးခဲ့သည်
အသက် ၃၅ နှစ် - ငါ roller coaster တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ပြီး PE၊ ဆီးကျိတ်အနှိပ် - ယခုတွင်ကျွန်ုပ်၌တစ်ခုခုပြောင်းလဲသွားပြီ
အသက် ၃၅ နှစ် - ကျွန်ုပ်၏နိုးကြားမှုကို“ Great Porn Experiment” TEDx ဟောပြောချက်ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်
အသက် ၃၅ နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာသည်။ ယုံကြည်မှုရှိလာပြီ၊ ခံနိုင်ရည်ရှိလာပြီ၊ နာကျင်မှုနှင့်တောင့်တင်းမှုများလျော့နည်းသွားသည်
အသက် ၃၅ နှစ် - PIED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်စိတ်ဓါတ်များတိုးတက်လာသည်။
အသက် ၃၅ ရက် - ဒီရက် ၉၀ ခရီးဟာခက်ခဲပြီးခုန်ပေါက်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းအများကြီးလေ့လာခဲ့ပြီးကျွန်တော့်ဇနီးအကြောင်းအများကြီးသင်ယူခဲ့တယ်။
အသက် ၃၆ ရက်မှ ၅၁၅ ရက် - ကျွန်ုပ်သည်ယခုပင်ကျွန်ုပ်ကျန်းမာလာပြီ
အသက် ၃၆ - လွန်ခဲ့သောလကကျွန်ုပ်သည်လိင်ပျော်မှုနှင့်ရေရှည်စိုက်ထူခြင်းကိုထိန်းသိမ်းထားသည်
(၃၆) နှစ် - လိင်တူချစ်သူအမျိုးသား - ဘယ်တော့မှအောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံခြင်း (တစ်သက်တာလုံး) ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ ယခု: အောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ပါပြီ
အသက် ၃၆ နှစ် - စွမ်းအင်နှင့်စွမ်းအားကြီးမားသောသိုက်များ၊ SLAA တွင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး၊
အသက် ၃၆ - လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်းမကောင်းသော Porn-ED ရောဂါခံစားခဲ့ရဖူးသည်။ Thor Hammer ကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ထပ်မံ၍ ခံစားမိသည်။
အသက် ၃၆ - ကျွန်ုပ်တွင်ပိုမိုသောအတွေးအခေါ်များနှင့်အဖြစ်မှန်ကိုရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်သည်။ ပိုပြီးလူမှုရေး။ ငါကတခြားသူတွေကိုပိုပြီးဂရုတစိုက်နားထောင်တယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်
အသက် ၃၆ နှစ် - BDSM နှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာအကြောင်းရေးသားသူများစွာကိုမတွေ့ရသဖြင့်ကျွန်ုပ်အသေးစိတ်ဖော်ပြပါမည်
(၃၆) နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ အပေါ်ကျွန်ုပ်၏ရှုမြင်ပုံမှာဘယ်သောအခါမျှတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိပါ။ ငါနောက်ဆုံးအိပ်မက်ဆိုးကြီးကနေနိုးလာတာနဲ့တူတယ်
(၃၆) နှစ် - စိတ်ငြိမ်သက်မှု၊
အသက် ၃၆ နှစ် - PIED ပျောက်သွားပြီးလိင်ဘဝသည်သိသိသာသာတိုးတက်လာသည်
အသက် ၃၆ - ရက်ပေါင်း ၉၀ ပြန်လည်စတင်ခြင်း၏အတိုင်းအတာသည်မလုံလောက်ကြောင်းသဘောပေါက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
အသက် (၃၆) - ကုထုံးစတင်ခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်သည့်လမ်းညွှန်ကိုပေးနိုင်သောကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဦး နှင့်စကားပြောခြင်းသည်များစွာခြားနားခဲ့သည်။
(၃၇) နှစ် - ဦး နှောက်မြူမှုန်နီးပါး။ လျော့နည်းလူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ် & စိတ်ကျရောဂါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုတိုးတက်လာသည်။ ပိုကောင်းတဲ့စိုက်ထူ။ နည်းပါးလာစိတ်ဓာတ်အပြောင်းအလဲများ။
(၃၇) နှစ် - ED - ကျွန်တော့်လိင်ကိုသံသယ ၀ င်ခဲ့တယ်။ အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်
အသက် ၃၇ - ရိုးရှင်းသောစမ်းသပ်မှုမှသည်ဘဝပြောင်းလဲခြင်းအထိ - ကျွန်ုပ်၏ရလဒ်များကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သည်မှာသေချာသည်
အသက် (၃၇) နှစ် - ဆိုးရွားလှသောညစ်ညမ်းသောသွေးများဖြင့် ED ကို ၁၂ နှစ်ကြာခံစားခဲ့ရသည်
(၃၇) နှစ် - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမမှတ်မိဘူး
အသက် ၃၇ နှစ် - လိင်၊ ရင်းနှီးမှု၊ ချစ်ခြင်း၊
အသက် ၃၇ နှစ် - စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကပိုပြီးကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။ ငါကပိုပြီးတည်ငြိမ်တဲ့ခင်ပွန်း & ဖခင်ပါ။
အသက် ၃၇ - ပြန်လည်ထူထောင်ရေး နေ့မှစ၍ ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးနေ့စွဲ
(၃၇) နှစ် - လိင်ဆက်ဆံမှုသည်ကျိန်းသေဖြစ်သည်။ ကြောင်းအလုံအလောက်အလေးပေးလို့မရပါဘူး!
အသက် (၃၇) နှစ် - ကျွန်ုပ်တို့သည်လင်ယောက်ျားများနှင့်ဇနီးတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းမှအခန်းဖော်များနှင့်တူသည်ဟုခံစားခဲ့ရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်များကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မခွဲနိုင်အောင်တားဆီးနိုင်ခဲ့သည်
အသက် ၃၈ နှစ် - မလုံခြုံမှု၊ မနာလိုမှု၊ မကျေနပ်မှုနှင့်ဒေါသများ။ ။ Porn သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုနှင့်အိမ်ထောင်ရေးကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်။ PE သို့မဟုတ်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းမရှိတော့ပါ။
အသက် ၃၈ - ရက် ၁၂၀ အထက်နှင့်သင့်အတွက်ချောက်ကမ်းပါး ၁၀ ခု
အသက် ၃၈ နှစ် - ED - နှစ်များတွင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဆေးမသောက်ဘဲလိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးသည်
အသက် ၃၈ နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ PIED သည်ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ကိုမသိခဲ့ပါ
အသက် ၃၈ - အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသား - ကျွန်ုပ်ဇနီးနှင့်ပြန်လည်ချစ်ခင်ခဲ့သည်။ ငါကလူကြီးလူကောင်းမဟုတ်၊ ဆာလောင်နေတဲ့ခွေးတစ်ကောင်မဟုတ်ဘူး
အသက် ၃၈ နှစ် - ကျွန်ုပ်၏တိကျခိုင်မာသည့်လေ့ကျင့်မှုကအဖျက်စွမ်းအားကိုလျော့နည်းစေသည်
အသက် ၃၈ နှစ် - sissy မဟုတ်ဘူး
အသက် ၃၈ နှစ် - PIED - ၉ လမလိင်အင်္ဂါမတည့်တာ၊ လိင်တံကိုထိတွေ့ကိုင်တွယ်ခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုတကယ်ခက်ခဲစေသည်။
(၃၈) နှစ် - PIED: အခုငါ့ခံစားချက်အားလုံးကိုခံစားရတယ်။ ငါအရမ်းထိတွေ့ရုံဖြင့်ဖွင့်ရ။ ဘဝ၌ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်များအတွက်ညဥ့်စိုက်ထူ။
အသက် ၃၉ - ED & DE သည်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုများ၊ နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ အရှုံးမပေးပါနဲ့။
အသက် ၃၉ နှစ် - ဘာဝနာသည်ကျွန်ုပ်အားအွန်လိုင်း chat + porn မှနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုမည်သို့ကူညီပေးခဲ့သနည်း
(၃၉) နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်ကော်ဖီနှင့်လက်သည်းကိုက်ခြင်းများကိုထပ်မံရပ်လိုက်သည်
အသက် ၃၉ နှစ် - ငါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊
အသက် ၃၉ နှစ် - စွမ်းအင်၊ ယုံကြည်မှု၊ အခက်အခဲနှင့်အဆင်မပြေမှုများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းတိုးလာသည်။ ဘဝ၌ဒါအထောက်အကူဖြစ်စေ။
အသက် ၃၉ - ကျွန်ုပ်၏အိမ်ထောင်ရေးသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုခိုင်မြဲသည်
အသက် ၃၉ နှစ် - လည်ပင်းတွင်ချိုသော၊ ပျင်းနေပြီးထူးဆန်းသောဖိအားများကျသောအခါကျွန်ုပ်၏အမှိုက်များကိုဖမ်းရန်လိုအပ်သည်ဟုမခံစားရတော့ပါ
အသက် ၃၉ နှစ် - Nofap ကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိကတည်းကကျွန်တော့်ရဲ့ hardmode အမျိုးမျိုးဟာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးခဲ့တာပါ။
(၃၉) နှစ် - လူမှုရေးအရပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိသူ။ တစ် ဦး ကအများကြီးလျော့နည်းစိုးရိမ်ပူပန်။ အများကြီးပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်နိုင်။ ပိုကောင်းအိပ်ပါ
အသက်အရွယ် 39 - အရသာပြောင်းလဲနေတဲ့မိန်းမတို့အားတွေအများကြီး Talking
အသက် (၄၀) မှ (၁) နှစ်အတွင်းအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်အရင်းရှင်စနစ်ဖြင့်အတင်းအဓမ္မစေခိုင်းခံရခြင်း
(၄၀) နှစ် - သုက်လွှတ်မှုနှေးကွေးခြင်းနှင့် ED ပျောက်ကင်းသွားခြင်း။ ဒီဟာကိုသင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှမစဉ်းစားပါနဲ့။
အသက် ၄၀ - ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုမှသည်စိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုပိုမိုခံစားခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုမိုရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်
အသက် ၄၀ - ရက်ပေါင်း ၉၀ ထိနှိပ်ပါ။ အမှားမရှိဘူး Nofap အလုပ်လုပ်သည်
အသက် ၄၀ - လူတစ်ယောက်ရဲ့အလှအပ၊ အထိခိုက်မခံတဲ့၊
အသက် ၄၀ - ကျွန်ုပ်တွင်စိုးရိမ်ခြင်း၊ ယခုတွင်အခြားသူများအတွက်ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်သည်။ ငါ Self- ပွညျ့စုံတွေ့ပြီ
အသက် ၄၀-၁၈၅ ရက်များတွင် ED ကိုဤနေရာတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်
အသက် ၄၀ - စိတ်ဖိစီးမှုမရှိ၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ၊ ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်နိုင်ခြင်း၊ အလုပ်ခွင်တွင်လူတို့သည်ကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်စုရုံးကြသည်။
အသက် ၄၀ - Porn သွေးဆောင် ED: ၇ လအကြာတွင်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာသည်
အသက် ၄၀ - ကျွန်ုပ်ဇနီးနှင့်ဆက်ဆံရေးသိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့် ED ကုစားနေပါတယ် ပို၍ ငြိမ်းချမ်းသော၊
အသက် ၄၀ - ကျွန်ုပ်စောင့်ဆိုင်းနိုင်ပြီးတည်မြဲနိုင်သည်
အသက် ၄၁ မှ ၆ လအထိလိင်မှုကိစ္စမှရှောင်ရှားရန်
အသက် ၄၁ - ရက် ၉၀ - စစ်မှန်သောဘဝအတွေ့အကြုံများသည်ဖန်သားပြင်အခြေခံစိတ်ကူးယဉ်မှုများထက်ပိုမိုတန်ဖိုးရှိပြီးမှတ်မိလွယ်သည်။ ငါစစ်မှန်တဲ့ဘဝအမျိုးသမီးများပိုမိုဆွဲဆောင်ခံစားရ!
အသက် ၄၁ - ကျွန်ုပ်တစ်ချိန်ကလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုသည်အလွန်ကောင်းသည်
အသက် (၄၁) နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်ကျွန်ုပ်သည် ပိုမို၍ ပွင့်လင်းရိုးသားသောဆက်ဆံရေးရှိကြသည်
အသက် ၄၁ နှစ် - ၁ နှစ် - အာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှုအားလုံးနီးပါးကိုဖယ်ရှားပေးခြင်း၊
အသက် ၄၁ - အခြားယောက်ျားလေးများကကျွန်ုပ်၏တေးဂီတအဆင့်များနှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရသောအခါငါ့ကိုမကြောက်တော့ပါ
အသက် ၄၂ နှစ် - PIED ပျောက်သွားပြီ ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသော၊
အသက် ၄၃ - ၈ လအကြာကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသေကြောင်းကြံရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ သေနတ်သည်ကျွန်ုပ်၏လက်တွင်ရှိနေပြီးတင်ဆောင်ထားသည်။
အသက် ၄၃ နှစ် - စွဲစွဲလမ်းမှုကိုကျွန်ုပ်တီထွင်ခဲ့သည်ဟုထင်ခဲ့ဖူးသော်လည်းယခုတွင်လိင်လုပ်ငန်းသည်၎င်းနှင့်သဘောမတူသူများကိုတိုက်ခိုက်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်
အသက် ၄၃ နှစ် - အိမ်ထောင်သည် - ပဟေsolိဖြေရှင်းပြီးပြီ။ Google 'Karezza'
အသက် ၄၃ နှစ် - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကမ္ဘာနှင့်စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးများအတွက်ဖွင့်ပါ
အသက် ၄၃ နှစ် - PIED ပျောက်သွားပြီးကျွန်တော့်ဇနီးကလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ကျွန်တော်ကပြန်လာပြီ!
အသက် ၄၃ နှစ် - PIED နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်သည် SO နှင့်အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သော်လည်း O. မဟုတ်ခဲ့ပါ။
အသက် ၄၃ နှစ် - ပွင့်လင်းအဆင့် ၆၀ နှင့်အထက်တွင်ပြုလုပ်သောစာအုပ် ၆ အုပ်ထုတ်ဝေသည်၊ သီချင်း ၁၀ ပုဒ်သီချင်းတစ်ပုဒ်၊ ၁၀၀ ပေါင်ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာသင်တန်းဆရာဖြစ်လာခဲ့သည်။
အသက် ၄၄ - ရက် ၉၀ ရက် - ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊ လိင်ကျန်းမာရေးနှင့်အမျိုးသမီးများအားလိုက်လံဖမ်းဆီးရန်порноသည်အဘယ်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးသည်ကိုငါသိ၏။
အသက် ၄၄ နှစ် - HOCD ရှိခဲ့လျှင်ယခုတွင်ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်
အသက် (၄၄) နှစ် - ကျွန်ုပ်သည် (၂ နှစ်ခန့်) အပြာရုပ်ပုံမှထွက်ပြီးကတည်းကအကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိခဲ့သည်။
အသက် ၄၅ - ED: ၃၀ နှစ်နေ့စဉ် porn အသုံးပြုမှု၊ နေ့ ၁၀၆ တွင်အောင်မြင်သည်
(၄၅) နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဆိုးရွားဆုံးသောစွဲလမ်းသူထံမှရက် ၉၀ အတွင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကိုမည်သို့သွားခဲ့သနည်း
အသက် ၄၅ နှစ် - ငါတောက်ပတဲ့သဘောထားနဲ့နိုးနေတယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းတွင်မီးပွားအသစ်တစ်ခုရှိသေးသည်။
အသက် ၄၅ နှစ် - အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံဆဲဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ် ပို၍ ပျော်မွေ့သည်။ ကျွန်ုပ်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားသည်။ နှင့်ငါ့ဇနီး။
အသက် ၄၅ နှစ် - သို့ဖြစ်ရာပြောင်းလဲရန်နှင့်ထွက်ခွာရန်အချိန်ကျပြီ။ ဒီတော့အပြင်ကိုထွက်သွားပါ၊ မျက်နှာပြင်နောက်မှာအချိန်ဖြုန်းနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
အသက် ၄၅ နှစ်ရှိပြီ၊ အိမ်ထောင်ကျသည်။ ငါ့ရဲ့ libido လိင်စိတ်ကိုဖောင်းကြွနေစေတယ်
အသက် ၄၇ - 'သင် ၁၀၀ ရာနှုန်းပြည့်ကတိကဝတ်ပြုမယ်ဆိုရင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအောင်မြင်မှု ၁၀၀% အာမခံချက်ရှိသည်'
အသက် ၄၇ နှစ် - ငါ porn ကငါ့ရဲ့စစ်မှန်သောလိင်ဘဝကိုမလွှမ်းမိုးဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ် ငါနုတ်ထွက်ပြီးကတည်းကဒီဟာမမှန်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။
အသက် ၄၇ - တိုက်တွန်းမှုသည်ယာယီဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်ပါ (chat app များသည်ကျွန်ုပ်၏စိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်)
(၄၈) နှစ် - (၁၆) နှစ်ကဲ့သို့နံနက်သစ်သား (ကျွန်ုပ်သည်နှစ်များတွင်နံနက်သစ်ကိုမရရှိနိုင်ပါ) ။ စိုးရိမ်စိတ်အများကြီးနိမ့်သည်။ ငါမှာထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရောက်နေပြီ dystonia syndrome ရောဂါလည်းရှိတယ်။
အသက် ၄၉ - ရက် ၃၀၀ - အကျိုးခံစားခွင့်များစွာ။ ကျွန်တော့်ကိစ္စက ၂၂ နှစ် PMO ပဲ
အသက် ၄၉ ရက် - ၉၀ ရက် - ငါဟာယောက်ျားတစ်ယောက်၊ ခင်ပွန်းတစ်ယောက်၊
အသက် ၄၉ နှစ် - NoFap သည် PIED ကိုကုသပေးသည်။ ထုတ်ယူသည့်နေ့မှ ၃၇ ရက်အထိသက်သာသည်
အသက် ၅၁ - ကျွန်ုပ်တွင်စွဲလမ်းသောအခါမလုပ်ခဲ့သောအရာများကိုလုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၌အချိန်၊ ခွန်အားနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများရှိသည်
အသက် ၅၃ နှစ် - ယုံကြည်မှုပိုရှိခြင်း ပိုမိုအာရုံစူးစိုက်မှု။ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအသံ။ စိုးရိမ်စိတ်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ ငါအသက်ငယ်တယ်
အသက် ၅၄ နှစ် - အေးဆေးတည်ငြိမ်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှုပိုကောင်းတဲ့ခံစားချက်၊
(၅၅) နှစ် - လိင်မှုကိစ္စတွင်အမျိုးသမီးများအားကန့်ကွက်ကြောင်းသတိပြုမိသည်
အသက်အရွယ် 55 - နောက်ဆုံးအနေနဲ့အကြိုးခံစားခှငျ့ကိုမြင်လျှင်
အသက် ၅၆ - ကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်ပြသခြင်းဇာတ်လမ်း - ၉၅ ရက်ညနေခင်းတွင်ပိုမိုတောက်ပသောဘဝသို့အခမဲ့ဖြစ်သည်
အသက် ၅၇ နှစ် - ယုံကြည်မှုပိုရှိ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအာရုံ၊ စွမ်းအင်၊ မိမိကိုယ်ကိုလက်ခံခြင်း၊
အသက်အရွယ် 57 - လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်ဆင်း, ဇနီးနှင့်အတူကြားဆက်ဆံရေးပိုမိုနီးကပ်စွာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်း
အသက် ၆၀ - ယခုကျွန်ုပ်၏ဇနီးဟောင်းအားကျွန်ုပ်ဘ ၀ တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကျွန်ုပ်စတင်ခဲ့သည်
အသက် ၆၀ နှစ် - ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ပုံမပေါက်ဘဲမနေနိုင်ဘူး။ အနည်းဆုံးနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ငါလိင်ကြင်ဖော်ဘက်မှာအပြင်းအထန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။
အသက် (၆၁) နှစ် - ငါမနက်ခင်းထင်းခွေပြီးငါ့ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံနိုင်ပြီ
အသက် ၆၂ - ငါနိုးဖို့စိတ်ကူးယဉ်နဲ့ဆေးပြားတွေသုံးစရာမလိုတော့ဘူး
အသက် ၆၂ နှစ် - ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်ရင်းနှီးမှုပိုကောင်းလာခဲ့သည်။ ငါမျက်စိထဲမှာအမျိုးသမီးတွေကြည့်ရှုနိုင်ပါ၏, သူတို့ကိုတက်နှင့်ဆင်းစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်ရန်မလိုအပ်။
(၆၃) နှစ် - အသစ်သောအရာသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွင်ပျော့ပျောင်းခြင်း၏အတွေ့အကြုံဖြစ်သည်
လူအားလုံးသည်သူတို့၏ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲရန် nofap ကိုကြိုးစားသင့်သည်။ ငါ့စည်းစိမ်သည်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသည်
ရက်ပေါင်း ၅၀၀ နီးပါး -“ စူပါပါဝါအကျိုးကျေးဇူးများ”
ရက်ပေါင်း ၆၀ နီးပါး - သက်သာခွင့်များ။ NoFap ကတကယ်ပဲ!
ငါ M ကိုလိုချင်သောကြောင့်ငါ P ကိုကြည့်ခဲ့တယ်ထင်အမြဲတမ်း, ဒါပေမယ့် ...
အံ့သြဖွယ်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်, အပြာ-ခါးပတ်, ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေစာတမ်းများ, မြင့်သောဂုဏ်ထူးတွေနဲ့ဘွဲ့ရ
စိုးရိမ်ပူပန်မှုအကြီးအကျယ်လျှော့ချ, အလေးချိန်ပုံမှန်, ဟာသ Sense သည်
စိုးရိမ်စိတ်များပျောက်ကွယ်သွားပြီး၊ ပုံမှန်မိန်းကလေးများကိုထပ်မံဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်၊ ပေါင် ၂၀ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်
စိုးရိမ်စိတ်အဆင့်ဆင့်အများကြီးနိမ့်။ ငါရှင်းလင်းစွာစဉ်းစားနိုင်ပါ။ တဖန်ငါဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းလည်းခံစားငါနှင့်ငါတစ်ချိန်ကခဲ့လူတစ်ဦးမှပြန်လာပါ၏။
ဒီပုဒ်မအသစ်အတွက်ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးတန်းစီကြိုးစားနေသူမည်သူမဆိုငါ NoFap အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုဖို့ဒီမှာပါ။
ရက်ပေါင်း ၉၀ မှာငါမလုံလောက်နိုင်တဲ့အရာအချို့။
နေ့ ၉၀ မှာငါဟာပိုးအိမ်ကနေထွက်လာပြီလို့ခံစားရတယ်၊ ငါ့ဘဝမှာအများကြီးပိုကောင်းတဲ့နေရာမှာရိုးရိုးသားသားပဲ။
အခြေခံအားဖြင့်တော့ငါ့ ဦး နှောက်ဟာပုံမှန်လည်ပတ်နေတယ်
ကြှနျတေျာ့အနာရောဂါငြိမ်းစရာခရီးအပေါ်အချို့သောစိတ်ကူးတိုးတက်မှုအောင်ခဲ့ပြီ။ PIED လုံးဝပျောက်ကင်းအောင်ကုသနှင့်လိင်အလွန်ပျော်စရာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်မစတင်ခင်မှာငါအသုံးမကျသော, ရှက်ခဲ့တယ်, ငါကအရမ်းဆွဲဆောင်မှုအဖြစ်ရှုမြင်ဘယ်တော့မှခဲ့သည်။
NoFap မီ, ငါ 21 တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟောင်းနမ်း-လျော့နည်းကညာ, သူ၏အသက်တာနှင့်အတူအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုမသိမ
ငါနေ့တိုင်း porn လောင်ဖို့အသုံးပြုသည့်အခါမီ, ငါဒီတော့ပင်ပန်းခြင်းနှင့် unmotivated ဖြစ်ခဲ့သည်။
မီ, ငါ Instagram ကိုပေါ်မှာဤမိန်းကလေးရဲ့ဓါတ်ပုံ FAP ရန်အသုံးပြု
ကြှနျတေျာ့အသက်အရွယ်န်းကျင်မိန်းကလေးအတော်များများ Befriended နှင့်နောက်ဆုံးတွင်သောစစ်မှန်တဲ့အမြင်ပွနျလညျထူထောငျ: မိန်းကလေးများကလူဖြစ်ကြပြီးမဟုတ်တ္ထု
alpha ဖြစ်ခြင်းလူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ အခြားသူများကိုလေးစားပါ။
NoFap 90 ရက်အကြာတွင်အကျိုးခံစားခွင့်များ
အကျိုးကျေးဇူးများ 100% အစစ်အမှန်နှင့်မရလဒ်များအရအိပ်ယာဖြစ်ကြသည်။ ကျေးဇူးပြု။ ဖတ်ပါ။
ငါ့ဇနီးနှင့်အတူအစဉ်အဆက်အကောင်းဆုံးလိင်။ ငါအရင်က PIED အနည်းငယ်ရှိခဲ့ပေမယ့်အခုတော့ဘာပြproblemနာမှမရှိဘူး။
ငါ့အိမ်ထောင်အတွက်အကောင်းဆုံးအရာ။ ကျနော်တို့4နှစ်အတွင်းစစ်တိုက်ကြပြီမဟုတ်။
ပိုကောင်းသောဆက်သွယ်မှု, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု - ပိုပြီးရဲရင့်
ကွာတိုကျတှနျးထားသ FAP ယောက်ျားလေးများ။ ယောက်ျားပစ္စည်းပစ္စယအမှုကိုပြုရရန်ရမ္မက်ကိုသုံးပါ!
= ပြန်ဖြစ်နှင့်ပြင်းထန်သော Brainfog = သွားကြောင်း, Shitty စိတ်ဓါတ်များ = သွားပြီ, စည်းကမ်း = ဝယ်ယူ, လိင်ဘဝနောက်တဖန်
porn မှထွက်ခွာခြင်းနှင့်လိင်စွမ်းအင်ကိုထိန်းချုပ်ရန်လေ့လာခြင်းအကြောင်းအိန္ဒိယမှတောက်ပသော Hilary ဗီဒီယို
“ dopamine fast” သည်သင်၏ပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုအစပြုနိုင်သလား။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကလူကိုကျား၊ (r / Pornfree)
porn သည် morph လိင်အရသာကို သုံး၍ ရနိုင်သလော၊
ဘယ်တော့မှမပြုမီနဲ့တူရှင်းလင်းပြတ်သား။ ငါအကြိမ်အများဆုံးစူပါအေးဆေးတည်ငြိမ်ဖြစ်၏။ အမျိုးသမီးများဆွဲဆောင်မှုခေါင်မိုးကျော်ဖြစ်ပါတယ်။
2 နှစ်နီးပါးအဘို့အညစ်ညမ်း၏သန့်ရှင်းရေး။ ပျော်ရွှင်သောခင်ပွန်းဟောင်းနှင့်ယခင်ကျွန်မှအကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံဥာဏ်များ
အာရုံစူးစိုက်မှုသာ။ ကောင်း၏။ စွမ်းအင်ပိုများလာတယ် - အခုငါကနေ့ကိုအောင်နိုင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ ယုံကြည်မှု - ဒီဟာကကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတဲ့အကြီးမားဆုံးအကျိုးကျေးဇူးပဲ။
စိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ စကားပြောဆိုမှုပိုမိုလွယ်ကူခြင်း၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်များ
ယုံကြည်မှု၊ ချုပ်တည်းမှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စွမ်းအင်တို့သည်မြင့်တက်လာသည်
သုတ်ရည်ကို ojas အဖြစ်ပြောင်းခြင်း - တိုက်တွန်းခြင်းနှင့်ဒေါသထွက်ခြင်း၊ အိပ်စက်ခြင်း၊
ထိတ်လန့်လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ် ... သွားပြီ
လက်ဝါးကပ်တိုင်တစ်သင်းလုံးကကစားသမား, အရှက်, cuckolding, အမျိုးသမီး, emasculation ... GONE!
ပျောက်ကင်းအောင်ကုသပြီးပြီ။ ကောင်တာပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း။ ၁၃၇ ရက်အကြာမှာပြန်ရသွားသည်။
အလုပ်တစ်ခုရတယ်, ယခုချိန်းတွေ့, ဦးနှောက်မြူသွားပြီပိုပြီးယုံကြည်မှု, ပိုကောင်းတဲ့ဆံပင်
Day 100 - မိန်းကလေးများနှင့်စကားပြောခြင်းကိုနှစ်သက်ပါ၊ လူမှုရေးပိုလုပ်ပါ၊ လူများကိုမျက်စိ၌ကြည့်ပါ၊ မိန်းကလေးများသည်ကျွန်ုပ်ကိုစစ်ဆေးသည်၊ ပိုမိုထူထပ်သောအသံ၊ အားကစားရုံ၌စွမ်းအင်များများ။
နေ့ 123 ။ နြူကလီးယားဘောလုံး။
Day 226 - မိန်းမတိုင်းကလှတယ်။
နေ့ ၃,၄၀၀ - ဤစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးမားသောကြောက်မက်ဖွယ်ရာကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်
နေ့ ၄၀ မှ ၆၀ ရက်သည်အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ အရင်ကထက်ဂစ်တာတီးမှုတ်ပါ။ ပေါင်းပင်ဖြတ်
နေ့ 50 နဲ့ကျွန်မအသက်ရှင်လျက်ခံစားရတယ်
Day 57 - အင်အားကြီးနိုင်ငံများလား။ (မွမ်းမံခြင်း - ရက် ၁၈၀)
Day 90 - နောက်ဆုံးတွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ပျောက်ကင်းသွားသော ED၊ ကောင်းသောအရာအတွက်ကစားခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးငါအမြဲတမ်းနေထိုင်လိုသောဘဝကိုစတင်ခဲ့သည်
DE နှင့် ED ရောဂါပျောက်ကင်းစေ - သင်ကိုယ်တိုင်မျက်နှာသာပေးခြင်းနှင့် porn ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ရပ်တန့်ပါစေ
DE နှင့်နွမ်းနယ်ခြင်းများ - ငါ့ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း
DE နှင့် PIED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ။ သင့်ရဲ့ default ကိုလိင်ပြောင်းရန်နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့ပြောင်းပါ
DE cured - လိင်နှင့်ပတ်သက်သောကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောယုံကြည်မှုများသည်ယခင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကြိုးပမ်းမှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည်
DE အစဉ်အဆက်, အကောင်းဆုံး orgasm တဦးကုသ
DE ကုသပေးခဲ့သည် အကြှနျုပျ၏ဒစ်ပြန်၎င်း၏ sensitivity ကိုရရှိခဲ့သည်။
DE သွားပြီ - အလွန်အမင်း kinky porn သည် sissy ၏နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်
DE သွားပြီ - ငါမှာ porn နဲ့ပြaနာမရှိဘူးထင်တယ်
စိတ်ရောဂါနှင့်နက်ရှိုင်းသောစိတ်ကျရောဂါဆက်ဆံယခုငါနောက်ကျောကိုငါ့ drive ကိုပြန်နှင့်လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုတယ်, ငါ့အရူးအမူးချိန်းတွေ့ငါ
နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ကြာပြီးနောက်တွင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုလျော့ပါးစေသည်။ အခြားအကျိုးကျေးဇူးများလည်း
ယုံကြည်မှု၏နက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်, အစွမ်းထက်, ကိုအခိုင်အမာအမျိုးအစား
နှောင့်နှေးသုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်း - ငါပြန်လည်ထူထောင်ရန်တစ်နှစ်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်
သုက်လွှတ်ခြင်းကို ၁၅ နှစ်ကြာပြီးရက်သတ္တပတ်များစွာကြာသည်။
နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုသည်ပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်ယခုအခါ ၁၀၀% သောညစ်ညမ်းသောအလုပ်များသေချာသည်
ရက် ၂၀ အကြာတွင်သုက်လွှတ်ခြင်းအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်း
Covid မှ လွဲ၍ သော်လည်းနေ့စဉ်အသုံးပြုမှုမှလျော့ကျသွားသည်
မင်းမှာ OCD သဘောထားတွေရှိလား။ တွဲဖက်မရှိဘူးလား
ညစ်ညမ်းနေ REM sleep နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်သလား Dopamine နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ။ ထစ်လွန်းသွားပြီ။
Dopamine desensitisation သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည် - ကျွန်ုပ်သည်လများစွာအတွင်းခံစားခဲ့ရသည်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
အသက် ၂၀ အရွယ် - ကျွန်ုပ်ဘ ၀ တွင် ပိုမို၍ အစွမ်းထက်သော၊
၂၀ နှစ်အစောပိုင်း - အရင်ကထက် ပို၍ ဖန်တီးမှုနှင့်မှုတ်သွင်းခံဖြစ်သည်
အစောပိုင်းအသက် ၃၀ - ပိုကောင်းသောအကောင်းမြင်မှု၊ စွမ်းအင်၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ စိတ်ရှည်မှု၊ ရည်မှန်းချက်၊ စိတ်အားထက်သန်မှု၊
အစောပိုင်းအသက် ၄၀ - ED သည်သွားပြီ၊
မျက်လုံးချင်းစေရန်ပိုမိုလွယ်ကူ, ငါပိုပြီးစိတ်ချလက်ချမပြောတတ်, ငါနှစ်များတွင်ခဲ့ပြီးပြီအကောင်းဆုံးအိပ်စက်ခြင်း, Motivation ခေါင်မိုးအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။
ED - ၆ လအစီရင်ခံစာ - ED မရှိတော့ပါ၊ မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ငါမင်္ဂလာပါ
ED - ကျွန်တော့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု၊
ED - YBOP ကကျွန်တော့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ ငါ့ဇနီးနှင့်အတူခက်ခဲနေဖို့နောက်ထပ်ပြproblemsနာများ
၈ လကြာ porn / orgasm မရရှိပြီးနောက် ED သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသီချင်းရေးသားခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
3 နှစ်ကြာ ED - လွန်ခဲ့သော ၇ လကကျွန်ုပ်သည် porn မှထွက်ခွာခဲ့ပြီးယခုတွင်ပြproblemနာမရှိဘဲစိုက်ထူခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်
ED, DE, ကျောရိုးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း - ကျွန်တော့်ရဲ့အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်း
ED: ပြင်းထန်သော PIED မှ ၁၀ နှစ်အထိနမ်းခြင်းမှနှိုးဆွခြင်းသို့ရောက်သည်
စိုက်ထူပြန်ဖြစ်ကြသည်။ PMO အလွန်အကျွံကြောင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်ခဲ့ရင်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်
vanilla စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမှ trans သို့ကူးခြင်း၊ sissy ပစ္စည်းတွေအထိတိုးပွားလာခြင်း - အခုဆိုရင်ငါဟာပိုပြီးယောက်ျားဆန်တယ်လို့ခံစားရတယ်။
တောင်မှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း reboot ငါ porn တှငျအမြိုးသမီးကိုတွေ့မြင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲ
အခြားအဆင့်တွင်သံလိုက်ဆွဲဆောင်မှုနှင့် exuberance Exuding
ငါ့အဖက်နဲ့အတူ Fantastic ရငျးနှီးအဖြစ်လိင်၏တိုးလာအကြိမ်ရေ။ သော်လည်းအကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုကိုယုံကြည်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ပိုမိုချိတ်ဆက်ပါ။ အမျိုးသမီးများအတွက်ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိခြင်း၊ အဓိပ္ပါယ်ရှိသောစီမံကိန်းများကိုစတင်ခဲ့သည်
စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ၊ ဆက်ဆံရေးပြabilityနာတွေ၊ အချိန်နောက်ကျခြင်း၊ ငါ့အနာဂတ်အတွက်ကြိုတင်စီစဉ်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်းနှင့်ဘဝ၏စိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ခြင်း။
အမျိုးသမီး - NoFap ညီအစ်မများ - ပြန်လည်နာလန်ထူခြင်းသည်ကြွက်တက်ခြင်းကိုပိုမိုဆိုးရွားစေပြီးအိမ်ထောင်ဖက်များသည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများထက်ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိနိုင်သည်
အမျိုးသမီး - လေးလညစ်ညမ်း - အသက် ၂၀ မှ ၃၆ အထိတစ်နေ့လျှင် ၄ ကြိမ်အထက်လိင်တူချစ်သူများကိုအစဉ်ကြည့်ရှုလေ့ရှိသည်
အမျိုးသမီး - ၄၁၂ ရက် - ပို၍ ယုံကြည်မှုပိုရှိခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးရှိခြင်း၊
အမျိုးသမီး - အသက် ၁၅ နှစ် - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးယူခဲ့တယ်။ ငါဆုံးရှုံးခဲ့ရသောအရာကိုပြန်ရရှိရန်စတင်ခဲ့တယ်
အမျိုးသမီး - အသက် ၁၆ နှစ်၊
အမျိုးသမီး - ၁၇ နှစ် - သူငယ်တန်းကတည်းကစပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးမူလတန်းကျောင်းကတည်းက porn ကိုသုံးခဲ့တယ်
အမျိုးသမီး - အသက် ၂၃: တစ်နှစ်မပြည့်စုံသောလိင်ဆက်ဆံမှုပြီးနောက်တွင်၊
အမျိုးသမီး - အသက် --၃၃ ~ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်နိုင်ပါပြီ။ porn fuck ဆိုတဲ့
အမျိုးသမီး - ငါငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှု။ စစ်မှန်သောဘဝဖြင့်ငြီးငွေ့စေပြီးစစ်မှန်သောအပျော်အပါးကိုထုံထိုင်းစေသည်
အမျိုးသမီး - ပိုမိုစိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ထိခိုက်လွယ်မှုရှိခြင်း၊ ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းခြင်း၊
အမျိုးသမီး - ကျွန်ုပ်၏စေ့စပ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ ပြီးစီးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုခိုင်မာစေပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်အားသူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပို၍ ပင်တိုးပွားစေခဲ့သည်။
အမျိုးသမီး - ကျွန်ုပ်ပါတနာနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ရက် ၃၀ ကျော်အကန့်အသတ်မရှိရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲစေခဲ့သည်
မိန်းမ - ကျွန်ုပ်၏လိင်အရသာပြောင်းလဲသွားပြီ၊ my arousal template တွင်အခြားအမျိုးသမီးများနာကျင်မှုဝေဒနာကိုကြည့်ခြင်းမပါဝင်တော့ပါ။
အမျိုးသမီး - Nofap ကကျွန်မကိုသည်းခံခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ နားလည်မှု၊ ကျေနပ်မှု၊ အားထုတ်မှု၊
မိန်းမ - ငါညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုမပိတ်ဘဲတကယ့်လိင်အရည်အသွေးတိုးတက်သည်
အမျိုးသမီး - ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြတ်ပါ၊
အမျိုးသမီးစွဲ - ဤဝေးဝေးလျှောက်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့သည်
အသက် ၁၉ နှစ် - အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ရက်စွဲတစ်ခုမှာမေးခဲ့တယ်။
ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေး - ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲလဲဆိုတာသတိမပြုမိခင်အထိညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ပုံတွေကတခြားသူတွေနဲ့ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး
အမျိုးသမီး၊ ၁၈ နှစ် - ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးနှစ်
Fetish, sadness: ငါပြောင်းလဲနိုင်ပြီဆိုတာအခုသိပြီ
အငတ်ဘေးများပျောက်ကွယ်သွားပြီ - နှစ်များစွာလိမ်လည်လှည့်ဖြားသော ၀ ါသနာမပါသောညစ်ညမ်းသော porn နှင့် hentai နှစ်များသည်ကျွန်ုပ်၏တင်းပလိတ်များနှင့်လွဲချော်သွားသည်။ ယခုတွင်ငါသည်ပျမ်းမျှအားကြည့်ရှုသူတစ် ဦး ဆွဲဆောင်မှုကိုရှာပါ
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ porn- သွေးဆောင် ED ရိုက်တယ်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ relapses ၏ 90 နှစ်ကြာနေ့က2hit
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ ကြိုးစားပြီးနောက်နေ့ ၉၀ သို့ရောက်ခဲ့သည်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ peeking နှင့် edging နုတ်ထွက်
နောက်ဆုံးတော့ငါ“ ကြိုးစားခြင်း” ကိုရပ်လိုက်ပြီးဘ ၀ အတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုဖြတ်ခဲ့တယ်
နောက်ဆုံးတော့! ငါ့သတို့သမီးနှင့်အတူလိင်။ 8 လအကြာတွင်ရောဂါလက္ခဏာများပျောက်ကင်းစေနိုင်သည်။ လက်အလုပ်များရပ်တန့်ခဲ့ရသည်။
nofap ရှာဖွေခြင်း, ငါ၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသက်တာ၏အကောင်းဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုခဲ့: အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်ကိုငြင်းပယ်မရနိုငျ
ငါ၏အ Dick ကိစ္စများ Fixed; အပျိုစင်ဘဝပျောက်
ရက်ပေါင်း ၂၂၀ အပြီးတွင် Flatline သည်အဆုံးသတ်သွားသည်။ ယခုတွင်ငါသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုကိုခံစားရတယ်
နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်သည် porn မပါဘဲအရှည်ဆုံး ၃ ပတ်ဖြစ်သည်။ ယခုငါတစ်နှစ်ပြီးပြီ။
နက်ရှိုင်းအသံ, တောက်ပမိန်းကလေးငယ်များ, မျက်လုံးပြောပြရန်ပိုမိုလွယ်ကူ, ငါ၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုတွေ့
ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံရန်ခက်ခဲခြင်းနှင့်စိုက်ထူခြင်းကိုမရပ်တန့်နိုင်သည့် ၂၁ နှစ်အရွယ်အပျိုစင်မှ
လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏6နှစ်ပေါင်း မှစ. ယုံကြည်မှုရယ်စရာနှင့်လူမှုရေးမှ
သူ၏အစွမ်းအစကိုဘယ်တော့မှမသိသောကောင်လေးတစ်ယောက်မှကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်မည်မျှကောင်းသောအရာနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ တွင်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုယခုသိပြီဖြစ်သည်။
တစ်ဦး PMO, ပေါင်းပင်, မူးယစ်ဆေးဝါး, စီးကရက်ထဲကနေရုံ4လအတွင်းစင်ကြယ်သူတစ်ဦးမှလိင်စှဲလမျးသူ paid
ပြည့်စုံသော PIED မှသည်ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအထိပြalmostနာမရှိသလောက်ဖြစ်သည်
ED အတွက်ခွဲစိတ်ကုသဖို့စဉ်းစားတာကနေငါ့ဘ ၀ ရဲ့အပြင်းထန်ဆုံးစိုက်ထူမှုအချို့ဆီသို့!
cringeingly ငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုထံမှပျြော overconfidence မှ
ED နှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေရန်ကြံစည်ခြင်းမှသည်၊ ကျွန်ုပ်၏စေ့စပ်ထားသူနှင့်အံ့သြဖွယ်လိင်ဆက်ဆံရန်ဖြစ်သည်
fetish porn နှင့်အထီးကျန် မှစ. နှစ်ရှည်လများအချိန်အရူးအမူးနှင့်အတူဆက်ဆံရေး
အင်တာနက်မတရား, တည်းသောအရှုံးသမားအသစ်အမြိုးသမီးမြားတှေ့ဆုံဖို့စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူရုန်းကန် မှစ. 3x ငွေကြေးနှင့်အသက်အဘို့အရှိခြင်းစိတ်အားထက်သန်မှုဝင်ငွေ။
အရှုံးသမားမှသည်စာအုပ်ရေးခြင်းမှစိတ်ဖိစီးမှုမရှိဘဲအလုပ် ၃ ခုကိုလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်သောဆွဲဆောင်မှုရှိသောမိန်းကလေး
သတ်သေ မှစ. တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို (12 ခြေလှမ်းများ) မှ
porn bro bro; ကြောင်း shit ငါ့အဘို့မဟုတ်ပါဘူး
ပိုမိုထိရောက်သောစိုက်ထူမှုများ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအာရုံစူးစိုက်မှု၊ အမျိုးသမီးများကကျွန်ုပ်အားသတိပြုမိလာသည်၊
အပြည့်အဝ PIED နှင့် PE ၏ပြန်လည်ကောင်းမွန်
လူ ၁၀၀ ရှေ့တွင်စင်မြင့်ထိတ်လန့်စရာမရှိသည့်မြင်ကွင်းကိုပြသခဲ့သည်
porn, ချစိုးရိမ်စိတ်, ဆုံးရှုံးခဲ့ရအပျိုစင်အပ်!
လိင်တူချစ်သူ - မနက်မှာထင်းထင်းနေပြီ၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကျဆင်းလာတယ်
လိင်တူချစ်သူ - ကောင်လေးမူးနေပြီ ... ဒါပေမယ့်ငါ porn မသုံးခဲ့ဘူး
လိင်တူချစ်သူ - ငါ့ကိုယ်ပြissuesနာများတော်တော်များများပျောက်ကွယ်သွားပြီ
လိင်တူချစ်သူ - PIED & DE လုံးဝသွားပြီ
လိင်တူချစ်သူအမျိုးသား - PIED ကိုငါ့ဘဝမှာပထမဆုံးအကြိမ်ကုသပေးခဲ့သည်။ ငါအရမ်းအသက်ရှင်လျက်ခံစားရတယ်။
လိင်တူချစ်သူလူကို PIED အကြောင်းကိုထုတ်ပြောတတ်
Girlfriend - PIED တိုးတက်မှုဖြစ်ပေမဲ့သူကငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိမ်ပြောတာကိုနာနေတုန်းပဲ
ဘုန်းကြီးသောစိုက်ထူ, ယုံကြည်မှု, စွမ်းအင်နဲ့ Self-ထိန်းချုပ်မှု
ညစ်ညမ်းတဲ့အခမဲ့သွားခြင်းဟာကျွန်တော့်ရဲ့ PIED ကိုကုသပေးတယ်
ငါ၏အ 90 porn-အခမဲ့ကာလ၏ကောင်းမကောင်းဆိုးကျိုးများ
ကောင်းသောအနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်သည်,6လအတွင်း NoFap နှင့် PornFree ။ အသကျရှငျဖြစ်ဖို့ဘာလှပသောအချိန်
ငါ့ရည်းစားနဲ့ကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေး၊ ကြောက်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်းမရှိ၊
စွမ်းအင်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် ပိုကောင်းတဲ့အိပ်စက်ခြင်း။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ စိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းခြင်း။ နှိုးဆော်ခံရဖို့ပိုမိုလွယ်ကူ။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှုပိုရှိခြင်း၊ မျက်လုံးချင်းဆုံခြင်း၊ အမျိုးသမီးများကိုချစ်မြတ်နိုးမှုလျော့နည်းလာခြင်း - ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများကိုလှည့်ပတ်မောင်းနှင်ရန်ရှိသည်ဟုမခံစားရပါ။
အခြားလူများဆီသို့ပိုမိုမြင့်မား Self-လေးစားမှု, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုနှင့်စာနာမှု
Trans-porn (၅၀ ကီလိုမီတာ + နောက်လိုက်များ) ကိုချိတ်ထားသည် PIED သည်နောက်ဆုံးတွင်ထောင့်ကိုလှည့်လိုက်သည်
ကျွန်ုပ်ရက်ပေါင်း ၉၀ ကိုဘယ်လိုပြီးစီးခဲ့သလဲ။ ရှည်လျားသောပို့စ်။ အဆုံး၌ငါ့အကြံပေးချက်များ။
ငါအပြည့်အဝလွညစ်ညမ်းဆေးစွဲထံမှ9ရက်သတ္တပတ်သန့်ရှင်းသောသို့သွားပုံကို
, NoFap မှာကြှနျတေျာ့အတှေ့အကွုံအောင်မြင်ဖို့လုပ်နည်း
ခင်ပွန်းသည် - ED မဟုတ်တော့ဘူး၊ ကောင်းတဲ့လိင်ဆက်ဆံမှု၊ ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုစုပ်ယူခြင်းမရှိတော့ဘူး
ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့မကြိုးစားခင် ၁၅ နှစ်လုံးလုံးလိင်အကျင့်ယိုယွင်းခဲ့တယ်
ငါလုံးဝ PIED ၏ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သာ. ကြီးမြတ်ယုံကြည်မှုနှင့်ငါ့အသက်ကိုရှည်ထုပ်နိုင်အောင်ပျော့ဖြစ်လာသည်။
ငါမတယောတစ်ခုခုဖြာ, ငါကပိုသတိပေးချက်ဖြစ်၏, စွမ်းအင်၏ယေဘုယျအားဖြင့်အပြည့်အဝဖြစ်၏။ ငါရှိနေခြင်းရှိသည်, ငါမျက်စိထဲမှာအမြိုးသမီးမြားကိုကွညျ့နိုငျသညျ, သူတို့အဖြစ်ကသူတို့ကိုရိပ်မိရ။
ငါအစဉ်အမြဲငါပါပြီအကောင်းဆုံးနေရာ၌ရှိပါ၏။ အကြှနျုပျ၏ကလေးဘဝအပြစ်ကင်းစင်တဖန်ငါအမှုအရာပျော်မွေ့, နောက်ကျောဖြစ်ပါတယ်။
ငါဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူး - လက်တွဲဖော်တစ်ယောက်ရပြီ၊ ကျောင်းသို့ပြန်သွားပါ၊ ပို၍ နည်းသောအိပ်စက်အနားယူပါ၊
ငါအစဉ်အမြဲငါဖြစ်ရပြီထင်သောငါ၏ကိုယ်ပိုင်အသားအရေအတွက်အများဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့်အတူပျော်ရွှင်အဆင်ပြေဖြစ်၏။ ခက် Rock ။
ငါဘယ်တော့မှလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးမထားဘူး။ အသားအရေအလင်းရောင်၊ ကြွက်သားထုတိုးပွားလာ; ငါတခြားသူတွေရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်အများကြီးအများကြီးဂရုမစိုက်
တကယ်တော့ယခုငါ၏အ SO နှင့်အတူလိင်ခံစားနိုငျ
ငါလူတွေရဲ့နာရီကိုနာရီပေါင်းများစွာကြည့်ပြီးစကားပြောနိုင်တယ်၊ စောစောကငါစက္ကန့် ၃၀ လောက်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ငါအခြေအနေမျိုးမှာပျော်တယ်
ငါတတ်နိုင်သမျှအမြဲပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, လိင်စဉ်အတွင်းအထွတ်အထိပ် (DE)
ငါ့ရည်းစားနဲ့ PMO အခမဲ့ဘဝနဲ့ကျွန်တော်မပျော်နိုင်တော့ဘူး - ငါတောင်မှ porn အကြောင်းတောင်မစဉ်းစားခဲ့ဘူး
ငါ porn မပါဘဲသုက်နိုင် .. ယနေ့သည်အထိ (DE) ဖြစ်ပါသည်
ကျွန်တော်လုပ်တာပါ။ ငါရက်ပေါင်း 90 ထိ, ငါ 90 ၌ငါ့အသက်တာ၌ငါ့အကောင်းဆုံးနေ့ရက်များအချို့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါမှာလည်းညစ်ညမ်းမှုမရှိတော့ဘူး၊ လူတွေအပေါ်အဆင်မပြေဘူး၊ MO ကပိုပြီးပျော်စရာကောင်းတယ်
ငါ fapping လက်လွတ်မထင်သော်လည်း, အကျိုးကျေးဇူးများလွန်းကောင်းသောများမှာ! ငါဒါအသက်ရှင်လျက်ခံစားရတယ်။
ငါ porn မှဘိန်းဖြူဖြောင့်ဖွင့်နှိုင်းယှဉ်တယ်ကဲ့သို့မြည်ချင်ကြပါဘူး: ငါဟောင်းတစ်ဦးဘိန်းဖြူစှဲလမျးသူရယ်နှင့် PMO ငါ့အဘို့ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။
ငါအရင်ကထက်အဆ 10000 ပိုကောင်းခံစားရတယ်။ ငါအများကြီးလူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းရှိသည်
ငါဟာ“ ငါ” ဆော့စ်ထဲနှစ်မြုပ်နေသလိုခံစားရတယ်၊ Covid ရဲ့ရူးသွပ်မှုနဲ့တောင်ကမ္ဘာကြီးဟာအံ့သြစရာကောင်းတယ်
ငါကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်။ ကျွန်ုပ်ဟာဘယ်သူ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပိုမိုခံစားလာရတယ်၊ ပိုပြီးယုံကြည်မှုပိုရှိလာတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိသူဖြစ်တယ်
ငါတစ်နေ့ပိုမိုပွညျ့စုံစများနှင့်ပျော်ရွှင်နေ့ကခံစားရသည်။ မှတ်ဉာဏ်တိုးတက်မှုများ။ ငါသည်ငါ၏မယားပဋိပက္ခလည်းမရှိသည့်အခါပိုပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာပိုကောင်းနှင့်ဆက်စပ်။
ငါမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့တယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ အခုငါ့ဘ ၀ တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားပြီ၊ ငါဖခင်တစ်ယောက်ဖြစ်တော့မယ်။
ငါနောက်ဆုံးတော့ 90 ရက်သို့ရောက်လေ၏။ ယခုမူကားငါ NoFap ထားခဲ့ပါ။
ငါနောက်ဆုံးတော့မဆို PIED မပါဘဲချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖန်ဆင်း
ငါယုံကြည်မှု, Self- အသိအမြင်, စွမ်းအင်တွေအများကြီးရရှိခဲ့ - အားလုံးအကျိုးကျေးဇူးများကိုငါသိ၏။ ငါအထူးသဖြင့်အလုပ်နှင့်ကျောင်းမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
ငါအားရှင်းလင်းရန်စိတ်, ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ် 100 မှ0ထံမှထွက်သွား, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန် 100 မှ 20 ထံမှထွက်သွား, manlier ပိုစိတ်ခံစားမှုတယ်, ငါဒီထက်အထစ်အငေါ့, အတော်များများကပိုပြီးအကျိုးခံစားခွင့်
ငါယုံကြည်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ အလင်းရောင်၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်မှု၊ အမျိုးသမီးတွေစွဲဆောင်မှု၊ ခိုင်ခံ့သောစိုက်ခင်းများနှင့်နံနက်သစ်သားများရရှိခဲ့သော်လည်းဒီရက် ၉၀ ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျွန်တော့်မှာ ED ရှိပြီးထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်မှုကိုစဉ်းစားမိသောအခါကျွန်ုပ်ကိုတောင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာမရှိပါ
ငါအစွန်းရောက်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကပိုရိုင်းသောကြောင့်အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ကျွန်မအသစ်တစ်ခုကိုလူတစ်ဦးနဲ့တူခံစားကြရသည်။
ငါ baddddd PIED ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ငါပြtext္ဌာန်းသင်ကြားရေး boobies မှဆုကြေးငွေရတယ်။
ယခုတွင်ငါသည်ရည်းစားရှိသည်နှင့်ငါစျြခွငျးမတ်ေတာအောင်နှင့်သူမနှင့်အတူချိတ်ဆက်ခံစားရမြင့် 1,000x porn မှ wanking ထက် သာ. ကောင်း၏
ငါနုတ်ထွက်ပြီးကတည်းကငါကကြင်နာပြီးမေတ္တာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်လာကြပါပြီ
ငါသည်ငါ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားဘ, ငါ့မိသားစုနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးပြီးပိုကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကို, မိတျဆှေ, ငါ၏အသက်တာ၌အမျိုးသမီးလွန်ကဲပါပြီ။
ငါကျန်းမာအလေ့အထများ, ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဝါသနာ, ယုံကြည်မှု, အချိန်, စွမ်းအင်ကိုတက်ခူးကြအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, စိတ်ကျရောဂါအများစုသှားကွ၏။
ငါဟာလူတစ်ယောက်လို့ခံစားရတယ်၊ ဘဝမှာပန်းတိုင်တွေ၊ မျှော်မှန်းချက်တွေရှိတယ်။
ကျွန်ုပ်သည် Waaay နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလိင်ဆက်ဆံမှုရှိသည် (နည်းနည်းမိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနှင့်စွမ်းအင်)
ငါ peeked ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါအိမ်သာဆင်း 120+ ရက်ပေါင်း (PIED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသမှု) ပစ်ချ - သင့်ကွန်ပျူတာကိုချွတ်!
ငါ့အသက်ကိုကတည်းကသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားတယ်, ငါကိုကျော်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ် NoFap အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေ့လာသင်ယူနှင့်ငါဆိုသည်ကားရန်ရှိသည်။
ငါစာသားကဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင် / လိင်စိတ်နှင့်အတူပေါက်ကွဲနေပါတယ်။ လမ်းကိုပိုပြီးယုံကြည်မှု။ နီးပါးသွားပြီလူမှုစိုးရိမ်စိတ် / ရှက်ကြောက်စိတ်
ငါ 90 နှစ်ပေါင်းကြိုးစားနေပြီးနောက်3ရက်ကဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဤတွင်ကျွန်မ Final ကြှနျုပျရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိကူညီကွဲပြားခြားနားဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာပါပဲ။
ငါမရှိတော့ PIED ရှိသည်နှင့်ငါတစ်ဦးထက်ပိုလူမှုရေးနှင့်တန်ဖိုးရှိရှိလူတစ်ဦးဖြစ်၏။ သငျသညျ porn fuck ဆိုတဲ့။
ငါမရှိတော့လိင်ချက်ချင်းအမျိုးသမီးတွေ objectify ။ ယခုတွင်ငါသည်နီးပါးဘယ်တော့မှအထီးကျန်ဖြစ်၏။ အများကြီးပျြောရှငျနှင့်အထွေထွေအတွက်အကြောင်းအရာ
ငါလူသစ်တစ် ဦး နှင့်တူသည်။ လူတွေနဲ့စကားပြောရတာပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ပိုမိုယုံကြည်မှုနှင့်စွမ်းအင်။
ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့လေးနှစ်တာအမှောင်ထုထဲမှာနေခဲ့ရပြီ - အခုတော့ငါ့ ဦး နှောက်မြူတွေပျောက်ကွယ်သွားပြီးငါ့ရဲ့စိုက်ထူမှုတွေပြန်ရောက်လာပြီ
ငါမဆိုမိန်းကလေးနှင့်အတူလိင်ရှိသည်မဟုတ်နိုင်ကြောင်းဧရာ neuroticism နှင့် PIED ထံမှခံစားခဲ့ရသည်။ ငါရည်းစားရတယ် NoFap အပေါ် 50 ရက်ပေါင်းလိင်ခဲ့နဲ့ကျွန်မမေတ္တာ၌ပေါ့
အပြောင်းအလဲတွေကသိမ်မွေ့ပေမယ့်နက်ရှိုင်းတယ်ထင်တယ် ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်မဟာပျမ်းမျှအားဖြင့်ကြည့်နေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာမိန်းမတွေနဲ့အတူပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိတယ်
ငါ porn စျမယားအဘို့လိုအပ်သောထင်ပေမယ့်ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏တစ်ဦးတည်းသာမျိုးရှိခြင်းခံခဲ့ရ; မျိုးစုံအနေနဲ့ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခဲ့သည်
ငါ porn မပါဘဲစိုက်ထူရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ၃ ပတ်ကြာပြီးနောက်သူတို့ပြန်လာကြသည်။
ငါ "nofap တကယ်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာနို့စို့" စဉ်းစားဖူးတယ်
တစ်ဦးအရှုံးသမားများကဲ့သို့နေထိုင်နေထွက် fogged, စိတ်ဓာတ်ကျ, သတ်သေ, အနုတ်လက္ခဏာနှင့်လူမှုရေးအရစိုးရိမ်: ငါရှုပ်ထွေးခဲ့သည်
အရမ်းလွယ်ကူစွာ A- မှကို C ကနေသွားကြဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင်ငါနီးပါးအရာအားလုံးကိုလုပ်နေအတွက်အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်မြဲဖြစ်၏။
ငါ5နှစ်ပေါင်း porn စွဲခဲ့သည်။ ဒါဟာငါ့ကိုပြင်းထန်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန် ပေး. ငါ့ကိုအလွန်ရှက်တတ်သူတစ်ဦးဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
အစဉ်မပြတ်ငါမိန်းကလေးများနှင့်အတူရှက်တတ်ခြင်းနှင့်မလုံခြုံခဲ့ပါတယ် ... ယခုတိုင်အောင်
ငါအထဲမှာမိမိကိုမိမိမုန်းသောသူသည်မာနထောင်လွှား asshole ဖြစ်ခဲ့သည်
ငါဟာအဝလွန်သူ၊ ရှုံးနိမ့်သူ၊ ချစ်ပ်တွေစားပြီးဂိမ်းကစားနေတယ်။ အခု၊ ခွန်အား၊ လုံလောက်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊
ငါကပိုဆိုး PIED ဖြစ်ပွားမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ porn မပါဘဲ, ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ 1.5 နှစ်
ငါက '10 ကြိမ်တစ်နေ့ 'အမျိုးအစားများထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်အသက် ၂၅ နှစ်ရှိပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ် မှစ၍ စွဲလမ်းနေသူတစ် ဦး ပါ
ကျွန်ုပ်သည် NoFap တွင် ၃ နှစ်တာ ၀ န်ထမ်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်ခံစားခွင့်များစာရင်းဖြစ်ပါသည်
ငါကသားရဲပါ ကျွန်တော့်ဒစ်ကပိုကျန်းမာတယ် နာတာရှည်ဆီးကြိတ်ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်။
ကျွန်ုပ်သည်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ NoFap သည်ရလဒ်များအရအိပ်ယာခင်းမဟုတ်ပါ
ငါက ၁၄ နှစ်မှစ၍ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ nofap ကိုမတွေ့မှီတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်ဘဝသည်ငရဲဖြစ်ခဲ့သည်
ငါ porn မတွေ့ခင်ငါလုပ်ခဲ့ဖူးသမျှတွေကိုလုပ်နိုင်တယ်။ သူစိမ်းတွေနဲ့စကားပြောရတာ၊ များသောအားဖြင့်ပြုံးပြတယ်၊ လေတိုက်တာပဲ…
ငါကဘယ်သူမှထူးခြားတာမဟုတ်ဘူး ၂၁ နှစ်လုံးလုံးစွဲလမ်းနေပြီးသူတစ်ပါးကိုကူညီနေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်။
ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကောင်းလာပြီ၊ အများကြီးအလုပ်လုပ်တယ်၊ အိပ်စက်အနားယူခဲ့တယ်
ငါတစ်နှစ် porn ကိုအခမဲ့နီးကပ်လာပြီ။ ယနေ့ငါလက်ထပ်သည်။
ငါမိန်းကလေးများ (နှင့်လူများ) ပတ်လည်သိသိသာသာစိတ်နည်းနည်းသက်သာသည်။ ငါချစ်တဲ့အရာတစ်ခုခုလုပ်နေတယ်။
ငါကလိင်တူဆက်ဆံသူဖြစ်တယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ PMO အလွန်များနှင့်ငါဖြောင့် porn မြင်နေစိတ်ဝင်စားလာတယ်။ ၁ နှစ်မျှညစ်ညမ်းမှုမရှိ။ အမျိုးသမီးများအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိ
အစဉ်မပြတ်ငါလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူပြhadနာရှိခဲ့ပါတယ်။ NoFap ကိုစကတည်းကငါပိုပြီးပြုံးနိုင်ပြီးစကားစပြောနိုင်သည်
ငါကအခြားလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီ၊ ငါ့ရဲ့စရိုက်၊ အပြောင်းအလဲ၊ ငါ့သဘောထား၊ စကား၊
ငါ6လအတွင်းအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်
ကျွန်ုပ်၏ PIED သည်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီးနံနက်တိုင်းလိုလိုမနက်တိုင်းထင်းရရှိကြောင်းသတိပြုမိသည်
ငါအသက် ၁၈ နှစ်ရှိပြီ၊ ဒါကငါ့ဇာတ်လမ်းပဲ။
ကျွန်ုပ်သည်လိင်တူချစ်သူပါ။ အများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ Porn သွေးဆောင်မှုကြောင့်လက်အောက်ခံခြင်းခံရသည်
ငါလွန်ခဲ့သော3နှစ်ကငါအိပ်မက်မက်ဘဝဖန်တီးခဲ့တယ်
ကျွန်မထက်ပိုငါးရာ relapses ပြီးနောက်အခမဲ့ကိုချိုးဖျက်နိုင်ပါလျှင်, ဒါကြောင့်သင် (မြောက်မြားစွာအကြိုးကြေးဇူးမြား) နိုင်
Jedi ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဘယ်လိုတွေ့မယ်၊ စဉ်းစားမယ်၊ ဘယ်လိုဆက်ဆံမယ်ဆိုတာမြင်ယောင်ကြည့်ပါ
တိုးတက်လာသောယုံကြည်မှုလျှော့လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, အမှုအရာ, ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့စားချင်အပေါ်ခုတ်လှဲနိုင်ပြုသောအမှုပဲ
နှစ်လမှာကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကတကယ်ပြောင်းလဲလာတယ်။ ငါအမြဲတမ်းပျော်နေမှာပါ၊ လူအများကသူတို့ကိုငါဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်ဆိုတာတောင်မှငါ့ကိုတောင်ပြောလိမ့်မယ်
အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်တိုးမြှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုပိုမိုသောအချိန်, စွမ်းအင်, ယုံကြည်မှု, အာရုံစိုက်
စိတ် ၀ င်စားမှုတိုးပွားလာခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကောင်းခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းသက်သာခြင်း၊ ဘဝကိုတန်ဖိုးထားခြင်း
တိုးမြှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှု, ပိုကောင်းတဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်, လျော့နည်းအခြိနျဆှဲ, မပိုပျင်းခံရ, နှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပိုပြီးစစ်မှန်တဲ့
စွမ်းအင်တိုးမြှင့်။ အစစ်အမှန်အမျိုးသမီးများအတွက်ပိုမိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတိုးလာစေတယ်။ ပိုမိုအာရုံစိုက်
ပြင်းထန်သော orgasm! (65 ရက်ပေါင်း pornfree ပြီးနောက်)
ဒါဟာ NoFap ငါ၏အစိတ်ကျရောဂါနှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာအချို့မျိုးနှစ်ဦးစလုံး fixed မူကြောင်းကိုပုံပေါ်ပါတယ်။
ဒါဟာငါအရမ်းပျော်ရွှင်ခံစားရသည် blinders ချွတ်ယူပြီးကဲ့သို့ဖြစ်၏
အဲဒါတွေအားလုံးထိုက်တန်ပါတယ်။ လိင်အဘယ်သူမျှမ porn 12 ရက်အကြာမှာသိသိသာသာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာခဲ့သည်
သင်၏ဘ ၀ ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်ဘယ်တော့မှနောက်ကျမည်မဟုတ်
နှောင်းပိုင်းတွင် 30s -a ဘဝနှင့်အိမ်ထောင်ရေးပြန်လည်မွေးဖွား: ကျွန်ုပ်တို့၏ 90 နေ့ခက်-Mode ကိုအောင်မြင်ပါသည်!
ပိုပြီးရယ်မောပါ၊ အများပြည်သူအတွက်စိတ်နည်းပါးသည်။ နံနက်သစ်သားသည်ပြန်လာပြီ။ ခံနိုင်ရည်တိုးစေသည်
ပျင်းရိခြင်း အဲဒါဘာလဲ? ကြောက်လန့်သလား ယုံကြည်မှုသို့လှည့်!
ငါ၏အ trans ဆိုတဲ့ fetish porn- သွေးဆောင်ခဲ့လေ့လာသင်ယူ ...
, ကျန်းမာသန်စွမ်း, ပိုကောင်းလျော့နည်းတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်စိတ်ဖိစီးအခြေအနေများကိုင်တွယ်, သာယာတဲ့နည်းဒေါသထွက်နေတဲ့ကြည့်ရှု
လူမှုရေးပူပန်မှုလျော့နည်းလာခြင်း၊ ပို၍ ယုံကြည်မှုပိုရှိခြင်း၊ ငါ့ကိုစစ်ဆေးနေသောမိန်းကလေးများပိုမိုများပြားလာခြင်း၊
ဘဝဟာအဆုံးမဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဘဝ။ ပိုမိုအားစိုက်ခြင်းနှင့်ရောင်စုံ။ အမျိုးသမီးများသည်လူသားများသာဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့ကလှပသောအရူးပါပဲ။
အဘယ်သူမျှမကဦးနှောက်မြူ, တိုးမြှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှု, လျှော့ချစိတ်ကျရောဂါမှ Little က, လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်လျှော့ချပိုမိုငါ့ကိုပေါ် မူတည်. မိန်းကလေးများ
4 ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်လိင်တူချစ်သူ porn အတွက်အကျိုးစီးပွားဆုံးရှုံး
35 ပေါင်ဆုံးရှုံးအများကြီးပိုပြီးယုံကြည်မှုဖြစ်လာခဲ့သည်, အဘယ်သူသည်မိတျဆှေ-ဇုန်ဆီသို့ငါ့ကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမိန်းကလေးကဆင်းလှည့်
အဆိုပါ V ကိုကဒ်ပျောက်ဆုံးသွားငါ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်အားကစားရုံ၌ကြီးသောအကျိုးအမြတ်
စွမ်းအင်အများကြီး။ အခုတော့ငါဘယ်တော့မှငြီးငွေ့တော့မည်မဟုတ်။ ဦး နှောက်မြူမရှိတော့ပါ ငါအလွယ်တကူမည်သူမဆိုနှင့်အတူစကားလက်ဆုံကျင်းပနိုင်သည်။ လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ပျော်ရွှင်ခြင်းခံစားရတယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်-အောင်ကျွန်တော့်ဇနီး (နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို "မေတ္တာ" ကိုအလေးပေး) နဲ့နေ့စဉ်ပိုပြီးအံ့သြစရာဖြစ်လာ
အဆိုပါ flatline ကနေတဆင့် လုပ်. , ယခုအမျိုးသမီးများ၏စာရေးတံပူကိုကြည့်
မတော်တဆဟောင်းရှစ်နှစ်မှာညစ်ညမ်းစွဲဖွစျလာသူက Man (Metro ဗြိတိန်) စွဲအခမဲ့
သင့် ဦး နှောက်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ဘဝကိုစီမံပါ
အတော်များများကအကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့နောက်ဆုံး 154 ရက်ပေါင်းဤမျှလောက်ပိုပြီးအသက်တာကိုခံစားခဲ့
လက်ထပ်ထိမ်းမြားလက်ထပ်ထိမ်းမြား ... ဤမျှလောက်ပြန်သွားပါ, နောက်ဆုံးတော့တိုးတက်
လက်ထပ်ထိမ်းမြား - လွန်ခဲ့သောသုံးလတာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်ဘဝသည်တကယ်ပြောင်းလဲသွားပြီ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတော်တော်များများတိုးတက်လာပါပြီ
လက်ထပ်ပြီးနှစ် ၂၀ နီးပါး - ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြည့်ဝခြင်းကဘာလဲဆိုတာကိုယခုငါသိပြီ
အိမ်ထောင်သည် / ဖခင်: အစွန်းရောက်အမျိုးအစားများသို့ဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ ငါ kinky လိင်အဘို့အဘယ်သူမျှမကနောက်ထပ်အလိုဆန္ဒများရှိသည်။ ဒါဟာယခုလွင်ပြင် vanilla ဖြစ်ပါတယ်။
ညစ်ညမ်းမှုမရှိဘဲအောင်မြင်စွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း - ငါကညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲသစ်သားဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုကြိုးပမ်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သည်၊ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းစိတ်ကူးဖြင့်သာအသုံးပြုခြင်းကိုသုတ်သင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
အဓိပ္ပါယ်ရှိသောခင်မင်ရင်းနှီးမှု / ဆက်ဆံရေး၊ ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးမိမိကိုယ်ကိုဖြစ်လိုသောဆန္ဒ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသားအရေ၊ shi wack
Medical Doctor - ဒီ No fap ကကျွန်တော့်ကိုဆရာ ၀ န်ကောင်းတစ်ယောက်၊ လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော် ၁၀၀% သေချာပါတယ်။
ဇနီးနှင့်အတူစိတ်ထဲရှင်းလင်း, ယုံကြည်မှုတက်, ကြားဆက်ဆံရေးပိုကောင်း
စိတ်နေသဘောထားသည် ပို၍ တည်ငြိမ်။ ပျော်ရွှင်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုပိုမိုချစ်မြတ်နိုးသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိသည်
ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချ။ စာနာမှု၏အဓိပ္ပာယ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ပိုကောင်းတဲ့လူမှုရေးအပြန်အလှန်နှင့်မျက်စိ-အဆက်အသွယ်။ လိင်အရင်ကထက်လမ်း သာ. ကောင်း၏။
ပိုများသောစွမ်းအင်, မဟာယုံကြည်မှု, လျှော့ချဦးနှောက်မြူ, အထွေထွေကောင်းသောစိတ်ဓါတ်များ, အမျိုးသမီးအာရုံစူးစိုက်မှု, တိုးတက်ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေး
ပိုများသောဖြေလျော့ပေးခြင်း, ပိုမိုအမျိုးသမီးအာရုံစူးစိုက်မှုနည်းကြွက်သားတင်းကျပ်စွာ, DE သွားကြောင်း
နံနက်သစ်သားနှင့်ပိုမို organically သွေးဆောင်နှင့်ပိုမိုအားကောင်းစိုက်ထူ
တစ်ဦး DGAF သဘောထားအများကြီးပိုဒဏ်ခံ, အလုပ်သစ်ပို
1F လကြာ NoFap စမ်းသပ်မှုရလဒ်များ - ကျွန်ုပ်သည် NOFAP သည် ၁၀၀% ဘဝပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ကြောင်းယခုကျွန်ုပ် ၁၀၀% ယုံကြည်သည်
အကြှနျုပျ၏ 365 + တစ်ရက်မျှမ FAP ခရီး
ကျွန်ုပ်၏ရက် ၉၀ အောင်မြင်သောဇာတ်လမ်း - ၉၁ ရက်မှာလက်ထပ်ခဲ့တယ်
ငါ့ရည်းစားမကြာသေးမီက Pornfree သွားလေ၏ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သေပြီအိပ်ခန်းကိုလုံးဝပြင်လိုက်တယ်။ (ဤသည်ကိုလူသိများသည်အထိတုန်လှုပ်သွားသည်။ )
အကြှနျုပျ၏ဦးနှောက်မြူ, မဟာ Self-ယုံကြည်မှုသွားကြောင်းဖြစ်ပါသည်, Less လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, အမျိုးသမီးများနှင့်အတူဆက်သွယ်မှုသည်အပြုသဘောအလှည့်အဘို့သိသိသာသာပြောင်းလဲထားပါတယ်
ငါ့အစ်ကိုပဲ porn အကြောင်းကိုငါ့ကိုသတိပေးခဲ့သည်
အကြှနျုပျ၏ cam စွဲငါ့ကိုဒေဝါလီခံခဲ့ရသည်
ကျွနု်ပ်၏လိင်အင်္ဂါများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှုပ်ထွေးမှုမရှိတော့ပါ။ ငါသည်လည်း PMO အားဖြင့်ဆောင်ခဲ့စိတ်ကျရောဂါ & စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိခဲ့ပါတယ်
ငါ့သူငယ်ချင်းတွေကငါ့ကိုပိုပြီးယုံကြည်တယ်၊ ရည်းစားတစ်ယောက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်အဓိကကျသောအရာမဟုတ်ပါ၊ အဆင့်မြင့်၊ ပို၍ လှုံ့ဆော်ခံရသည်
ကျွန်မခင်ပွန်း 90 ရက်ပေါင်းရောက်ရှိ
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာအရမ်းရှင်းပါတယ်၊ ၂ လမှာ NoFap ကိုရာထူးတိုးမြှင့်လိုက်တယ်
ငါ့ရဲ့သဘာဝကပြန်လာပြီ ငါနောက်တဖန်အစစ်အမှန်အတွေ့အကြုံများကိုတပ်မက်; တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကမကူညီပါဘူး
ကျွန်ုပ်၏ NoFap ခရီးစဉ်: သူကပြောတယ်၊ အဲဒါငါ့အတွက်ဖြစ်ခဲ့သမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးပဲ
ကျွန်ုပ်၏လျှို့ဝှက်ပြproblemsနာဟောင်းများသည်တစ်ညတည်းပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိ - ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်များကိုပိုမိုထင်ရှားစွာခံစားမိစေသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်၏လိုအပ်ချက်များကိုပိုမိုသိရှိနားလည်လာသည်။
ကျွန်တော့် PIED ပျောက်သွားပြီ ကျောက်တုံးလိုခဲယဉ်းတယ်။ လိင်သည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ နောက်တဖန်ဝမ်းနည်းစိတ်ဓာတ်ကျခံစားချက်တွေကို။
ငါ၏အညစ်ညမ်းစွဲ cheat ဖို့ကျွန်မကိုကြကုန်အံ့။ ငါနီးပါးသူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ငါ့အသက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရ
ကျွန်မရဲ့ညစ်ညမ်း ED ကပျောက်ကွယ်သွားပြီ၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုတွေကပိုကောင်းတယ်၊ ဆေးတွေလုံးဝမလိုအပ်တော့ဘူး
အကြှနျုပျ၏ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲပုံပြင်နှင့်အဘယ်သို့ငါဒါဟာ မှစ. သင်ယူခဲ့
လိင်နှင့်ငါ့ပြသနာများပျောက်သွားပြီ။ ရင်းနှီးမှု = ၁၀၀၀၀%၊ ၀ ါဒဝါဒ = ၉၈% သွားပြီ၊ PIED = သွား၊ စိတ်ကူးယဉ်မပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်သလား။
ကျွန်တော့်ရဲ့ reboot ကစိန်ခေါ်မှု၊
ငါ၏အ SO နဲ့ငါ့ကြားဆက်ဆံရေးအစဉ်အဆက်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ လိင်ရှင်းရှင်းကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တိုးတက်ဖြစ်ပါတယ်။
My self-ယုံကြည်ချက်နှင့် Self-လေးစားလောက်မရှိတဲ့တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ငါအများကြီးတန်ဖိုးထားတော်မူသောလူများ, အတူချိတ်ဆက်ဖို့စတင်ခဲ့တယ်။
ကျွန်မရဲ့လိင်ဘဝကတော်တော်တိုးတက်လာတယ်။ orgasms ပိုမိုပြင်းထန်သော, လိင်ပိုမိုရငျးနှီး
ကျွန်ုပ်၏လိင်ဘဝသည်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီး (ယခုထိတိုးတက်လျက်ရှိသည်) ။ ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တို့ယခုကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကထက်ပိုမိုနီးကပ်စွာရှိကြသည်
အကြှနျုပျ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိလေသာနှင့်အလိုဆန္ဒသည်ယခုအခါပုံမှန်အဆင့်ပြန်ရောက် reconfigured နေကြတယ်
ငါ့အရသာ softcore မှ BDSM နှင့် trans သို့သွားသည်။ ငါတော့်အသည်းအသန်ညစ်ညမ်းသောပုံမပေါ်တော့ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ကုထုံးဆရာကကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကကျွန်ုပ်၏ OCD ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလွှမ်းမိုးခဲ့သည်ဟုယုံကြည်သည်
လိင်နှင့်ရငျးနှီးမှုနှငျ့ ပတျသကျ၍ ကြှနျုပျ၏အတှေးအချေါမြားတှငျသဘာဝြဖစ်သည်
Sissi fetish ငရဲအားဖြင့်, ငါ၏လမ်းငါ့ဘဝ၏ဒီတော့ယခုပွညျ့စုံစများနှင့်ပျော်ရွှင်ခံစားရ၏။
sissy ငရဲမှတဆင့်ငါ့လမ်း။ ငါ့ဘဝကအခုပြည့်နေပြီ၊
ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်မနောက်ဆုံးညဥ့်ပတ်ပတ်လည်ကကျနော်တို့ yrs အတွက်ရှိခဲ့ပါတယ်ကိုအကောင်းဆုံးကဲ့သို့ဖြစ်၏အနည်းငယ်ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းနေသော်လည်းအရူးလုပ်!
NoFap ကိုစကတည်းကအသစ်သော၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရာများနှင့်လူများကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုရောက်လာကြသည်
နယူးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း, ပိုကောင်းတဲ့အိမ်ထောင်ရေး, ကူညီပေးခဲ့သည် acountability အုပ်စုတစ်စု
လိင်ခြားသူကိုလေးလေးစားစားဆက်ဆံခြင်း၊ ခံစားချက်တိုးတက်ခြင်း၊ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအဆင့်သို့ချိတ်ဆက်ခြင်း
ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်း၊ စွမ်းအင်မြင့်မားခြင်း၊ ယုံကြည်မှုမြင့်မားခြင်း၊ လူမှုရေးစိတ်ပူပန်ခြင်းမရှိခြင်း၊
ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှုပိုရှိခြင်း၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုအနည်းငယ်မျှနှင့်ကျွန်ုပ်စကားလက်ဆုံပြောဆိုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်
နောက်တဖန်အဆယ်ကျော်သက် kissless ကညာ
စိတ်လှုပ်ရှားမှုကင်းမဲ့သောဖုတ်ကောင်၊ ခေါင်မိုးပေါ်မှယုံကြည်စိတ်ချမှု၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများ၊ စွမ်းအင်များစွာမရှိတော့ပါ
အလုပ်မှာစိုးရိမ်စိတ်, အဘယ်သူမျှမ brainfog / ပြတ်သားဘယ်သူမျှမပို, ယခုမိန်းကလေးငယ်များဖို့ပြောနေတာမျှမျှတတယုံကြည်မှုခံစားရ, မိန်းကလေးများအနေဖြင့်မဟာစိတ်ဝင်စားမှု
ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားခြင်းမရှိတော့ပါ၊ မှတ်ဉာဏ်သည် ၁၀ ဆပိုကောင်းသည်၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများလျော့နည်းသွားသည်
သုက်လွှတ်မှုနှောင့်နှေးခြင်းမရှိတော့ပါ။ NO PORN ၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်နောက်ဆုံးတွင်လိင်၌ပေါ်လာသည်။
ED၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စွမ်းအင်နိမ့်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏လိင်ကိုသံသယမရှိတော့ပါ။
အဘယ်သူမျှမကပိုအနီရောင်, ကုန်ကြမ်းဝီလီ; ယုံကြည်မှု၊ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေပိုကောင်းတယ်
လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုသို့မဟုတ်စိတ်ကျဝေဒနာမရှိတော့ပါ။ စွမ်းအင်များများလေ။ ငါမိန်းကလေးများနှင့်စတင်စကားပြောစတင်ခဲ့ပြီးနှင့်မိန်းကလေးငယ်များငါ့ကိုစကားပြောစတင်ခဲ့သည်။
အဘယ်သူမျှမလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်မှပိုမိုအာရုံစူးစိုက်မှုကို။ ဦး နှောက်မြူစရာမရှိပါ တိုးမြှင့်လှုံ့ဆျောမှု & လုံ။ ယုံကြည်မှုတိုးတက်လာသည်
NoFap - ကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ PIED နှင့်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်မှုကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ကုသခဲ့သနည်း
3 ရက်သတ္တပတ် NoFap ကိုကုစား Porn-သွေးဆောင် ED
NoFap ငါ၏အ ED Fixed
NoFap (ပုံဆောငျသဘောအရစကားပြော) ခြွင်းချက်အရွယ်အစားဘောလုံးနှင့်ငါ့ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ထားပါတယ်
Nofap သည်သူ PIED အတွက်အကောင်းဆုံးကုသမှုဖြစ်သည် - ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အကောင်းဆုံးလိင်အတွေ့အကြုံဖြစ်သည်
NoFap အစစ်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါအကျိုးကျေးဇူးများကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ကြှနျတေျာ့အတှေ့အကွုံ။
NoFap: မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူထက် သာ. ကောင်း၏လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုအကြိုးခံစားခှငျ့
ကျွန်ုပ်၏အပြုအမူများ၊ ဘဝအလေ့အထများ၊ ဆက်ဆံရေးများနှင့်အလုံးစုံသုခချမ်းသာတိုးတက်မှုအချို့ကိုသတိပြုပါ
အခုတော့ငါမာနထောင်လွှားသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး အဖြစ်ထွက်နှင့်အကြောင်းကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အများပြည်သူနေရာများကြောက်ရွံ့ခဲ့ရသည်။
ယခုငါဆွဲဆောင်မှုအမြိုးသမီးမြားနှငျ့စကားပွောဖို့ pumped ခံစားရတယ်
အခုတော့ PIED ကငါ့စိတ်ကိုတောင်မဖြတ်နိုင်ဘူး
Med ကျောင်းသို့သွားသည်။ NoFap သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်
PIED အပေါ် Old Mark Manson vid
Autism Spectrum တွင် - ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်ခြင်း (ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူး)! ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုပိုရှိ၊
တစ်နှစ်အစီရင်ခံစာ: နံနက်ခင်းသစ်သားပြန်လာသည်၊ စိုးရိမ်စိတ်နည်းသည်
ယေဘူယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် ၀ မ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ပြည့်နေပါသည်။
2 အတိတ် (NoFap ၏) လအတွင်း5နှစ်အတွင်းအကောင်းဆုံးခဲ့ကြသည်
PIED - ရက်ပေါင်း ၄၀ အတွင်းမှာ“ ဒီလိုခိုင်မာတဲ့စိုက်ထူမှုမျိုးကျွန်မတစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူးလို့ငါကျိန်ဆိုတယ်။ ”
PIED - စိုက်ထူမှုတွေတိုးတက်လာတယ်၊
PIED - ငါစိတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ကိုစတင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူကကျွန်တော့်ကို nofap ဆီလာဖို့အကြံပေးခဲ့တယ်
PIED - ငါကလိင်ကိုနှစ်သက်တယ်၊
PIED - အခုတော့ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်နေရပြီးတကယ့်ကိုအော်ဂဇင်ရတယ်။
PIED - ငါစိုးရိမ်တာတောင်မှအခုအလုပ်လုပ်တယ်။ ဒါဟာကျိန်းသေ porn ပဲ!
PIED - အောင်ပွဲခံရန်လမ်း - သမားရိုးကျပြန်ဖွင့်ခြင်းအစားထိုးနည်း
PIED - ခိုင်မာသောကျောက်၊ ပိုမိုထိခိုက်လွယ်ပြီးအော်ဂဇင်သည်ပြင်းထန်သည်
PIED cured - နှစ်ဝက်လောက်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးသောအခါကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ခြေကျင်းကိုမြင်လျှင်စိန်ဖြစ်သည်
PIED cured - ရင်နင့်စေတဲ့သူတွေဟာဘယ်ဘက်နဲ့ညာဖက်မှာဖြစ်တတ်ပါတယ်၊
PIED cured - ပြ--နာမရှိတဲ့ကောင်မလေးနဲ့တသမတ်တည်းလိင်ဆက်ဆံတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှားတာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောဖို့ဆရာဝန်တွေအတွက်ကျွန်တော်ပိုက်ဆံတွေသုံးခဲ့တယ်
PIED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ခဲ့တယ်။ အမျိုးသမီးတွေကပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်၊
PIED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ - ငါလူသစ်ကဲ့သို့ခံစားရတယ်။ ငါလူမှုရေးအခြေအနေများတွင်ယုံကြည်မှုခံစားရသည်။ စိုးရိမ်ခြင်းမရှိတော့ပါ။ ငါအများကြီးပိုပြီးရယ်မော။
PIED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ - ယခုငါလူသစ်တစ်ခုလုံးပါပဲ။ လိင်မှုကိစ္စသည်ထိပ်ဆုံးကဖြစ်သည်။ အံ့သြဖွယ်ချစ်သူ
PIED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ခြင်း - လိင်ကိစ္စဟာအံ့သြစရာပဲ။ ငါပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ပြallနာအားလုံး။
PIED သည် ပို၍ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏အမျိုးသမီးကိုပိုမိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာစေသည့်အပြင်မျက်လုံးချင်းထိပါ
PIED PE ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ, PA ဆိုပြီးပျောက်ကင်းအောင်ကုသ, ကုသ
PIED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ: ငါထွက်အောင်နေဖြင့်စိုက်ထူရ။ ထိုသူတို့ကသိပ်ကြာကြာကြာရှည်!
PIED ကုသပေးခဲ့၏။ အဘယ်သူမျှမကပိုနာတာရှည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်။ ကမ်ဘာပျေါတှငျအလှဆုံးမိန်းကလေးတယ်။ ငါကပိုအစစ်အမှန်မိတ်ဆွေတွေကိုရှိသည်။
PIED သွားပြီ - ၂ နှစ်ထပ်ခါထပ်ခါပြန်ဖြစ်ပြီးနောက် ... ငါပြန်ရုတ်တရက်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ငါကတိုးတက်မှုရှိသေးတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ခဲ့တယ်
PIED သွားပြီ - ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာငါတို့ဘ ၀ ရဲ့အကောင်းဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံခဲ့ရတယ်
PIED သွားပြီ; ငါ၏အရည်းစားစိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ပါသည်
PIED ပျောက်ကွယ်သွားပြီ အစစ်အမှန်လိင်ယခု soooo အများကြီးပိုကောင်းခံစားရတယ်
PIED သည်အနာပျောက်စေသောရောဂါ - ၁၂ နှစ်ညစ်ညမ်းမှု၊ ၁၀ နှစ်သေခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ဆိုးဝါးသော fetishes များ
PIED တိုးတက်မှု - ၇ နှစ်အတွင်းလိင်ဆက်ဆံမှု ၅၀-၇၅ ခုအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးကွန်ဒုံးအော်ဂင်စ်နှစ်မျိုးကိုပြုလုပ်သည်
PIED လုံးဝပျောက်သည် ဖြစ်. , ကိုအောင်မြင်စွာအဘယ်သူမျှမကူးယဉျလိုအပ်သောနှင့်အတူ3မိန်းမနှင့်လိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။
PIED ယေဘုယျအားစိုးရိမ်ပူပန်မှုလျော့ထားပါတယ်, ငါ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ရှင်းလင်းဖြစ်ပါသည်, အိပ်ခန်းထဲမှာတော့ပူပန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်သွားပြီ
PIED မဟုတ်တော့တဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ပိုများသောသတိပေးချက်။ ပိုကောင်းတဲ့လိင်။
PIED အစစ်အမှန်ဖြစ်၏ porn (မတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ) ကိုရန်သူဖြစ်ခဲ့သည်။ အခုတော့ LT ဆက်ဆံရေးအတွက်, အလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှု 6-ကိန်းဂဏန်းလစာပေးရန်ဦးဆောင်
PIED ဖြောင့်သွားကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏စေ့စပ်ထားသည့်လိင်ဘဝသည်ဘယ်သောအခါမျှပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်မဟုတ်ပါ
PIED Gone ဖြစ်ပုံရသည်။ ငါဘဝ၌အောင်မြင်ရန်ရည်မှန်းချက်ရှိသည်။
PIED, DE သွားပြီ - ငါတစ်ယောက်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ပဲ
PIED, Femdom fetish - အခုငါတို့လွှမ်းမိုးနေတဲ့နေရာမှာငါတို့လည်းလိင်ဆက်ဆံနေပြီ
PIED: porn-အခမဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုငါ့ကို desensitize, ဒါပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားနှစ်ဦးစလုံး
PIED - ငါကကျူးလွန်မိတဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောလိင်ဘဝ၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်၊
Porn စွဲ… (အလေးအနက်ထားဆွေးနွေးရန်) - YOUTube - FOUSEY
Porn က Limp ခေါက်ဆွဲတစ်ချောင်းကိုပေးပြီးကမ္ဘာကိုဘာကြောင့်ပြောပြရတာလဲ (ဗီဒီယိုက Gabe Deem)
Porn သည်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသော fetishes များကိုပေးသည်။ ငါရှိခဲ့သည့်အသေးအဖွဲများပင်ယခုလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီ
porn ဘဝကနေစိတ်ကို numbing အဆက်ဖြုတ်ဖြစ်ပါသည်
Porn ကသင့်အား NPC (Playable Non Character) ကိုအသုံးပြုပြီးအခြားသူများကပျော်စရာကောင်းသည်ကိုကြည့်သည်
porn သည်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်မည့်အစားကြည့်ခြင်းကိုပိုနှစ်သက်သည်
Porn-ED သွေးယိုခြင်း - ရောဂါပျောက်ကင်းလုနီးပါး။ အောင်မြင်သောလိင်
porn-သွေးဆောင် ED အစဉ်အမြဲ porn ဖြတ်ခြင်းဖြင့်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ 100% ရှိနိုင်ပါသည်
Porn-ED ဆေးမှုကပျောက်ကင်းသွားသည်။ မရေမတွက်နိုင်သည့်ဆက်နွှယ်မှုမရှိကြောင်းသင်ခန်းစာယူခဲ့သည်။
Porn-ED ပြုသောကုထုံးသည် - ကျွန်ုပ်သည်မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေသည်ဟုထင်ပြီးလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကဤအဖြစ်အပျက်ကိုစိတ်ကူး။ မရခဲ့ပါ
Porn-ED ပြုသောကုထုံးကိုကုသခြင်း - ကျွန်ုပ်စလုပ်တုန်းကမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့သည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်
ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ porn-သွေးဆောင် ED: ခြုံငုံခံစားမှုပိုကောင်းနှင့်ပျြောရှငျ
porn- သွေးဆောင် ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ။ ဘဝဟာအံ့သြစရာပါပဲ။
Porn-ED ပြုသော ED သည်နောက်ဆုံးတွင်ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ဆေးများသည်ရပ်တန့်သွားသည်
ထုတ်လုပ်မှု၊ ဖန်တီးမှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ စုစည်းမှု၊ စိတ်အပြောင်းအလဲများနည်းပါးခြင်း၊
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖြတ်ခြင်းကကျွန်ုပ်၏ချိုင့်ဝှမ်းကိုကုသပေးခဲ့သည်။ ငါ့အတွက်ပြtheနာကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမဟုတ်ဘူး၊ ညစ်ညမ်းတယ်
ညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်ဆေးများသည်အလွန်တိုတောင်းသောအချိန်တွင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်
porn ဖြတ်ငါတတ်နိုင်သမျှခဲ့မထင်ခဲ့ဘူးတစ်ခုခုဖြစ်သည့်, အမျိုးသမီးများဆီသို့ငါ့ကိုပိုပြီးယုံကြည်မှုနှင့်ပွင့်လင်းစေတော်မူပြီ
အယ်-ကျွန်မရဲ့ Long ကပုံပြင် Twisted ၏အပြည့်အဝ, နှစ်မြောက်မွေးနေ့နှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားထဲကနေပြန်ဖွင့်
ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှု ၃ နှစ်ပြီးနောက်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်
ပုံမှန် porn အသုံးပြုသူ ၂၅ နှစ် - ရက် ၃၀ တွင် - စိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းစေသည်။ ပိုမိုအာရုံစိုက်ပါ။ စိတ်တိုနည်း
ရော့ခ်ခက်စိုက်ထူခြင်းနှင့်ပိုမ PIED, ယုံကြည်မှု, အမျိုးသမီးအာရုံစူးစိုက်မှု, နည်းစိုးရိမ်ပူပန်
ခက်ယောကျ်ားဘဝ, အမျိုးသမီးများနှင့်အတူသစ်ကို swagger Rock
သူ၏ porn အသုံးပြုမှုသည်သူ၏လိင်အရသာကိုပြောင်းလဲနေသည်ကိုမမြင်နိုင်သောဝမ်းနည်းဖွယ်မှတ်တမ်း
ပိုယုံကြည်မှုလျော့နည်းသွားလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, အမျိုးသမီးများနှင့်အတူအိပ်ရာအတွက်ပိုမိုမြဲမြံစွာ: ဘဝမှာတချို့အဓိကတိုးတက်မှုများကိုမြင်ကြ။
Semi-PIED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးခြင်း - Aprilပြီ လမှစ၍ ပထမဆုံးအောင်မြင်သောလိင် - ယောက်ျားများကကျွန်ုပ်အားလိင် / ရင့်ရင့်မှုက porn ထက် ၁၀၁% ပိုကောင်းသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
Calmess ၏ Sense သည်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်။ တိုးတက်လာသောဦးနှောက်တာပေးနိုင်သည်။ ပြည်သူ့လေးစားပြီးပိုငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ပြင်းထန်သော ED - ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်စိုက်ထူခြင်းသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုကိုမထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်စိုးရိမ်စရာတစ်ခုတည်းမရှိပါ
အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်မှာပြင်းထန်သည့် PIED သည်မိန်းမ ၆ ယောက်နှင့်အတူရှိခဲ့ပြီး၊ ယခုငါလွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတော်တော်များများလိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြပြီ
အလွန်ဆိုးသော PIED ကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ပြီ - ကျွန်ုပ်သည်ယခုအချိန်တွင်လှပသောစေ့စပ်ထားသူနှင့်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အကောင်းဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုရှိသည်
ငါ (သို့မဟုတ် porn လိုမျိုး) မျှော်မှန်းထားသည်နှင့်တူပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့လိင်ဘာမျှခဲ့သည်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုတိုးတက်မှု; မာစတာအစီအစဉ်အတွက်အင်တာဗျူးရိုက်ချိုး
ဦး နှောက်၊ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအသံ၊ လူသစ်များကျွန်ုပ်နှင့်စကားပြောကြသည်
porn လိင်ရပ်တန် (10 နှစ်ပေါင်းလက်ထပ်) အံ့သြဖွယ်ခဲ့ကတည်းက
အချို့က၎င်းကိုအောင်မြင်မှုဟုခေါ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်တိုးတက်မှုဟုခေါ်သည်။ ရဟန်းသံmodeာကိုလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်ရှင်သန်ခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်
တစ်နည်းနည်းနဲ့ငါမနေ့ကဒဏ္ဍာရီ 90 ရက်ပေါင်းရောက်ရှိ
တစ်ခုခုပြောင်းလဲသွားတယ်၊ ငါ့ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားဒါမှမဟုတ်ငါ့အမြင်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုရန်သူအဖြစ်ကြေငြာချင်ပါတယ်။
Suicide ideation လုံးဝနီးပါးသွားပြီ: ဤကြီးမားသောအံ့အားသင့်အားဖြင့်ငါ့ကိုယူခဲ့ပါတယ်။ အတော်များများကပိုအကျိုးခံစားခွင့်။
ပြောဆိုခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်းသုညမရှိ၊ ငါစိတ်ပိုင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားကောင်းပါတယ်
ဆယ်ကျော်သက် - စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်အမျက်ဒေါသပြgoneနာများပျောက်ကွယ်သွားသည်
ဆယ်ကျော်သက် - ငါတစ်နေ့လုံးလိင်ဆက်ဆံဖို့အိပ်မက်မက်ခဲ့တဲ့အဲဒီချိုသာတဲ့ကောင်မဖြစ်ခဲ့ဘူး
Nofap ခရီးမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, ယနေ့ငါ, ငါ၏ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရတယ်
ငါသည်ငါ့ GF အတွင်း၌လက်စသတ်သောနေ့။ ငါသံသယများစွာရှိသည်။
fetish ဆုံးရှုံးမှု - ယခုကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုကောင်းလာနိုင်သည်
ဒီ 90 ရက်ပေါင်းကြုံတွေ့င့်အရေးအပါဆုံးအကြိုးစိုးရိမ်ပူပန်ဖယ်ထုတ်ပစ်သည်။
တကယ်ယခုငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းလိင်၏တစ်ခုတည်းသောမျိုး, တူကယ့်ကို vanilla, ရင်ခုန်စရာတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်
ညစ်ညမ်းမှုသည်အမျိုးသားများ၊ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းများ၊ အလုပ်အကိုင်များ၊ မိသားစုများနှင့်ဆက်ဆံရေးအတွက်အလွန်ဆိုးရွားသည်
healthyုံကျစ်လစ်ကျန်းမာသောအပေါက် / fetishes များရှိသော်လည်း sissy hypno သည်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော့်ကိုယုံကြည်ပါ
ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း ၉၀ လုံးလုံးပြည့်စုံပြီးငရဲပဲ
တစ်နှစ် NoFap မှသင်ယူခဲ့ရသောအရာသုံးခု (ဗီဒီယိုတို)
အချိန်အဘယ်သူမျှမ FAP နှင့်အတူအလျင်အမြန်အားဖြင့်တတ်၏။ တိုင်းစက္ကန့်ကကျိုးနပ်သည်။
ယနေ့ငါ PMO အခမဲ့ 27 အသက် 33 ရက်ပေါင်းဖြစ်၏။ သတ်သေ၏အဘယ်သူမျှမကပိုအတှေး။
Trans-porn အရသာ၊ ED - အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုပြီးလွယ်ကူလာတယ်
အကြီးအကျယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအပြင်းအထန်, ဟာသဉာဏ်, စိုးရိမ်ပူပန်မှုလျော့နည်းသွား
PIED ကျော်အောင်ပွဲ - ကျနော့်ရည်းစားနဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်
ဗီဒီယို - ရက် ၃၀ အဘယ်သူမျှမ Fap ရလဒ်များ
ဗီဒီယို - ၆၃ ရက် Nofap (HardMode) မှ PMO မှထိုးထွင်းသိမြင်မှု
ဗီဒီယို - Fap အကျိုးခံစားခွင့်မရှိပါ - ၅ လ၊ ကိုးလ် Morrison မှ
ဗီဒီယို - Nofap ရလဒ်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ။ အဆိုပါသူရဲကောင်းရဲ့ခရီးဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
ဗွီဒီယို - P * O * R * N (ဗီဒီယို) ကြည့်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ။
ဗီဒီယို - Great Femdom Porn စမ်းသပ်မှု - ၁ နှစ်အခမဲ့
ဗီဒီယို - သောမတ်စ်ဖရန့်စစ် - No-Porn နှင့် NoFap - ၂ နှစ်ကြာပြီးနောက် - ၅ မိနစ်ဗီဒီယို
Voice ကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစကားမရှိတော့ stuttering, ချောချောမွေ့မွေ့လာ
၁၇ နှစ်ကြာ porn ကိုကြည့်ပြီး ၁၇ ရက်အကြာမှာငါတိုးတက်မှုကိုမြင်နေရပြီ
NoFap ကိုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဟာ“ စူပါပါဝါ” တွေမရခဲ့ကြပါ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်လာပြီ လိင်သည်ကြီးလှ၏။ PIED ၏နှစ်ပေါင်းများစွာကုသပေးခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ဇနီးကမိန်းမနဲ့တူတယ်။
စိတ်ကျရောဂါကတည်းကရက်သတ္တပတ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကပိုကောင်းလာပြီ။ ငါအများကြီးပိုကောင်းအိပ်ပျော်နေသော။ အဆင့်ကပိုကောင်းတယ်။
နင်ညစ်ပတ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းဘာဖြစ်နေတာလဲ၊ မင်းရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုကိုကောင်းကျိုးအတွက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ - NoPMO ခရီး
အဘယ်သို့ငါတစ် 500 ရက်ကြာ Streak (သင်နားလည်သဘောပေါက်ရန်ရှိသည်ကြီးမားတဲ့အရာ) တွင်လေ့လာသင်ယူပြီးပြီ
ငါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာတွေဖြစ်တဲ့အခါငါ့ရဲ့စိတ်ကပိုပြီးရှင်းလင်းတယ်၊ ငါဟာအာရုံပျံ့လွင့်မှုနည်းတယ်၊ ငါ့ရဲ့ဘ ၀ ကိုတိုးတက်အောင်စွမ်းအင်ပိုပေးတယ်
အဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကို "ခွေးဘီလူး" ရန်အလွန်လွယ်ကူသလဲ
ညစ်ညမ်းမှုမရှိဘဲ, ငါ့ကောင်လေးရဲ့ PIED နှင့် PIDE ရောဂါပျောက်ကင်းနေကြသည်
ဘဝစီမံကိန်းအတွက်အလုပ်လုပ်, အစားပြန်, ငါ့အတိတ်ပြည်နယ်ကိုသွားထက်သေမယ်လို့
သင်သည်အခြားသူများကိုလိင်ဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်မမြင်တော့ပါ။ သူတို့ကိုသူငယ်ချင်း၊ အစ်ကိုဒါမှမဟုတ်ညီအစ်မလို့မြင်တယ်
သင်၌ရှိသောသင်မသိသောစွမ်းအင်နှင့်အရင်းအမြစ်များနှင့်ပါတနာများနှင့်သင်ပါ ၀ င်လိမ့်မည်